Iindidi zeMveliso Ukukhangela - Umboniso wezoRhwebo lwaMazwe ngaMazwe eFlorida
Indawo, ilizwe, ilizwe
3 Daughters Brewing kumvelisi Iimveliso zokutya iZiselo At 3 Daughters Brewing, sikhathalele izinto ezintathu ngaphezulu kwayo yonke enye into: ukuyila ibhiya emnandi, ukwabelana ngayo nabahlobo bethu, kunye nokuxhasa uluntu lwethu. 3 Daughters Brewing yindawo yotywala yobugcisa ebekwe eSt Petersburg, eFlorida. Sibe siphunga kangangeminyaka esi-7 sisiba sesithandathu sotywala eFlorida. Senza eyethu ibhiya, i-cider, i-seltzer enzima, isoda enzima, isangria (iwayini evela kwiidiliya!), Kunye ne-seltzer ye-CBD engengotywala. Sinee-tephu ezingama-42 ezijikelezayo kwimivalo emi-3 eyahlukeneyo esivumela ukuba sinikezele ngendalo entsha kubathengi bethu ngempendulo yesandla sokuqala phambi kokunkonkxa ngaphakathi nangaphandle kwabathengi. Ngo-2019, sazama izinto ezahlukeneyo ezingama-233 kwigumbi lokungcamla. Sithumela ngoku eFlorida kwaye sithumela eFrance nase-EU. Sinikezela ngeemveliso zethu kwiitoti ezisusela kwi-12oz ukuya kwi-32oz kwaye sinesakhono kwileyibhile yabucala. Nceda ubone izixhobo zethu zokwenza iisampulu zephothifoliyo yethu. Singathanda ithuba lokusebenzisana nawe. Ubhiya-Cider - uSeltzer onzima - Isoda enzima - iSangria - Iziselo ezinxilisayo
AABACO Environmental Industries kumvelisi Izixhobo zeMizi-mveliso kunye neeNkonzo Ukuchitheka kokuqulathiweyo Eyasungulwa ngo-1984, i-Aabaco inikezela uluhlu lwe-oyile kunye ne-Chemical Spill Solution & Safety Products kubo bonke abavelisi abakhulu: 3M, DuPont, Honeywell, MSA, Kimberly Clark, Moldex, Pyramex, Ergodyne, Showa Gloves kunye nezinye ezininzi. Sinikezela ngaphezulu kweemveliso ezingama-200,000 kunye nokuthumela ngenqanawa kumaziko ayi-14 okusasazwa kwilizwe liphela. Spill Containment - Isicoci seBio Liquid
Airo Industries, Inc kumvelisi Izixhobo zeMizi-mveliso kunye neeNkonzo Zixhobo zoKwakha Umkhokeli wezinto ezintsha kunye nomvelisi wenkqubo yokuhambisa izinto ezinamabali amaninzi yeeprojekthi zokwakha Iinqwelo - Iinkqubo zokuPhakamisa izixhobo - Izixhobo zoKwakha zoKwakha
Airocide Air Purifier kumvelisi Ucoceko lweTekhnoloji Iinkqubo zokucoca umoya I-Airocide yitekhnoloji yokucoca umoya ephuhliswe yi-NASA. Icocekile i-FDA, kwaye ibonakalisiwe iyasebenza ngokuchasene neentsholongwane, ibhaktiriya kunye neminye imiba yomgangatho womoya kule minyaka ingama-25 idlulileyo. I-Photocatalytic oxidation-Ukucoca umoya ngaphakathi-iTekhnoloji yokuCoca uMoya ephazamisayo
Allied Steel Buildings kumvelisi Izinto zokwakha Izakhiwo esele zenziwe Allied Steel Buildings, Umthengisi owaziwayo ophambili wezakhiwo zentsimbi ezenziwe kwangaphambili kunye neenkqubo zokwakha zesinyithi. Kule minyaka ingaphezulu kwe-17 yamava, inkampani yethu ihambise iiprojekthi zentsimbi ezingama-5,000 kwihlabathi liphela, ihambisa izisombululo zokwakha kumashishini ahlukeneyo, ukusuka kwindiza ukuya kwi-e-commerce kunye nokusasazwa. Izakhiwo zentsimbi ezenziwe kwangaphambili-uBunjineli boKwakha
American Manufacturing Co. kumvelisi Automotive Iimveliso zokuKhathalela iMoto I-American Mfg. Co, usapho lusebenze kwaye lusebenza ngaphezulu kweminyaka engama-25. Unamava ekwenziweni kweZithuthi, uKhathalelo lwaseKhaya kunye neMichiza yezoShishino. Eyaziwayo ngomgangatho kunye nokusebenza kweemveliso zelebheli zabucala kunye neemveliso zeBhaso eliNikezelweyo-iRUDSON, iPurpleTUFF kunye neempawu zeBugOFF. Izipholisi zeZithuthi-Iimveliso zoKhathalelo lweMoto-Ukucoca izisombululo- iindawo ezizenzekelayo
American TelePhysicians: The Home of Digital Healthcare Mnikezi nkonzo IiSayensi zoBomi kunye neTekhnoloji yoNyango Unyango I-American TelePhysicians yinkampani ye-telemedicine ekhokelwa ngugqirha kunye nenkampani yeenkonzo zonyango e-Asia, e-Australia nase-US. Sinomdla kukhathalelo lwezigulana kwaye sisebenza ngokungakhathali ukuzisa umgangatho, ukhathalelo lwempilo olufikelelekayo kubemi kuyo yonke indawo. Kulo nyaka uphelileyo kubonakalise imfuno yokhetho lonikezelo lonyango kwaye iimveliso zethu ziyilelwe ukuxhasa izigulana kokubini kumaziko nasekhaya. Iiklinikhi ezibonakalayo, eziyilwe ngoogqirha, ziye zacinga ngamava ezigulana, indawo / ugqirha / umnakekeli / amava osapho, isidingo sokufumana ixesha lokwenyani kwiimbali zonyango, imfihlo yesigulana, kunye neenkonzo ezincedisayo- ezinje ngemiyalelo ye-e okanye Uvavanyo lwe-EEG ekhaya-idilesi yasekhaya kunye neemfuno zokujonga kude. Itekhnoloji yeTelemedicine iphazamisa ishishini lokhathalelo lwempilo ngendlela elungileyo. Izixhobo kunye nezigulana ngokufanayo zamkela i-telemedicine njengenketho efanelekileyo xa utyelelo lomntu buqu lungenakwenzeka. Singathanda ukwabelana ngombono wethu. Ingxelo esekwe kwi-Elektroniki yezoNyango (EMR) -iNkqubo yokuLawulwa kwabaguli-iSmartClinix - iTelemedicine-iSoftware yezoNyango kunye noPhuhliso lweZicelo
Anderson Connectivity kumvelisi Ukuhamba ngenqwelomoya kunye neAerospace Itekhnoloji yeeNkqubo zoNxibelelwano Anderson Connectivity yinkampani yobunjineli yesathelayithi ebanjelwe ngasese egxile kuyilo, kwimveliso, nasekusebenziseni iinkqubo ze-satcom eriyali ngasemoyeni, emhlabeni nakulwandle. Ukuzonwabisa kwe-Flight kunye neNkqubo yoNxibelelwano-Uyilo lweNkqubo ye-Antenna
Anjon Holdings kumvelisi IiSayensi zoBomi kunye neTekhnoloji yoNyango Izixhobo zonyango Anjon Holdings yenza kwaye ithengise inkqubo yeAnjon Bremer Halo kwihlabathi liphela. Anjon Holdings yinkampani evelisa ikhontrakthi yezonyango evelisa izinto zokufakelwa kunye nezixhobo ikakhulu zamathambo. Inkampani yi-ISO 13485: 2016, MDSAP eqinisekisiweyo kunye ne-FDA ebhalisiweyo. Inkampani ifuna abasasazi abangaphandle kwe-United States kwinkqubo ye-halo. Inkampani ijonge ukumelwa kwentengiso yeeprojekthi zokwenziwa kwemvumelwano ngaphandle kweMelika. Inkqubo yoLungiso loMlomo weSibeleko lwangaphandle-Inkqubo yeAnjon Bremer Halo-IsiVumelwano seKhontrakthi yezixhobo zoNyango- Izixhobo zamathambo-Inkxaso ye-Spine
Argonide Corporation kumvelisi Ucoceko lweTekhnoloji Amanzi kunye neNkunkuma yamanzi Eyasungulwa ngo-1994, i-Argonide inikezelwe kwisayensi kunye nokuveliswa kwemveliso yokucoca amanzi engavelisi nje kuphela ukunambitha amanzi acocekileyo, kodwa kunye namanzi acocekileyo nge-microbiologically. Itekhnoloji yokuhluza yeArgonide kunye neyodwa eyahlukileyo kunye neenkqubo zichaphazela ngokuqinisekileyo amawaka ezigidi zamalitha amanzi kwihlabathi liphela kwiimarike ezininzi ezithe nkqo ukusuka kunyango nakwimveliso ukuya kwindawo yokuhlala kunye nokwamkela iindwendwe. Ngokusebenzisa i-Argonide ye-OEM kunye nenethiwekhi yomthengisi, kukho ithuba elihle lokuba usebenzise imveliso okanye inkonzo apho iteknoloji yokucoca i-Argonide yayiyinxalenye ebalulekileyo. IArgonide iyaqhubeka nokuzama ukwenza ucoco lwamanzi ngezixhobo kunye neepatent eziphefumlelweyo zetekhnoloji ye-NASA (enje ngeNanoCeram® itekhnoloji yokuhluza), ekusebenziseni i-DEAL® kwiinkqubo zokuhlala (Iinkqubo zokuhluza zeCoolBlue®). I-Argonide ime emva kwetekhnoloji yayo njengoko kungqinwa sisiqinisekiso se-IAPMO. I-Argonide yi-ISO 9001: umenzi obhalisiweyo ka-2015. Iimveliso zokuhluza amanzi-UkuCocwa kweManzi aKhaya-Ukuhlalwa kwamanzi kwaManzi-Ukucocwa kwaManzi oRhwebo-Amanzi acociweyo
Armor Screen Hurricane Protection kumvelisi Izixhobo zeMizi-mveliso kunye neeNkonzo Ukukhuselwa Ngumoya Isikrweqe seZikrweqe siyaziwa kwaye siyathenjwa ngabayili bezakhiwo, iinjineli kunye neinshurensi ukubonelela ngokhuseleko oluphezulu nxamnye nezaqhwithi ezimbi. Iimveliso zethu bezisetyenziselwa ukukhusela izakhiwo zazo zonke iintlobo, kubandakanya amakhaya, iivenkile zokutyela, iihotele, iindawo ekuchithelwa kuzo iiholide, izinto zobugcisa ezixabisekileyo kunye nezakhiwo zembali ezivela nakwezona nkalo zomeleleyo zintlanu, iinkanyamba kunye neenkanyamba. Ayizukukhusela kuphela wena kunye nepropathi yakho kumonakalo, ziyakwenza iindawo ezingaphandle ukuba zonwabe unyaka wonke. Ezi zikrini zibonakalayo zenziwe ngombala onzima, owomeleleyo, ozinzisiweyo we-UV othintela imimoya enamandla, ukuqhuba imvula, ukukhanya kwelanga okungaginyisi mathe, kunye neencukuthu, ezibenza bafanele ukusetyenziswa kwiindawo ezijikeleze iiplanga nakwiivaranda. Iindawo zokutyela ezinendawo yokuhlala yangaphandle zithi ngeSikrweqe seZikrweqe, bayibonile ingeniso yabo inyuka ukuya kuma-5% ngexesha leenyanga ezishushu nezinexesha lasehlotyeni. Izikrini zeNkanyamba -Ukuhlanjululwa ngumoya-Izixhobo zoLwakhiwo lwezoRhwebo kunye nezoRhwebo- Izikrini zomoya
ASAR Automated Storage Mnikezi nkonzo Iinkonzo zezeMali nezeNgcali Iinkonzo zokwakha ASAR automated storage sisisombululo esinokuthenjwa, esihlala ixesha elide kwimiceli mngeni emininzi yokugcina abajamelana nayo mihla le. Esi sisombululo sokugcina ngobuchule sinikezela ngokugcina okuphezulu koxinano, ingeniso enkulu kunye ne-ROI, kwaye akukho xesha lingaphantsi ASAR automated storage kwii-marinas zibonelela nge-30-50% yokwanda kwendawo yokubhabha eqhathanisiweyo xa kuthelekiswa nokugcinwa kwemfoloko ngokwesiko, kudala ukubakho kwengeniso ephezulu kunye ne-ROI kwaye kunciphisa kakhulu umngcipheko womonakalo kunye nempazamo yomqhubi. I-ASAR inethuba lokubonelela ngokunyuka okukhulu kwindawo enokusebenziseka, ukunciphisa umngcipheko wobusela kunye nokonakalisa, kunye nokuphucula ukusebenza kakuhle kwegaraji zokupaka, indawo yokugcina iimoto, kunye nendawo yokuthengisa ngokususa indawo yokuqhuba. Ukutshintsha iindlela zesiko zokugcina ngesisombululo esizenzekelayo kunokubanakho ukuphinda kabini inani lezikhongozeli ezigcinwe kwindawo yokuvelisa okanye yokuhambisa ngaphandle kokonyuka, okunyusa ukwanda kwengeniso kunye nexabiso lokuthengiswa kwakhona. Ukwakhiwa koGcino lweMarina eDrystack -Ulwakhiwo lweNdawo yokuHamba ngeenqwelo moya -Ukwakhiwa kwendlu yokugcina izixhobo - Indawo yokugcina izixhobo - Ulwakhiwo lweeOfisi- Inkqubo yoKhuselo loNxweme - Ikhonkrithi ekhazimlisiweyo
Ashley Furniture Industries kumvelisi Impahla zomthengi Izixhobo zasekhaya I-Ashley Furniture yasekwa ngo-1945 kwaye ingoyena Mvelisi mkhulu weHlabathi weFenitshala kunye noMthengisi weFenitshala yeNombolo 1 eMntla Melika. Njengombutho weFanitshala odityaniswe nkqo, sizama ukugqitha kulindelo lwamaqabane ethu nabathengisi kumazwe angaphezu kwe-155 kwihlabathi liphela. Singumvelisi weenkonzo ezipheleleyo kunye nevenkile ethengisa imveliso yeempahla zekhaya ngokupheleleyo. Ukuzimisela komthengisi ngokungagungqiyo kwisitayile, ixabiso, umgangatho kunye nenkonzo kuye kwalungisa ukuthembeka kunye nokuthembela kubathengi bethu kwihlabathi liphela. Namhlanje, iAshley Furniture yasekhaya ineendawo ezingaphezu kwe-1,000 kwihlabathi liphela. Ukuba unomdla ekuthengiseni iimveliso zethu kwivenkile yakho okanye ukufumana ilayisensi yakho yeAshley Furniture Homestore, cwangcisa intlanganiso ukuze uthethe nathi. Imveliso yeFanitshala yaseKhaya - Umthengisi wefanitshala yasekhaya - umThengisi wefanitshala yasekhaya
asphericon, Inc. kumvelisi Iifoto kunye neOptics Iifoto kunye neOptics Ukuzisa imibono ebomini. Ngalo mishini, i-asphericon iyaqhubeka nokutyhala imida yezinto ezinokwenzeka kunye nokuseka amanyathelo amatsha kwihlabathi le-optics. Umnqweno wethu wokuguqula ukuveliswa kwezinto ze-aspheric ngobuchwephesha obutsha butshintsha inqanaba lokuchaneka kunye nomgangatho onokwenzeka. Malunga nenkampani: Eyasungulwa eJena / DE ngo-2001, i-asphericon iye yaphuhliswa yaba yinkokeli yezobuchwephetsha kwicandelo le-asphere und aspheric system yokuvelisa umbulelo ngenxa yobungcali kunye nothando. Itekhnoloji yokuvelisa yamva nje, eqhubeka ngokuqhubekayo isoftware yolawulo lobunini, izixhobo zomgangatho wehlabathi, kunye nabasebenzi abafanelekileyo baqinisekisa ukuba i-asphericon ibonelela abathengi be-750 ngaphezulu kwezisombululo. Siza kukunceda kuyilo lokuqala lwamehlo, ngokwenza kunye nokwaleka, ngokuchanekileyo imetroloji kunye namaxwebhu, kwindibano yeemodyuli ezibonakalayo kunye nokubonakaliswa kwamehlo. Iilensi ze-Aspheric -Iiglasi zamehlo - ii-Optics -Optometry -iPrisms - iiLense zeMizi-mveliso
ASSET Engineering Mnikezi nkonzo Iinkonzo zezeMali nezeNgcali Injineli yombane Umi 2000, ASSET Engineering yinkampani yokubonisana eyaziwayo njengengcali kuyilo lwenkqubo yamandla nohlalutyo. Iqela lethu lixhonywe ziinkokeli zoyilo lwenkqubo yamandla amagqala kunye neqela elikhulayo leenjineli zenkqubo yolawulo. Sinikezela abathengi bethu amashumi eminyaka yamava kuyilo lobunjineli obukhethekileyo, iinkqubo zokukhusela kunye nolawulo, kunye neenkonzo zolawulo lweprojekthi. Abathengi bethu babandakanya iinkampani eziluncedo, abavelisi bamandla abazimeleyo, kunye nabasebenzisi bamandla abakhulu bamashishini kunye namaziko. Ngaphezulu kwe-100 yabathengi abathembele kuyo ASSET Engineering Uyilo olwenziweyo lombane olume uvavanyo lwexesha. Umbane-Izifundo zobuNjineli kunye noHlahlelo-Ubunjineli kunye noYilo-Uyilo lwezixhobo - Ukuphela kobunjineli kunye noYilo- uLawulo lwaMandla -Izicwangciso zokuCwangcisa nokuKhanyisa
Associated Industries of Florida Umbutho ongekho phantsi kukarhulumente Umbutho ongenzi nzuzo Ukuphembelela uRhulumente Ukususela kwi1920, Associated Industries of Florida (AIF) imele imigaqo-nkqubo yempumelelo kunye neshishini lasimahla phambi kwamasebe amathathu karhulumente. Yazi njenge “Ilizwi laseFlorida kwiShishini” kwi-Sunshine Sate, i-AIF ngumbutho wokuzithandela wamashishini ahlukeneyo, ayilelwe ukukhuthaza imeko yezoqoqosho eFlorida elungele ukukhula, uphuhliso, kunye nentlalontle yoshishino kunye noshishino nabantu bakarhulumente. . Ubhengezo lweshishini-iZenzo zoPolitiko
Atlas Specialty Lighting kumvelisi IiSayensi zoBomi kunye neTekhnoloji yoNyango Izibane ezitshintshayo, iiBhetri, iiModyuli kunye neziXhobo zoMbane Atlas Specialty Lighting Ngomnye wabasasazi abakhulu bempahla emiselweyo yeeModyuli, Izibane, ukuNikezelwa kwaMandla kunye neebhetri zebhayomedical zeshishini lezonyango. Ukubonelela ngeemveliso ezisemgangathweni, amaxabiso okhuphiswano kakhulu, kunye nenkonzo ebalaseleyo kubathengi. I-ATLAS inesitokhwe seCermax xenon kwimodyuli yokukhanya ebandayo yomthombo, izibane, unikezelo lwamandla kuninzi lwezonyango, utyando kunye nokusetyenziswa kwe-Endoscopic. yeeMicroscopes, Izibane zegumbi lokuSebenza, iFiber optic, ii-Endoscopes, izixhobo zeBio-Medical, iiProjektha nezinye. Iimodyuli, Izibane kunye neebhetri ziyafumaneka kwizixhobo ezivela: eStryker, eZeiss, eOlimpus, ePentax, eFijinon, eConMed Linvatec, eLeica, eStorz, eSmith nakumtshana, eWelch Allyn, e-EXCELITAS nokunye okuninzi! Izibane zeZonyango -Iibhetri zoNyango-Izixhobo zaMandla oNyango
AVATRADE Mnikezi nkonzo Ukuhamba ngenqwelomoya kunye neAerospace Icandelo lokuhamba ngenqwelo moya kunye nezixhobo I-RFQs elungileyo. Molweni elubala! Eyona ndawo yentengiso kwi-Intanethi yokuthengisa iindawo zokuhamba ngenqwelo moya kunye neendibano. Bhalisa ukhululekile! Iinxalenye zeenqwelomoya zoThengiso -
Avparts International LLC zokusasaza Ukuhamba ngenqwelomoya kunye neAerospace Ukulungiswa kweeNqwelomoya kunye nokuLungiswa AVPARTS INTERNATIONAL LLC yinkampani yokuthengisa nokusasaza ebonelela ngeenxalenye zeenqwelomoya. Isungulwe eMiami, eFlorida eMelika, isicwangciso sexesha elide senkampani siquka imveliso enobuchwephesha bezinto zangoku ukuzisa izinto ezinokuthenjwa. I-AVPARTS ijolise kumabala okuthengisa angaphandle, efuna ukuba ngoyena mthengisi ungcono. Eyona njongo iphambili yenkampani kukusebenza kunye nabaphathi bomoya bamanye amazwe nabasekhaya kunye nolondolozo lwabo lobuchwephesha. Ukubonelela abathengi bethu ngetekhnoloji yakutshanje, ekhawulezayo nethembekileyo ukwanelisa iimfuno zabo ngamanqanaba aphezulu e-inventri. Abathengi bethu bakhetha iAvparts International ngokusekwe kudumo olunxulumene nokhuseleko oluye lwakhiwa ngokuhambisa ngokukhawuleza nangokuthembekileyo. Onke amalungu ethu alandelwa ngokupheleleyo kwilayisensi ye-Boeing kunye noMenzi. I-AVPARTS ihambelana ngokupheleleyo ne-FAA, i-ASA, imigangatho ye-ISO kunye nemigaqo. Iinxalenye zeenqwelomoya zeBoeing - iibheringi - Amandongomane - imikhono - izibiyeli - ityholo - imithombo - izixhobo zokufika
B.S.T. Medical Supply kumvelisi IiSayensi zoBomi kunye neTekhnoloji yoNyango Izixhobo zoPhando Senza kwaye sihambisa iimpahla zoxinzelelo kunye nezinto zokuncedisa utyando lwezithambiso. Inkxaso yoPhando lwasemva - iiCorsets - iiBhinqe - iZambatho zangaphantsi ezizodwa - Ukuxinana kweZinxibo - Izinto zoTyando
Balanced Guru kumvelisi Impahla zomthengi IMveliso yezeMpilo kunye nezoBuhle Sisekele Balanced Guru ngokuzimisela nokuthanda ukuzimisela ukukhuthaza impilo-ntle yabathengi bethu kunye neplanethi esabelana ngayo sonke. Senza oku ngokwenza iimveliso ezilungileyo eziqinisekisiweyo zezinto eziphilayo, ezingenaburhalarhume nezinokuzinza ngelixa sithintela ifuthe lethu kwindalo esingqongileyo kwaye sandisa ifuthe lethu kwezentlalo ngokubuyisela kuluntu oluthetha lukhulu kuthi. Isithembiso sethu kuwe kukusebenzisa kuphela izithako kunye nezinto ezikhuselekileyo kwimizimba yethu kunye nokusingqongileyo, nokuba ulapha kulusu lwethu lomzimba okanye kwioyile yeenwele zethu. Sisebenzisa kuphela izithako eziluhlaza eziqinisekisiweyo eziphilayo nezilinywayo ngovuno oluzinzileyo. Unyango lweVumba-Ukucoca ubuso-iiToners- iSerum yobuso-Ukukhuhla umzimba- Amanqatha omzimba- Iioyile ezibalulekileyo
Barricade International, Inc. kumvelisi Umlilo kunye noKhuseleko Flame kunye nekudodobalisa umlilo UMongameli weBarricade wamanye amazwe, uJohn Bartlett ngumcimi-mlilo waseFlorida owasungula ijeli yokuqala ethintela umlilo emva kokubona ukuba ilweyile yosana elisetyenzisiweyo nelimanzi alilahli ngexesha lomlilo wenkunkuma. Ukusuka kwesi siqalo sithobekileyo, usizisele inkqubo esebenziseka lula etshintsha indlela abaninimzi abazikhusela ngayo ezona zinto zixabisekileyo neendlela zokuphila. Kwaye abacimi-mlilo abaqeqeshiweyo banesixhobo esisebenzayo sokukhusela iidolophu namakhaya asongelwa yimililo yasendle. Isebenza njengeepolymers ezifunxa kakhulu kwi-diaper, iBarricade ifunxa amaxesha amaninzi ubunzima bayo bamanzi kwaye yenza "iziponji ezimanzi, ezinamathelayo." Ezi bubblets zigcwaliswe ngamanzi zihambelana nomphezulu kwiindawo ezininzi zeemolekyuli- nganye ekufuneka yenziwe ngumphunga phambi kokuba umaleko ongaphantsi uchaphazeleke. Emva komlilo, uhlamba ngamanzi kwaye uyabola. Uthintelo lomlilo - Ukudodobalisa ilangatye - ijel ethintela umlilo
Bell Performance kumvelisi Iikhemikhali kunye nePetrochemicals Izongezo zePetroli Uneminyaka eli-112 ubudala Bell Performance, umenzi wezongezo wamafutha wase-US owasekwa nguRobert Bell (owaphuhlisa isongezelelo sokuqala sepetroli ngo-1909), wathumela kumazwe angaphandle. Silungisa iingxaki zeFuel kuwo onke amashishini, nokuba yi-ethanol okanye enye i-bio, ipetroli, idizili, okanye i-fuel yokuvelisa amandla, kunye nokulungelelanisa iimfuno zenkampani nganye ngezisombululo zamachiza, izisombululo zoomatshini, kunye neenkqubo ezifanelekileyo zokuvavanya iinkqubo, imfundo ebalaseleyo, kunye nobungcali boqeqesho. Sijonge kubasasazi ukuba bahlawule indawo yabo yentengiso yamanye amazwe abarhola uluhlu lwabo olukhethekileyo kwimarike zorhwebo, ezorhwebo kunye nabathengi. SingamaNgcali okwenza ukuba ube liNgcali kubathengi BAKHO! WeFixFuel.com! Izongezo ze-Fuel -Izongezelelo zePetroli -Izongezelelo zeDizili yeZibaseli
Big Storm Brewery kumvelisi Iimveliso zokutya iZiselo Eyasungulwa ngo-2012 kwiPasco County, iSiphepho esikhulu ngoku sinamagumbi amane kwi-Sunshine State: i-Clearwater, i-Odessa, i-Orlando kunye neCape Coral. I-Big Storm iye yamkela i-tagline yayo ye "Craft Beer Forecast yaseFlorida," ngokuphuhlisa ulungelelwaniso lwentandokazi zaseFlorida ezinje ngeTropic Pressure Florida Ale, egcwele iintyatyambo ze-hibiscus, kunye ne-Key Lime Shandy, ekhutshwe nge-lime puree. UBhiya wobugcisa - Iziselo ezinxilisayo
Blue Tunnel Corp. zokusasaza Ezobuchwepheshe Ukhuseleko kunye neNtengiso I-BLUE TUNNEL yinkampani yase-US yeCyber ​​Security Solutions ukubonelela ngeemveliso kunye neenkonzo zobuchwephesha obuhle kakhulu ukuphucula ukhuseleko kunye nomgangatho wobomi babantu. I-TARGET Ukuvelisa iziphumo ezifanelekileyo usebenzisa i-Artificial Intelligence (uVavanyo lweVidiyo oluNzulu lokuFunda) isoftware ngaphezulu kwemifanekiso yeekhamera zokujonga kunye nokwazisa imicimbi ngokuzenzekelayo nangexesha lokwenyani. IPALIDIYO Iphothifoliyo enkulu yeHlabathi. Ngaphezulu kweemodyuli ezingama-30 zeArtificial Intelligence kwizicelo ezahlukeneyo. VERTICALS Smart Cities, Industry & Critical Infrastructures, Agro Business, Retail & Marketing, iBhanki nezeMali, ezothutho, iZibonelelo zikaRhulumente kunye neZakhiwo, iiNdawo zokuHlala, iNdalo neNdawo. AMANQAKU AMANQAKU ESIQHUMO NOMLILO: Ekuphela komhlaba okwaziyo ukubona umsi kunye / okanye umlilo ngekhamera enye ye-IP. I-SLIP & FALL: Khangela umntu otyibilikayo kunye / okanye owela kwimeko yomngcipheko. UKUQASHELWA UBUSO: Ukwamkela umntu, ubuhlanga, isini, ubudala, njl. Njl. ICODVID-19: Iphakheji yokujonga ukuba abantu bayayithobela na imithetho yobhubhane. Ukhuseleko lweCyber-Ubukrelekrele bokwenzela- ividiyo kunye nohlalutyo lwasenkundleni- isoftware- Izixeko zeSmart IoT
Bob's Machine - Outboard Accessories kumvelisi Iimveliso zaselwandle kunye neTekhnoloji Izixhobo zeMoto zangaphandle Bob's Machine yinkokeli yehlabathi kwimveliso yezincedisi zenjini yesikhephe sangaphandle. Eyona nto kugxilwe kuyo kukwiHydraulic Jack Plates, ephakamisa isithuthi sakho sangaphandle senyuka phezulu nasezantsi ngokucofa iqhosha lokusingqongileyo kuqoqosho lwamafutha, ukusebenza, kunye nokufikelela kumanzi anzulu. Ezinye izincedisi zibandakanya iinciphiso zamanzi zeempumlo zamanzi ezisezantsi, izixhobo zokunyathela iimoto, nokunye okuninzi. IHydraulic Jack Plate -Izixhobo eziSebenzayo zeZithuthi eziSebenzayo-Izixhobo zeZithuthi eziPhandle -Izixhobo zeMoto eziPhandle
Broward College International Admissions KwiYunivesithi Iziko leMfundo F-1 Visa Uncedo Ikholeji yaseBroward (BC) yasekwa ngonyaka we-1960 kwaye ibekwe kwilanga laseMzantsi Florida kufutshane naseMiami naseFt. ILauderdale. I-BC isebenzela abafundi abangama-63,000 + abavela kumazwe ayi-150 + kwaye inabafundi abangama-500 + beF1. I-BC ibonelela ngeenkqubo zamakhulu emfundo. Umdibaniso wezobuGcisa (AA) isidanga yinxalenye yenkqubo yethu ye-2 + 2 evumela abafundi ukuba bagqibe iminyaka emibini yokuqala yesidanga se-bachelor ngexabiso eliphantsi kakhulu, emva koko badlulisele ngokuzenzekelayo kwiiyunivesithi ezingaphezu kwama-2 ukugqiba iminyaka emi-24 edlulileyo Iintsana zabo. Umdibaniso weSayensi (AS) izidanga ziinkqubo zeminyaka emi-2 eziyilelwe ukulungiselela abafundi ingqesho kwangoko kwiinkalo zemfundo ezizodwa ezinje ngesayensi yezempilo, itekhnoloji yolwazi, ubugcisa begraphic nokunye. Inkqubo yesiNgesi yeeNjongo zeZifundo (EAP) yenzelwe ukukufundisa ukuba ube ngumfundi usebenzisa ulwimi lwesiNgesi kwaye UNGASIFUNDI isiNgesi esisiseko. Le nkqubo ikwanceda abafundi abaneedigri zaseyunivesithi ezivela kwilizwe labo ukuba bamkelwe kwisikolo esiphumeleleyo sase-USA. Inkqubo Yamazwe Ngamazwe-Inkqubo yokufunda kwelinye ilizwe-iNkqubo yeVisa yeF1
Bugs Off Pads - Awesome Products Corp. kumvelisi Automotive Iimveliso zokuCoca iiMoto I-US yethu yenza i-Bugs Off® Pads ngokulula yeyona ndlela yokususa iibhugi kwindawo yakho yesithuthi, kodwa, zenza okungakumbi! Bacoca ngokukhawuleza kwaye ngokulula kuba bafuna isepha namanzi kuphela kwaye bakhuselekile kuzo zonke iindawo zesithuthi onokuyihlamba yonke imoto yakho, ususe ukungcola, ukungcola, iibhugi, itela yendlela, ilindle leentaka, njl. ukusebenzisa kwi: Ipeyinti, Sula idyasi, iPlastiki, iigraphics, isinyithi, iglasi. Ayikho enye imveliso yokususa ibug engenza ibango. Siqinisekisa imveliso yethu kulwaneliseko lomthengi kwiintsuku ezingama-60, inde kunemveliso emininzi egqithileyo. Imveliso eAwesome Corp. yasekwa ngo-1996 kwaye ukusukela ngeloxesha ibisenza le pads yokucoca inqwelomoya, iimoto, iilori kunye neeRV's. Sinelungelo elilodwa lomenzi wechiza kunye neempawu zokuthengisa ezibhalisiweyo ezi-1. Abanye babathengi bethu kwicandelo leemoto zezi: I-Ace Hardware, i-Automotive Intl., Izitolo zeKhaya zakwaMenard, iStoner Inc., iWarren Distribution. Iinkcukacha zePads - Iinkcukacha zeZithuthi-Ukucoca izithuthi-Iimveliso zokuCoca iBhegi-Iimveliso zokuCoca iiMoto
Caliber Sales Engineering kumvelisi Ukuhamba ngenqwelomoya kunye neAerospace Ukulungiswa kweeNqwelomoya kunye nokuLungiswa Eyilwe kwi1987, Caliber Sales Engineering iyinkokeli eyaziwayo kwinkxaso epheleleyo yokuhanjiswa kwempahla kwi-Arhente yoMhlaba, yoMoya, neyaseLwandle. Kubandakanya, ulawulo lwekhontrakthi, amandla omntu, ukuphuculwa kwenkqubo, ukubuyisela umva kubunjineli nakwimveliso, uqeqesho kunye nenkxaso yentsimi. Amandla ethu alala kubudlelwane bethu obusondeleyo bokusebenza kunye ne-OEM enkulu kunye nabavelisi bezinto kunye ne-FAA evunyiweyo yokulungisa. Ukongeza, i-CSE inezindlu zokuvelisa kunye nokulungisa ukubandakanya iFom Fit kunye nokuSebenza, iiNkqubo zoLwandiso lweeNkonzo zoBomi ngokufakwa kweTekhnoloji kunye noPhuculo, ukuveliswa kwebhetri kunye neshaja, kunye nokuhlaziywa kunye nokulungiswa kwezinto zomkhosi. Njenge-WOSB, i-ISO 9001: Ebhalisiweyo ka-2015, i-AS9100D kunye ne-AS9120B ehambelana nayo, kunye nenkampani eqinisekisiweyo ye-TRACE, uCaliber uyakuqonda ukubaluleka kokugcina elona nqanaba liphezulu loLawulo loMgangatho. Sibeka ibha phezulu njengoko sisazi ukuba abathengi bethu benza. Inkxaso yokuLungiselela uMhlaba, iiMoya, kunye neeArhente zoLwandle - MRO - Ulawulo lwekhontrakthi -Uphuculo lwenkqubo - Ukubuyela umva kwezoBunjineli- Ikhontrakthi yokuThengisa- Inkxaso yeNdawo- Uqeqesho lobuchwephesha
CellAntenna Mnikezi nkonzo Ezobuchwepheshe ngomnxeba CellAntenna Uyilo lwamazwe aphesheya, lwenza kunye nokuthumela kwelinye ilizwe izisombululo zokwandiswa kwamaqonga kanomathotholo ukwandisa uluhlu kunye nokusebenza kweenkqubo zeRF ezinobuchule ikakhulu ezisekwe kubuchwephesha beSoftware Defined Radio (SDR). Abathengi bethu kwihlabathi liphela kubandakanya iinkampani kunye neearhente zikarhulumente ezidibanisa izisombululo ezihlanganisiweyo kunye nesoftware yokuthintela, ukufumana, kunye nokulawula iifowuni ezisetyenziswa zizaphuli mthetho- kubandakanya nabanqolobi. Siyila kwaye sidibanise izixhobo zethu kwiNkqubo yokuSasazwa kwee-Antenna (i-DAS) ebonelela ngokhuseleko lwefowuni kwizakhiwo zikarhulumente, iikhampasi kunye neentolongo. Izisombululo zethu eziphathwayo zibonelela ngonxibelelwano oluthembekileyo nolukhuselekileyo kwimishini yobuchule. CellAntenna Iinkonzo zamanye amazwe ezintsha kunye nenkxaso iqinisekisa impumelelo yokusebenza. Iqela lethu elinamava lobunjineli libonelela ngenkxaso kuyilo kumdibaniso wendawo. Ngeminyaka eli-19 yamava, CellAntenna Iimveliso zamanye amazwe "Zenziwe eMelika" kwaye zenziwe kwindawo yethu yaseFlorida. UMboneleli weNkonzo yoNxibelelwano ngoNxibelelwano- ubuNjineli boNxibelelwano- ubuNxibelelanisi beeNkqubo zoNxibelelwano kunye noMdibanisi
Central Florida Development Council Umbutho ongekho phantsi kukarhulumente Umbutho Wophuhliso Loqoqosho Uphuhliso lwamashishini The Central Florida Development Council (CFDC) bubuhlakani boPhuhliso lwezoQoqosho kwiPolk County njengoko kuchongwe yiBhodi yeeKomishinala zePolk County. Umsebenzi weCFDC kukukhulisa uqoqosho olusekwe kubuchule obuphezulu, kumvuzo ophezulu kumashishini azinzileyo. Sijolise ekufuneni nasekwandiseni ishishini lwasekhaya nakwamanye amazwe, ukuthethelelwa kweshishini, ukuququzelela ubuhlakani bokusebenzisana kunye nokuqhubela phambili kumanyathelo obuchule eCentral Florida ePolk County. URhulumente weNgingqi - uPhuhliso lwezoQoqosho - Ukufuduswa kweQumrhu - Ukukhuthaza ukuThumela kumazwe angaphandle
CHAMPS Software Inc. Mnikezi nkonzo Ezobuchwepheshe Uphuhliso lweZofthiwe Isoftware ye-CHAMPS ijolise ekuphuhliseni nasekuphumezeni izisombululo zesoftware ezivumela amashishini ukuba anyuse umgangatho wobomi beempahla zawo ezibandakanya abasebenzi, izixhobo, izibonelelo, izithuthi, izixhobo, izixhobo ezincedisayo, kunye nezinto ezinqabileyo. Ngoku nge-CHAMPS Iselfowuni, ukusebenza kwezisombululo ze-CHAMPS ze-CMMS kwandisiwe ngokubonelela ngokusebenza ngaphandle kweintanethi. Ungaqhubeka nokufikelela kulwazi lwakho olubalulekileyo kwaye urekhode imisebenzi yakho nangona unqanyuliwe. Isoftware yoLondolozo lwezixhobo zeNkunzi-Isoftware yoLawulo lweeMpahla- Isoftware yoLawulo lokuSebenza koMsebenzi-Isoftware yoLawulo lokuThenga-iSoftware yeNkqubo yeShishini
Chemical Injection Technologies, Inc. SUPERIOR™ kumvelisi Ucoceko lweTekhnoloji Amanzi kunye neNkunkuma yamanzi Yiba yinxalenye yoMgangatho weGolide. SUPERIOR ™ igesi kunye neenkqubo zokutya ezingamanzi kunye nezixhobo. Xa uthenga i-SUPERIOR ™ Gas Chlorinator okanye i-VacuFeed Liquid Chemical Feed System, uya kuba ufumana eyona mveliso, eyona mveliso ihambele phambili kwezobuchwepheshe kwimarike. Ixesha. I-Chemical Injection Technologies, Inc., izinikele kulwaneliseko lwabathengi, ukhuseleko, itekhnoloji esebenzayo, kunye noyilo oluphezulu. Siyathembisa ukuba onke amandla ethu kunye neetalente zethu ziya kuhlala zisetyenziselwa ukugcina iimveliso zeSUPERIOR ™ kumda wobuchwephesha ukuze uhlale uqinisekile ngomgangatho ophezulu kuyilo nakwizixhobo. Sikwathembisa ukuba ngekhe ubengaphezulu komnxeba okanye ifeksi kude nengqwalaselo yobuqu. Uninzi lwemibuzo yesiqhelo inokusingathwa ngumthengisi wakho we-SUPERIOR ™, kodwa ukuba wakhe wanesidingo okanye ufuna impendulo kumbuzo wobuchwephesha okanye unamagqabantshintshi kunye neengcebiso malunga nezixhobo zakho ze-SUPERIOR ™, sihlala silapha kuwe. Masikubonise ukuba kutheni zonke iimveliso zethu ZI-SUPERIOR! Iimveliso zoNyango lwaManzi lweNkunkuma-IiChlorinators-Izixhobo zoHlahlelo lwaManzi aNkunkuma-Itekhnoloji yoNyango lwaManzi yeNkunkuma
Chicago Stainless Equipment, Inc. kumvelisi Izixhobo zeMizi-mveliso kunye neeNkonzo Ukulinganisa kunye neeNzwa Izilinganisi zoxinzelelo lwezococeko kunye neethermomitha zedijithali ezicocekileyo, ii-sensors zeqondo lobushushu (ii-RTD's kunye neTransmitters) iimvakalelo zoxinzelelo, ii-analog thermometers (i-Bi-Metals) iintsimbi zokulinganisa uxinzelelo lwentsimbi, ii-Thermo-wells. Uxinzelelo ngoxinzelelo kucoceko -Izinga leThermomitha zedijithali- iigeyiji - Izixhobo zeshishini
Citrusway Nail & Skin Solutions kumvelisi Impahla zomthengi IMveliso yezeMpilo kunye nezoBuhle ICitrusway® yenziwa yaphuma kwimbono yokuzisa ukungunda okukhuselekileyo kunye nendalo kunye neemveliso zolusu kwinani elihlala likhula labathengi abafuna iindlela ezizezinye ezifanelekileyo. Imishini yethu ibandakanya injongo yokufundisa umthengi ngomatshini omangalisayo ukuba unjani umzimba womntu kwaye usebenza kakuhle ngaphandle kwefuthe leekhemikhali. Njengoko ukudityaniswa kwemveliso yendalo kusenzeka kudidi ngalunye, iCitrusway lulongezo olukhulu kudidi oluzaliswe yityhefu, iimveliso ezisekwe kwimichiza. Inkathalo yobuqu-Iimveliso zobuhle -Izimonyo-uKhathalelo lweenyawo -Ukhathalelo lweenzipho- noKhathalelo lolusu
City of Miramar, FL urhulumente Umbutho Wophuhliso Loqoqosho URhulumente kaMasipala I-Miramar yindawo yoluntu engama-31 eekhilomitha kunye nabahlali abayi-140,000. Iminyaka yobudala yabemi ingama-36 kwaye kulawo angama-25 okanye nangaphezulu ngama-90% anediploma yamabanga aphakamileyo kwaye ama-30% anesidanga se-bachelor. I-40% yabemi bazalelwe ngaphandle kwaye ama-47% athetha olunye ulwimi ekhaya. Kukho malunga neeyunithi zezindlu ezingama-43,000, ezingama-70% zazo ezingabanini bazo kwaye zinexabiso eliphakathi elimalunga ne- $ 264,000. Ingeniso yekhaya eliphakathi iphantse ibe yi- $ 66,560. Kwicala loshishino, kukho malunga nama-2,700 amashishini anabasebenzi abangama-40,000 +. Amacandelo abalulekileyo eshishini abandakanya ukuhamba ngenqwelomoya, unxibelelwano, ukhathalelo lwempilo kunye nemveliso. Kukho iiofisi ezicwangcisiweyo kunye neepaki zorhwebo kunye namaziko okuthengisa kwinqanaba loluntu. Ukusukela nge-2021, kukho i-3.5 yezigidi zeenyawo zenyawo zeofisi; I-3.5 yezigidi zeenyawo zenyawo yendawo yokuthengisa; kunye ne-9.6 yezigidi zeenyawo zesikwere sendawo yemizi-mveliso. Ukufuduswa kwabahambi ngenqwelo moya-Imveliso yeZifukamisi-Uphuhliso lweShishini - Utyalo-mali oluthe ngqo lwaNgaphandle-Ukufuduswa kweQumrhu
CityVitae - Electromobility At Your Service kumvelisi Ucoceko lweTekhnoloji Iimveliso zezithuthi zikaMbane kunye neTekhnoloji Yiza udibane neqela CityVitae! Sinikezela ngeenkonzo zokujika amandla ngokuguqula iinkampani kunye nezakhiwo. Izixhobo zokutsha kwakhona kweZithuthi zoMbane - iTekhnoloji yoThengiso lweeNqwelo-mafutha zikaMbane-Itekhnoloji yoThutho lwaMbane-Iinkqubo zoMbane waMandla oMbane
Collection 2000® & Hombre® zokusasaza Impahla zomthengi IMveliso yezeMpilo kunye nezoBuhle Ngeminyaka yobungcali kunye namava kwimveliso kunye nokungenisa ngaphakathi / ukuthumela ngaphandle okuvela e-US, Collection 2000, Inc iyazingca ukuthathwa njengenkokeli yemveliso. Zonke izigqibo ziphefumlelwe yimishini yethu ephambili, eyikukubonelela ngemigangatho ephezulu yemveliso kunye neenkonzo kubathengisi nakubathengi. Ngokubambelela kwiZenzo eziLungileyo zeMveliso kunye nendlela yokuhambisa izandla, sizabalazela ukugcina ubudlelwane bexesha elide nabo bonke abasasazi bethu nokuba bakweyiphi na indawo. Kolu shishino luguquka ngokukhawuleza, siye saqonda ukubaluleka kokuhlaziya indlela esisebenza ngayo ukuze sihlale sisemarikeni, kwaye sizimisele ukuyenza loo nto. Siyakumema ukuba ukhangele kuluhlu lwethu kwaye unxibelelane nathi ngayo nayiphi na imibuzo. Iimveliso zoKhathalelo lobuqu-Iziqholo - iLotions - Iithambisi - Izinto zokuthambisa
CONNEX Florida Mnikezi nkonzo Umbutho Wophuhliso Loqoqosho Inethiwekhi yokuThengisa Connex Florida iziko ledatha yamandla ekhompyuter kunye neqonga lonxibelelwano ekunceda unxibelelane nabavelisi, ufumane izixhobo kwaye uziqhelanise nokutshintsha kweemfuno zonikezelo. Ukufezekisa iimveliso zeFlorida-Isiseko sedatha yoMvelisi-Ukufezekiswa kweMveliso-Ukukhangelwa kweMveliso-Abavelisi-abaThengisayo
CreditBench Powered By First Home Bank Mnikezi nkonzo Iinkonzo zezeMali nezeNgcali Iinkonzo zeBhanki I-CreditBench, exhaswa yiBhanki yaseKhaya yokuqala, izinze eSt. Petersburg, eFlorida. Ukuma ngokungaguquguqukiyo njengomnye wababolekisi abaphezulu be-SBA e-US, kunye nombolekisi ophezulu we-SBA kwimali mboleko engaphantsi kwe- $ 10, icandelo leBhanki yeKhaya lokuQala kwiCreditBench lixhase ngaphezulu kwe- $ 350,000 yezigidigidi kwimali mboleko ye-SBA kubathengi bethu kwilizwe liphela. Ukunikezela ngeemali mboleko ezincinci zeshishini ukusuka kwi- $ 1 ukuya kuthi ga kwi-50,000 yezigidi ukuhlangabezana neemfuno zakho zeshishini, amaxabiso ethu okhuphiswano, iimfuno eziguqukayo, kunye nokwenza izigqibo ngokukhawuleza kusincedile ukuba sifumane iMeko yokuBolekisa yeSizwe ekhethiweyo. Ukungenisa kunye nokuThumela ngaphandle kweNkxaso-mali - ukuBolekisa ngoRhwebo-Imali eSebenzayo-Iinkqubo zokuBoleka i-SBA -Izinto oboleka zona
Crescent Garden kumvelisi Impahla zomthengi Iimveliso zegadi Njengophawu olukhokelayo oluthenjiweyo ziikhontrakthi, iingcali zezityalo, amaziko egadi azimeleyo kunye neendawo zokugcina ukutya emhlabeni wonke, sinikezela ngezikhongozeli kunye nezinto zoncedo ezahlulwe kuyilo olucocekileyo kunye nokuyilwa kwezinto ezintsha ezihlala kwaye zihlala zisebenza ngempumelelo, nasegadini ephefumlelweyo. Kwi Crescent Garden, siyakholelwa ukuba abatyali kufuneka basebenzele wena, hayi enye indlela. Siyaqonda ukuba zeziphi ezisebenza kakuhle kwizityalo ezisempilweni nakubantu abazithandayo. Ngombono wokwenza ukuba igadi ifikeleleke kwaye ifaneleke kuye wonke umntu, ngelixa sityhala imigangatho yoshishino malunga noko kunokwenzeka, siyazinikezela Crescent Garden kwisithembiso somthengi esilula: Sikunceda ukuba ukhule. Ukutyala kwangaphakathi nangaphandle - Izinto zokulima igadi- Izinto eziHlanganisa umhlaba - Izityalo zokutyala - Iimbiza zeentyatyambo
Cusano's Bakery kumvelisi Iimveliso zokutya Isonka kunye neMveliso yokubhaka Cusano's Bakery Isizukulwana se-5 sosapho esinebhaki yokubhaka, egxile kwimveliso eqandisiweyo. UCusano waqala ukubhaka eNew York ngo-1907 emva kokufika evela e-Itali. Isityalo seCusano's Bakery yindawo yobugcisa eyi-250,000 sq.Ft.Fus efumaneka eMzantsi Florida. Siyi-SQF yeQela lesi-3 eliPhicothiweyo kwaye liqinisekisiwe ngereyithingi ebalaseleyo. Okwangoku sivelisa iintlobo zezonka ezingaphezu kwe-150. Sigcina iinkqubo zokubhaka zemveliso ezininzi ukuvelisa iziko lokwenyani lobugcisa kunye neepani zezonka ezibhakiweyo / isaphulelo / iibuns / imiqulu esongwayo. Sithumela iimveliso zethu ezinqabileyo kulo lonke elaseMelika, kwiCaribbean, kuMbindi nakuMzantsi Merika. Isonka esiFriziweyo-Isonka esitsha - Iimveliso zekhekhe
DermaSensor kumvelisi IiSayensi zoBomi kunye neTekhnoloji yoNyango Isixhobo seDermatology DermaSensor yinkampani yesixhobo setekhnoloji yezempilo eyile kwaye yathengisa ngesixhobo esifikelelekayo, esisebenza ngesandla esivumela oogqirha ukuba bavavanye izilonda zolusu lomngcipheko womhlaza kwimizuzwana. Isixhobo sisebenzisa ukusasazeka kwelungelo lokushicilela elinelungelo elilodwa lomenzi kunye nealgorithm yokufunda ngomatshini ukubonelela ngomngcipheko ophezulu okanye umphumo ophantsi wobungozi kwizilonda zolusu. Isixhobo esibhaqwayo somhlaza wolusu esiphathwayo-Ukuchongwa komhlaza wolusu - iMelanoma - Izixhobo zeDermatology - Izixhobo zoNyango
DiSTI Corporation Mnikezi nkonzo Ezobuchwepheshe Uqeqesho olubonakalayo kunye neSoftware Ikomkhulu leOrlando, eFlorida DiSTI Corporation ubeyinkokeli yehlabathi kwisisombululo soqeqesho kunye nezixhobo zophuhliso lwe-HMI ngaphezulu kweminyaka engama-25. Abalingisi beenqwelomoya-abaQeqeshi boQeqesho- uQeqesho oluQinisekileyo lwe3D-Uqeqesho lweeNzululwazi ngezoBomi- Inkqubo yoLondolozo loomatshini Uqeqesho oluqinisekileyo
Doc-Solutions - Secure Your Documents Mnikezi nkonzo Ezobuchwepheshe Itekhnoloji yoKhuseleko loXwebhu We secure your documents nasemva kokuhambisa! Kwihlabathi lanamhlanje, amaxwebhu akho anokufikeleleka nakweyiphi na indawo, nangaliphi na ixesha, nakwesiphi na isixhobo. Kwaye ngaphandle kokhuseleko olufanelekileyo, nangubani na. Umceli mngeni: khusela onke amaxwebhu akho ngalo lonke ixesha kuso nasiphi na isixhobo. Isisombululo: UXwebhu olukhuselekileyo lunokukhusela ulwazi lwakho kuzo zonke izixhobo kunye neenethiwekhi, zombini ekuphumleni nasekuhambeni. UXwebhu-oluKhuselekileyo lusebenza ngaphandle komthungo kwii-hard drive zasekhaya, i-imeyile kunye nokugcinwa kwelifu. Kuba kulula ukuba nabani na angene kwiifayile zakho naphina, kulula nje ukuba ukhusele iifayile zakho naphina. Ulawulo lweDijithali yamaLungelo oLwazi-uKhuseleko loXwebhu-iTekhnoloji yoLawulo loXwebhu-Itekhnoloji yoKhuseleko loXwebhu-Ukubhala ngokufihlakeleyo-Inkqubo yesiqhelo kunye nokudityaniswa-Ukubonisana ngeTekhnoloji
Douglas Washing and Sanitizing Systems kumvelisi Izixhobo zeMizi-mveliso kunye neeNkonzo Ukulungiselela ukutya Ngaphezulu kweminyaka engama-40 yamava, ukuhlanjwa kukaDouglas kunye nococeko yinkokeli kushishino ekunikezeleni ngokucoca ngokufanelekileyo nangokufanelekileyo kwezisombululo. Sinceda ukunciphisa umngcipheko wokhuseleko lokutya kunye neenkqubo zokuhlamba nokucoca izitya, ii-racks, kunye neendawo apho ungcoliseko lunokuchuma khona. Ingcali yokulungiswa kokutya, isiselo, i-cannabis kunye nokusasazwa kwemizi-mveliso, uDouglas ubonelela ngaphezulu kweemodeli ezingama-80 zezixhobo zokucoca. Zonke izixhobo ziyahlangabezana nemigangatho yamva ye-FSMA. Indawo yokuhlamba nokucoca i-Douglas inikezela ngemveliso ebanzi, indibano kunye novavanyo. Le meko iqinisekisa umgangatho, iqinisa imigangatho ephezulu yokhuseleko, kwaye ibonisa ukuzibophelela kwethu ekubekeni abathengi bethu phambili. Iinkqubo zokuHlamba eziZenzekelayo- Iinkqubo eziSebenzayo zoCoceko-Izixhobo zeMveliso yokuTya kunye neZiselo-Izixhobo zeMveliso yeNutraceutical
DRV Institute of Management Mnikezi nkonzo Iinkonzo zezeMali nezeNgcali Uqeqesho kunye noQinisekiso Sizingcali zeshishini lehlabathi esibonelela ngobuchule kunye neendlela ezifanelekileyo zokunceda abanini bamashishini bakhule. Sinobutyebi bezandla kumava kwicandelo lolawulo. Sifundisa ngezakhono ezifanelekileyo zolawulo ozifunayo ukulawula ishishini lakho ngempumelelo kwaye uphumelele. Iindawo zethu zobungcali zibandakanya uqeqesho lwenkonzo yabathengi, ukubonisana ngamashishini kunye nokuqeqesha, ukunceda oosomashishini ukuqala / ukufudusa iinkampani eFlorida kunye nendlela yokwandisa kumazwe aphesheya, ukhuseleko lokutya kunye nogutyulo, kunye noqeqesho lwabasebenzi. Siliqela leengcali zeshishini (abaphathi) kunye noochwephesha kwezemfundo abanezidanga kunye nabangaphezulu kweminyaka engama-20 yamava. Iinkonzo zokuCebisa kuLawulo kubuNdwendwe kunye noShishino olubalulekileyo-Uqeqesho lweeNkonzo zokutya-Uqeqesho lweShishini lokuNgenisa izihambi-Uqeqesho lweNkonzo yaBathengi-Uqeqesho lwabasebenzi
Ecologel Solutions, LLC kumvelisi Iikhemikhali kunye nePetrochemicals Iichemicals zeZolimo I-Ecologel ineminyaka engama-30 nangaphezulu inika isisombululo esitsha kulawulo lokufuma komhlaba, isondlo sezityalo, i-biostimulants, ukucacisa amachibi, kunye nolawulo lothuli lwendlela. Iimveliso zibandakanya: IHydretain® - isisombululo se-humctant esisinceda izityalo zisebenzise ukufuma komhlaba obekungaphulukana nomphunga. Susa indawo ezomileyo, unciphise ukubuna, wandise isivuno sezityalo, uphucule ukuntshula kwembewu, kwaye unciphise kakhulu iimfuno zokunkcenkceshela iiturf, imihombiso kunye nezityalo zezolimo. I-CytoGro® -i-biostimulant eyenzelwe ulwandle eyonyusa iingcambu kunye nokukhula okuthe ngcembe ngaphandle kokubangela ukukhula okuphezulu kakhulu. I-Aqua-T ond Pond Bacteria- eyenzeka ngokwendalo ibhaktheriya yokucacisa amanzi ngelixa kuncitshiswa udaka lwamachibi kunye nevumba. I-GelTrak® Dust Suppressant - isebenzisa umhlaba kunye nokufuma komhlaba ukunciphisa uthuli kunye nokunciphisa ukunkcenkceshela kwiindawo zomhlaba. I-BioPro® Technologies-umgca weemveliso zokutya ezilulwelo, iiphakeji zemicronutrient kunye neemveliso zokuphucula umhlaba. Ulondolozo lwaManzi ezoLimo-Izinto eziNcinciweyo zoTywala-Ii-Biostimulants zoTywala-Iimveliso zoLawulo lwe-Algae-Izongezelelo zoMhlaba
Embry-Riddle Aeronautical University Mnikezi nkonzo Iziko leMfundo Aviation kunye neTekhnoloji yoQeqeshiso lweeNqwelomoya Embry-Riddle Aeronautical University yeyona yunivesithi inkulu ehlabathini, ivunyiwe ngokupheleleyo kugxilwe kwi-Space, Aviation, iikhompyuter kunye neTekhnoloji, ukhuseleko kunye nobuntlola kunye nomzi-mveliso weSayensi eSetyenzisiweyo. Kwiindawo zethu ezimbini zokuhlala eUnited States, enye eArizona enye eFlorida, abafundi bethu bazilungiselele kakuhle, kangangokuba iipesenti ezingama-95 baqeshwe kumashishini abo kunyaka omnye wokuthweswa isidanga. Inkqubo ye- Embry-Riddle Aeronautical University Ikhampasi yaseAsia ikwiSingapore, kwaye inikezela ngexeshana, iinkqubo zokudibanisa izidanga zokuhanjiswa ngokukodwa kwabaqeqeshi bokusebenza. Indawo-yokuhamba ngenqwelomoya- Iikhompyuter kunye neMfundo yeTekhnoloji- ukhuseleko kunye nobuntlola kunye noQeqesho lweeNzululwazi
Enterprise Florida Mnikezi nkonzo Umbutho Wophuhliso Loqoqosho Uphuhliso lwamashishini Ukutshintsha indawo yoPhuhliso lwezoQoqosho eFlorida. Enterprise Florida, I-Inc. (i-EFI) yintsebenziswano phakathi kukarhulumente namashishini abucala phakathi kweeshishini laseFlorida kunye neenkokheli zikarhulumente kwaye ngumbutho ophambili woqoqosho kuFlorida. Umsebenzi we-EFI kukwandisa kwaye kwahluka uqoqosho lukarhulumente ngokudala imisebenzi. I-EFI isebenza nothungelwano lwelizwe lonke lwamaqabane ophuhliso loqoqosho kwaye ixhaswa ngezimali nguRhulumente nangamashishini amashishini abucala. I-EFI liziko eliphambili kurhulumente kunye nophuhliso lwentengiso kumazwe angaphandle exhasa ngaphezulu kwama-60,000 amashishini e-FL. I-EFI ikwaxhasa amashishini amancinci kunye neenkqubo ezincinci, ukukhuthaza iFlorida njengendawo yokuqala yeshishini. Enterprise Florida ugaya ishishini elitsha kwaye usebenzela ukugcina nokwandisa esele likho. I-EFI igxile kula macandelo oshishino: ukuhamba ngenqwelomoya kunye nenqwelomoya, isayensi yobomi, itekhnoloji yeenkcukacha, ukhuselo kunye nokhuseleko kwilizwe, amandla acocekileyo, iinkonzo zezezimali nezobuchwephesha, ukuvelisa kunye nokunye. Uphuhliso loQoqosho - uPhuhliso lweShishini - Ukuthumela ngaphandle - uRhwebo lwaMazwe ngaMazwe - Ukugcinwa - ukufunyanwa kwabasebenzi
Enzymedica kumvelisi IiSayensi zoBomi kunye neTekhnoloji yoNyango IMveliso yezeMpilo kunye nezoBuhle Eyilwe kwi-1998 eFlorida USA, Enzymedica yi- # 1 elithengisa kakhulu uphawu lwe-enzyme esekwe kwi-SPINS ezimeleyo yokuthengisa idatha yokuthengisa kwintengiso yendalo. Kule minyaka ilishumi idlulileyo, iDigest Gold iyaqhubeka nokuma njenge- # 1 yokuthengisa imveliso ye-enzyme ngobuchwephesha bayo beThera-blend Technology. Inkampani iyandisile iphothifoliyo yayo ngaphaya kweemveliso ezenziwe nge-enzyme ukuphendula kwimfuno ekhulayo yabathengi abafuna iindlela ezisempilweni zokuphucula impilo yokugaya ukutya kunye nokuba sempilweni ngokupheleleyo komzimba. Impilo yokuGaya ukutya kweNdalo-ii-Enzymes-Ukuchithwa kwe-Detoxification -Izibonelelo zokutya-Ukucoca-Inkxaso ye-immune
etherium® by E-Stone kumvelisi Izinto zokwakha Iimveliso zaMatye aBunjineli Ngaphezulu kweminyaka engama-20 yamava phantsi kweebhanti zethu, siye saqhubela phambili iindlela zokufumana kunye neenkqubo zokuvelisa ezintsha ukuzisa abathengi banamhlanje oko bakufunayo, xa bekufuna. Eyethu etherium® By E-Stone umphezulu ujongeka njengonqabileyo lwamatye asikiweyo kwiikwari ezikhethiweyo kodwa zenziwe ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-78 zempahla ehlaziyiweyo yomthengi, ekuzisela eyona mveliso ikumgangatho ophezulu ngelixa ukhusela kwaye ugcina izixhobo zeplanethi yethu. etheriumImiphezulu ye-® bubushushu, ibala kunye nokukrwela okunganyangekiyo kwaye ngoku ingcono kunakuqala nge-24/7 eyakhelwe-ngaphakathi kwiMicroban® yeAntimicrobial Technology. I-TREND Group ikwangumkhokeli wehlabathi kwimveliso yembala yeglasi enemibala, i-enetian enamel, kunye negqabi legolide le-tesserae. Ngeemveliso kunye neendawo zokuhlanganisana ezikumazwekazi amane nangaphezulu kwamazwe angama-50, IQELA LE-TREND liyakwazi ukuzisa ezona zixhobo zisemgangathweni kwihlabathi liphela zisiya ekhayeni lakho okanye kwishishini. Amacwecwe elitye elenziwe ngobunjineli - Iitafile zomgangatho - Umgangatho - Iindonga kunye nophahla - Etherium - Izixhobo zoLwakhiwo - Ulungiso loRhwebo neeNdawo yokuHlala
Export-Import Bank of U.S. urhulumente Iinkonzo zezeMali nezeNgcali Ukuxhasa ngemali kumazwe angaphandle I-EXIM liqumrhu elizimeleyo elikhuthaza kwaye lixhasa imisebenzi yaseMelika ngokubonelela ngetyala lokukhuphisana nelifunekayo lokuthumela ngaphandle ukuxhasa ukuthengiswa kwempahla yaseMelika kunye neenkonzo kubathengi bamanye amazwe. I-EXIM eyomeleleyo ingalinganisa indawo yokudlala kumazwe angaphandle e-US xa ikhuphisana neenkampani zangaphandle ezifumana inkxaso koorhulumente bazo. I-EXIM ikwanika negalelo kuhlumo lwezoqoqosho lwase-US ngokunceda ukudala nokugcina amakhulu amawaka emisebenzi ekuthumeleni amashishini kwamanye amazwe kunye nokuhanjiswa kwawo kwi-United States. Kwiminyaka yakutshanje, malunga neepesenti ezingama-90 zenani elipheleleyo lezigunyaziso ze-arhente lixhase ngokuthe ngqo amashishini amancinci. Ukuthumela ngaphandle i-Inshurensi yeNtengo-mali yokuThumela kwelinye ilizwe - IziQinisekiso zeMali mboleko yoRhwebo - iMali mboleko yeShishini - Inkxaso mali kwiShishini
Falcon's Creative Group Mnikezi nkonzo Iinkonzo zezeMali nezeNgcali Uphuhliso loMxholo wePaki Falcon's Creative Group Igunya lombane lamazwe aphesheya eligxile ekuyileni amava okuntywila. Kule minyaka ingamashumi amabini idlulileyo, umsebenzi wethu ukhuthazwe kukudityaniswa kokunyanzelwa kobuchwephesha bobuchwephesha, uyilo olukrelekrele, imveliso yemveliso yedijithali edlamkileyo, kunye nophuhliso lwemveliso entsha. Inkampani inamacandelo amathathu: FalconIndlu yomthi, FalconImithombo yeendaba yedijithali, kunye FalconAmaphepha mvume. FalconIndlu yomthi iguqula izithuba ngeenkonzo zoyilo ezinje ngoyilo lobugcisa, ukubonwa koyilo loyilo, uyilo lweofisi, kunye noyilo lwamava. FalconImithombo yeendaba yedijithali ivelisa amava awodwa aqhutywa sisiqulatho sisebenzisa inkqubela phambili ebonakalayo kwiziphumo ezibonakalayo (VFX), inyani ebonakalayo (VR), inyani eqinisekisiweyo (AR), inyani exubekileyo (MR), uyilo lweaudio, unxibelelwano, kunye nophuhliso lwesoftware. FalconIlayisenisi inikezela ngemveliso emininzi, kubandakanya ukuthembeka okuphezulu kwezisombululo ezihlanganisiweyo, ubuchwepheshe obusebenzayo kunye nepropathi yokuqonda. Uyilo lwePaki yoMxholo-Imveliso yokuQulunqwayo-Uyilo lwePaki yaManzi-uCwangciso oluPhezulu
FIU Online - eLearning Services KwiYunivesithi Iziko leMfundo Izifundo ngokubanzi zeKholeji FIU Online isebe lokufunda online kwi Florida International University. Ngaphezulu kweminyaka engama-20, besikwinqanaba lokuyila ikhosi yedijithali. Namhlanje sinikezela ngaphezulu kwe-100 iidigri ezikwi-intanethi ngokupheleleyo kwaye sisebenzela ngaphezulu kwabafundi abangama-42,000, lonke elixa sifumana amazinga aphezulu kuzwelonke kumgangatho kunye nokufikelela. Kodwa FIU Online Ikwaphucula umgangatho wokufunda kwi-Intanethi kuluhlu olubanzi lwamashishini, nawo. Nantsi into esinokuyenza yona: UkuFunda ngokuQulunqwa kweMixholo: Ngeliso lokujonga iindlela zamvanje zokuzibandakanya, senza umxholo-wendaba uphile. Ukubonisana noPhuhliso loBuchule: Silungelelanise iindlela zokufunda ezikwi-Intanethi kwishishini lakho ukuqinisekisa ukugqwesa kwiqela lakho. Uyilo loqeqesho: Iingcali zethu azigcini nje ngokugcina ubuchwepheshe obutshisayo obukhoyo kodwa nophando lwamva nje ekufundeni umgama, nazo. Uyilo olubonakalayo: Silungiselela i-arhente yenqanaba le-aesthetics kwiimfuno zokufunda kumashishini onke. Imultimedia: Sivelisa ividiyo ejolise kumfundi, ukufota, kunye nesandi. Izifundo eziqhelekileyo zeKholeji-iiNkqubo zokuFunda kwelinye ilizwe-iZiko loPhando
Flame Boss - Controllers & Thermometers kumvelisi Impahla zomthengi Iimveliso zangaphandle zokupheka Flame Boss abalawuli bobushushu begrill charcoal kunye nabantu abatshayayo bakwenza ube yipitmaster engcono. Ukutshaya inyama ethambileyo kunye nenyama efumileyo kunye nolawulo lobushushu oluchanekileyo noluphindaphindekayo xa utshaya ngendlela indalo eyenzelwe ngayo - iphantsi kwaye icotha. Vele uyifake, uyibeke kwaye uyilibale. Flame Boss kuyithatha ukusuka apho ngokulawula ubushushu ngesitshisi esihamba sinyuka, ngelixa iprojekhthi yenyama ijonge ubushushu bangaphakathi ukuze wazi xa itshaye ngokugqibeleleyo. I-thermometer yethu entsha ye-wifi inokubeka esweni ukuya kuthi ga kumaqondo obushushu amane kwindawo yakho yokutya, i-oveni, umpheki ocothayo kunye nokunye. Ukunika isipho sokwenza izinto lula, ungagcina iliso kumaqondo akho obushushu naphi na Flame Boss usetyenziso olufumaneka kwi-Android kunye ne-iOS. Ukupheka kweThemometha- Abalawuli bamaqondo obushushu-Amalahle aTshayayo amalahle- Ukupheka kwangaphandle- i-BBQ -senzi zokushisa
Florida A&M University MMERI KwiYunivesithi Iziko leMfundo Izifundo ngokubanzi zeKholeji IFlorida A & M yeYunivesithi yezonyango iMarijuana yeMfundo noPhando (FAMU-MMERI: http://mmeri.famu.edu), ekhokelwa nguGqirha Patricia Green-Powell (uGqirha Charles A. Weatherford Umphenyi oyiNtloko, uthatha inxaxheba kwi-2021 I-Florida International Expo Expo (ngo-Matshi 16-18). Umboniso ngumboniso wecandelo elininzi weemveliso eziphambili kunye neenkonzo zaseFlorida. I-FAMU-MMERI yasekwa e-2018 ukufundisa abambalwa malunga nentsangu kusetyenziso lwezonyango kunye nefuthe lokusetyenziswa ngokungekho mthethweni kwentsangu kuluntu oluncinci. Inkxaso mali ibonelelwa liSebe lezeMpilo eFlorida kwisikhokelo seNdlu yowiso-mthetho yaseFlorida. Amalungelo awodwa omenzi wechiza kunye noPhando lweLayisensi yeMveliso-Iinkqubo zokuFunda kwelinye ilizwe
Florida Atlantic University KwiYunivesithi Iziko leMfundo Izifundo ngokubanzi zeKholeji Florida Atlantic University, Eyasungulwa ngo-1961, yavula ngokusemthethweni iingcango zayo ngo-1964 njengeyunivesithi yesihlanu kawonkewonke eFlorida. Namhlanje, iYunivesithi isebenza ngaphezu kwe-30,000 yabafundi abenza isidanga kunye nabaphumelele kwizifundo ezintandathu ezikumazantsi mpuma eFlorida kunxweme kwaye ibekwa njengeyona yunivesithi iphambili yoluntu yi-US News kunye neNgxelo yeHlabathi. I-FAU liziko elinamandla kwaye elinamandla, elizimisele ukuziqhubela phambili kwinkqubela phambili kunye nokufunda. Kwiminyaka yakutshanje, iYunivesithi iyiphindaphinde inkcitho yayo yophando kwaye yagqitha oontanga bayo kumanqanaba okuphumelela kwabafundi. Abafundi bethu banesibindi, banamabhongo kwaye bakulungele ukuthatha umhlaba. Izifundo eziqhelekileyo zeKholeji-iiNkqubo zokuFunda kwelinye ilizwe-iZiko loPhando
Florida Export Finance Corporation (FEFC) Umbutho ongekho phantsi kukarhulumente Iinkonzo zezeMali nezeNgcali Ukuxhasa ngemali kumazwe angaphandle The Florida Export Finance Corporation (FEFC) yenziwa nguRhulumente waseFlorida ngo-1993 njengequmrhu elingenzi nzuzo nelinegunya lokwandisa amathuba engqesho kunye nengeniso kubahlali baseFlorida ngokwanda kokuthunyelwa kwempahla kunye neenkonzo ezibangelwa luncedo olunikezwe yi-FEFC kwiinkampani zaseFlorida. Ulwazi, ezobuchwephesha kunye noncedo lokubonisana luyanikezelwa. Nangona kunjalo, uncedo lwezemali ngohlobo lweziqinisekiso zemboleko yinkonzo ephambili enikezelwa yi-FEFC. Iziqinisekiso zichazwe ngokuthe ngqo kwintengiselwano kodwa zihlala zikhutshwa njengomgca ojikelezayo wekhredithi. Ukongeza, i-FEFC ithatha inxaxheba kwiNkqubo yokuKhuthaza ukuThumela ngaphandle kumazwe e-United States (i-EX-IM Bank) kwaye inikezela abathumeli bamazwe angaphandle eFlorida ukufikelela kwiinkqubo zoncedo ezithunyelwa ngaphandle yi-EX-IM Bank kunye ne-SBA. Iinkonzo zibandakanya ukupakishwa kwe-EX-IM Bank kunye ne-SBA yokuqinisekisa ukusebenza kwemali kwamanye amazwe, kunye nezinye iimali-mboleko, i-inshurensi kunye neenkqubo zokuqinisekisa ezinikezelwa ziiarhente zikaRhulumente wase-US. Iziqinisekiso Zokubolekwa kwemali-mboleko
Florida Institute of Technology KwiYunivesithi Iziko leMfundo Izifundo ngokubanzi zeKholeji The Florida Institute of Technology (IFlorida Tech) liziko labucala, lokuhlala, elinomdla kuphando, elinikezela ngezifundo zobugqirha, eyunivesithi yezobuchwephesha ebekwe eMelbourne kwi “Space Coast” yaseFlorida. IFlorida Tech yasekwa ngo-1958 kwakusasa lohlanga oluza kuthi luchaze unxweme lweAtlantic eFlorida kwaye luthimbe umhlaba. Ngoku, ngaphezulu kwabafundi abayi-60,000 abaphumeleleyo, iFlorida Tech ibekwa phakathi kweepesenti eziphezulu ze-5 20,000 kumaziko okubonelela ngezidanga kwi-2020-21 yeYunivesithi yeHlabathi. IFlorida Tech ibonelela ngeedigri kwi-aeronautics kunye nokuhamba ngenqwelomoya, ubunjineli, ikhompyuter kunye nokukhuseleka kwe-cyber, ishishini, isayensi kunye nemathematics, ulwandle, isayikholoji, imfundo kunye nonxibelelwano. Abafundi abavela kumazwe angaphezu kwe-100 bakhetha ukufunda kwiFlorida Tech's hands-on, esekwe kwiprojekthi, indlela. Imibutho ikhethe iFlorida Tech yophando, iiprojekthi zelitye lesiseko, uqeqesho, kunye nokucebisa ngamathuba emisebenzi. Inzululwazi-Itekhnoloji-Injineli-iMathematics (STEM) UkuGxila ekuFundeni-kwiinkqubo zabafundi bamanye amazwe
Florida International University's English Language Institute KwiYunivesithi Iziko leMfundo Izifundo ngokubanzi zeKholeji Umnqophiso wethu: Ukubonelela ngemfundo esemgangathweni yesiNgesi kubo bonke abantu abakhethe isiNgesi njengolwimi lwabo lonxibelelwano kwizifundo okanye kwimisebenzi yobungcali kunye nokukhuthaza ukuqonda kwamazwe kunye neenkcubeko. Izifundo eziqhelekileyo zeKholeji-iiNkqubo zokuFunda kwelinye ilizwe-iZiko loPhando
Florida Ports Council Umbutho ongekho phantsi kukarhulumente Izibonelelo kunye nezothutho Uphuhliso lwezoqoqosho The Florida Ports Council imele amazibuko asezantsi wamanzi anzulu eFlorida ali-14, abonelela ngobunkokheli ngelizwi elihlangeneyo kwiindawo zoburhulumente nezokukhuthaza, uphando kunye nedatha, kunye nentengiso kunye nonxibelelwano. IFlorida inenkqubo esekwe kakuhle yamazibuko enolwalamano olomeleleyo lwaselwandle kwiCaribbean nakwiLatin America, kunye nezinye iimarike zamanye amazwe. Nguwo kuphela urhulumente wase-US oneendawo zezibuko kwiindlela ezimbini eziphambili zamanzi- iAtlantic neGulf, evumela amashishini akwiFlorida okanye asebenzise amaziko eFlorida ukufikelela nakweyiphi na indawo e-US nakwilizwe ngeentsuku nje ezimbalwa. Ezinye izibonelelo zokwenza ishishini eFlorida zibandakanya ukufikelela kurhwebo lwabathengi lukarhulumente lwabahlali abazizigidi ezingama-21 kunye nezigidi ezili-126 zeendwendwe zonyaka, irhafu ephantsi, ukubonelela kwabasebenzi okuninzi kunye noludwe olukhulu lwezakhiwo zokugcina nokuhambisa ngokuthelekiswa namanye amazwe akumazantsi mpuma. Ukuhambisa ngenqanawa elwandle-Ukuphathwa kwemithwalo-Ukugcina izindlu-ukuhanjiswa-ukuhanjiswa kweCruise Ship Terminal-Advocacy Maritime-Council Maritime
Florida Realtors® Umbutho ongekho phantsi kukarhulumente Iinkonzo zezeMali nezeNgcali Izindlu ezithengiswayo Florida Realtors® ngumbutho worhwebo oqeqeshiweyo wabasebenza ngokuthengisa izindlu nomhlaba kwaye usebenza njengombutho welizwe lonke kwimibutho ye-Realtor® yendawo okanye yengingqi ye-51 okanye iibhodi eFlorida. Ubulungu buqhutywa ngokuzithandela kwaye buquka zombini iiarhente zokuhlala nezorhwebo kunye nabarhwebi, kunye nabavavanyi, abacebisi bezindlu, abaphathi bepropathi kunye nezinye iingcali zezindlu nomanyano olunxulumene nomzi mveliso. Florida RealtorsUbulungu ngoku bufikelela malunga nama-200,000 elayisensi yokuthengisa izindlu nomhlaba kwaye ngowona mbutho mkhulu kwezorhwebo kwi-Sunshine State. Ikomkhulu lombutho liseOrlando, ngelixa iOfisi yowiso-mthetho yoMgaqo-nkqubo woLuntu ikumbindi weTallahassee. Umbutho weArhente yokuThengiswa kweeNdawo - Iinkonzo zokuFuduka - Izakhiwo zorhwebo - Izakhiwo zokuhlala - Iinkonzo zokukhetha indawo - Utyalomali lokuThengisa izindlu nomhlaba - Uphuhliso lweMizi-mveliso
Florida SBDC Network Umbutho ongekho phantsi kukarhulumente Umbutho Wophuhliso Loqoqosho Iingcebiso Kumashishini Asakhasayo Amathuba orhwebo lwamanye amazwe eenkampani ezisekwe eFlorida ayanda, kwaye Florida SBDC Network inokukunceda ekulungiseleleni ishishini lakho kubumbano lwehlabathi. Iinkonzo zethu ezaziwayo kwilizwe jikelele ziyilelwe ukuba zidibanise ukulungela ukuthunyelwa kwamanye amazwe, ukuthengisa okutsha, amashishini amatsha athumela kwamanye amazwe kunye neengcali eziza kukukhokela ekuphuhliseni nasekusebenziseni isicwangciso sokukhula kwamazwe aphesheya. Iingcali zethu zoRhwebo lwaMazwe ngaMazwe zinezixhobo, ubuchule kunye nobuchule bokunceda ishishini lakho likhule kwaye liphumelele phesheya. Thatha ithuba kwiiNkonzo zethu zoRhwebo zamanye amazwe ezinje ngokubonisana nomntu ngamnye kunye noqeqesho olubonisa, olubandakanya iFlorida Export Series, iZiseko zoRhwebo lwaMazwe ngaMazwe, kunye neNkqubo yesiQinisekiso soRhwebo lwaMazwe ngaMazwe. Siza kukunceda uqonde iziseko zorhwebo lwamanye amazwe, imveliso yelizwe kunye neemfuno zelayisensi, uqulunqe uphando lweemarike, kwaye ulungiselele iSicwangciso sokuThengisa kumazwe angaphandle. Ukuthengisa kumazwe angaphandle-uQeqesho kuShishino-uPhuhliso lweSicwangciso soShishino-ukuNikwa kweeNgcebiso ngokuThengwa kweZinto
Florida State College at Jacksonville KwiYunivesithi Iziko leMfundo Izifundo ngokubanzi zeKholeji Ngembali ekudala ikho yokubonelela ngemfundo ebalulekileyo, ekumgangatho ophezulu kunye noqeqesho kuluntu lwethu, i-FSCJ iyaqhubeka nokudlala indima ekhokelayo ekunikezeleni abaqeshi bommandla ngabasebenzi abanezakhono eziphezulu, abafundileyo. Ngaphezulu kweenkqubo ze-160 +, iziqinisekiso zomsebenzi kunye nezobuchwephesha, kunye nokuqhubeka kweenkqubo zemfundo zabasebenzi ezinikezelwa kumashishini afunwa kakhulu anje ngezoBugcisa, uLuntu, ezoNxibelelwano kunye noYilo, iShishini, iMfundo, iNzululwazi yezeMpilo, iMveliso, ukuThengisa kunye noKwakha, uKhuseleko loLuntu, iSayensi , Itekhnoloji, Ubunjineli neMathematics, iiSayensi zeNtlalo kunye nokuziphatha kunye neeNkonzo zoLuntu. Ukongeza kwiinkqubo zesidanga kunye nesatifikethi, i-FSCJ ibonelela ngezixhobo kunye neenkqubo ezinceda ukuhlangabezana neemfuno zabasebenzi basekuhlaleni kunye neenkampani ezinceda ukutyala imali kuqeqesho, imfundo kunye nophuhliso lwabasebenzi. Uqeqesho lweZiko-Imfundo yeShishini-uPhuhliso lwaBasebenzi - Iinkqubo zokuFunda ngaMazwe ngaManye amaDigri aBafundi beDanga lokuQala kunye noPhuculo-loPhuculo
Florida State University KwiYunivesithi Iziko leMfundo Izifundo ngokubanzi zeKholeji Enye yeeyunivesithi eziphambili zophando, Florida State University igcina, yandisa, kwaye isasaza ulwazi kwisayensi, kwitekhnoloji, kubugcisa, kubuntu, nakwimisebenzi, ngelixa isamkela ifilosofi yokufunda ngokugxininisa kwizithethe zobugcisa benkululeko kunye nokucinga okunzulu. Ikhampasi yokwamkela i-FSU ikwindawo yokuqala eqhubekayo yemfundo ephezulu eFlorida, kwindawo ekhuthaza ukubuza simahla kwaye yamkela iyantlukwano, kunye neentshatsheli zobuntshatsheli, kunye nendawo ephambili entliziyweni yelikomkhulu likarhulumente. IINKCUKACHA NGOKUGQIBELEYO Yasekwa ngo-1851; Indawo endala eqhubekayo yemfundo ephakamileyo eFlorida Carnegie yeKomishini yoHlelo: "IiDyunivesithi zoGqirha: Umsebenzi oPhezulu wezoPhando" Abafundi be-41,717 abavela kuzo zonke izithili zaseFlorida kunye namazwe ali-131 awamkele iprofayili entsha yehlobo / ukuwa kwe2018: Ukuwa: i-4.4 ye-GPA ephakathi; Umyinge wama-31 wamanqaku okudityaniswa komthetho; Umyinge we-1360 wenqanaba le-SAT yehlobo: I-4.0 ye-GPA ephakathi; Umyinge wama-27 wamanqaku okudityaniswa komthetho; 1260 umndilili wenqaku le-SAT. Uphando-kwimfundo yamabanga aphakamileyo-Inkqubo yokufunda kwelinye ilizwe
FloridaMakes Umbutho ongekho phantsi kukarhulumente Umbutho Wophuhliso Loqoqosho Manufacturing FloridaMakes yinkampani kurhulumente, ekhokelwa lushishino, ubambiswano phakathi kukarhulumente nabucala obusebenza ngokudibana kwemibutho yabavelisi bengingqi yaseFlorida ngenjongo eyodwa yokuqinisa kunye nokuqhubela phambili uqoqosho lwaseFlorida ngokuphucula ukhuphiswano, imveliso kunye nokusebenza kwetekhnoloji yecandelo layo lemveliso, kugxininiswa kuncinci - kunye neefemu eziphakathi. Ifezekisa oku ngokubonelela ngeenkonzo ezijolise kwimilinganiselo emithathu yexabiso: ukwamkelwa kwetekhnoloji, ukukhula kwetalente, kunye nokukhula kweshishini. FloridaMakes ngummeli osemthethweni weNtsebenzo yoLwandiso lweNtsebenziswano (MEP) yeNethiwekhi yeSizwe eFlorida, inkqubo yeZiko leSizwe leMigangatho kunye neTekhnoloji, iarhente yeSebe lezoRhwebo laseMelika. Uvavanyo lweshishini-UCwangciso lobuchule-Ukukhawulezisa iTekhnoloji-Uphuhliso lweMakethi lwaMazwe ngaMazwe-Uqeqesho lwabasebenzi-Ukuphuculwa kwetyathanga lonikezo-Ukuphuculwa kwenkqubo
Genesis Water Technologies kumvelisi Ucoceko lweTekhnoloji Amanzi kunye neNkunkuma yamanzi Genesis Water Technologies Inkokeli ephumelele amabhaso kumanzi okusela akhethekileyo kunye nezisombululo zokusetyenziswa kwakhona kwamanzi amdaka. Sigxininisa ekukhonzeni amashishini nakwizinto ezisetyenziswa emanzini ngaphakathi e-US nakwihlabathi liphela ekuhlangabezaneni nemiceli mngeni yabo kumgangatho wamanzi ngokusebenzisa izisombululo zonyango eziphambili kunye neenkonzo ezisekwe kulwakhiwo kunye nentsebenziswano. Inkqubo yokuSebenzisa iiNkonzo zokuNxibelelana nobuNjineli - Unyango lwaManzi oNgcolileyo - Unyango lwaManzi lweNkunkuma eVuthayo-Ukucocwa kwaManzi- Unyango lwaMayeza kunye neFlocculants
Global Tampa Bay Umbutho ongekho phantsi kukarhulumente Umbutho Wophuhliso Loqoqosho Uphuhliso lwamashishini Global Tampa Bay Yindibaniselwano yengingqi phakathi kweBhunga loPhuhliso lwezoQoqosho laseTampa Bay, uPhuhliso lwezoQoqsho lwePinellas County kunye neBhunga loPhuhliso lwezoQoqo lePasco ukwandisa amathuba oshishino kumazwe aphesheya kwiinkampani ezikulo mmandla kunye nokuthengisa lo mmandla kwihlabathi liphela njengeyona ndawo iphambili kushishino. Kwi Global Tampa Bay, sisebenza ngokuzingca kunye namaqabane ethu oqoqosho lwengingqi afana neTampa International Airport kunye Port Tampa Bay kunye namaqumrhu aManyeneyo, oMbuso kunye nawasekhaya ukuhambisa iqhinga elidibeneyo lamanye amazwe. Umnqophiso wethu-kukugaya iinkampani zamanye amazwe ezifuna indawo ephambili kushishino e-US kunye nokwandisa amathuba orhwebo lwamanye amazwe kwiinkampani zalapho ke oko kukhuthaza ukwanda koqoqosho lwethu. Urhwebo lwehlabathi kunye notyalo-mali eTampa Bay - Urhulumente wengingqi - uPhuhliso loQoqosho - Ukufuduswa kweShishini - Utyalo-mali oluthe ngqo lwaNgaphandle
Goodyear Rubber Products, Inc kumvelisi Izixhobo zeMizi-mveliso kunye neeNkonzo IiNdawo zeHydraulic Imveliso yeRubber ye-Goodyear ngumthengisi oneminyaka engama-73 ubudala osasaza iimveliso zerabha kunye nomenzi wezinto, ohlala kwikomkhulu eSt. Petersburg, eFlorida eneendawo ezi-6 kulo lonke ilizwe. Sithumela kwihlabathi liphela ukusuka kwindawo yethu ephambili kunye nokuthumela kumzi mveliso weqabane lethu lokuvelisa kwihlabathi liphela. Sinokusebenza kunye nomthumeli wempahla oyithandayo kunye / okanye i-FedEx, i-DHL okanye i-UPS yaMazwe ngaMazwe njengoko kufuneka okanye ukuba awunayo i-forwarder, sinokucebisa ukuba ibekho. Sinikezela ngenqanaba eliphezulu lobuchwephesha kubasebenzi abanobungakanani beminyaka engama-35 kwisicelo seMizi-mveliso kunye neHydraulic Hose & Coupling, iTubing, iiMveliso zokuTywinwa kweFluid kubandakanya iigaskethi kunye nezinto zeGasket Sheet, ii-O-Rings, Ukwandiswa kwamaQabane, amaLaphu oBushushu obuPhezulu kunye neeMveliso zoThumelo lwaMandla kubandakanya ii-V-Belts, iiBhanti zeXesha leXesha kunye neePleyi. Sigxininisa nakwiibhanti zeConveyor kunye nezinye izinto ezinxulumene noko. Ngesanti kubunzulu baphantsi umbhobho - izixhobo ngesanti kubunzulu baphantsi - Coupling fracturing - fracturing Seal - Amabhanti Industrial - zokuthutha - umlilo ithumbu
Iiteknoloji zeGreen, LLC kumvelisi Iikhemikhali kunye nePetrochemicals Izichumisi kunye neTekhnoloji yoNyango lwaManzi yeNkunkuma IGreenTechnologies ivelisa izichumiso ezikhutshwa kancinci kancinci ezisebenza kwizichumisi phantsi kwegama elibizwa ngokuba yiGreenEdge®. Umgca wethu weGreenEdge ® weemveliso zisebenzisa inkqubo yethu yokuphinda isebenze enelungelo elilodwa lomenzi ukubonelela abathengi ngesandi sendalo esingisiweyo sendlela yokusebenza kwezichumisi. IGreenTechnologies isebenza kuluhlu olubanzi lweemarike zezichumisi kubandakanya ezolimo, imbonakalo yomhlaba, iitrafti zobungcali, kunye nokuthengisa ngaphakathi nakwamanye amazwe. Isichumisi - Ukuqhubekeka kweBiosolids - uLawulo - uLawulo kunye neenkonzo zokulahlwa kooMasipala
Grid Electrical Solutions Mnikezi nkonzo Ucoceko lweTekhnoloji Ukucoca Amandla GRID ELECTRICAL SOLUTIONS (GES) yinkampani yaseMelika enamava angaphezulu kweminyaka engama-25 yamava ebonelela ngezisombululo zamandla ezijikajika ezibandakanya ukuveliswa kwamandla ahlaziyekayo mvanje, ukuhanjiswa kombane, kunye nokuzala kunye / nokuzala. Isisombululo se-GES siyila izisombululo zeMicrogrids ezidibanisa imithombo yamandla ehlaziyekayo kunye nemveli kwinkqubo yakho yokuhambisa ngenjongo yokwandisa ukusebenza ngokukuko, ukuthembeka kunye nokomelela kwenkqubo yonke ngelixa unciphisa iindleko kumthengi. Inkampani ikwabonelela ngezinye iinkonzo ezinje ngokusebenza kunye nolondolozo kunye neenkonzo zezemali ezibandakanya ukuqeshisa kunye nezivumelwano zokuthengwa kwamandla (PPA) .I-GES iphuhlisa iiprojekthi kula macandelo alandelayo: Izibonelelo: Iinkonzo zonxibelelwano ngomnxeba kunye neenkonzo zoncedo: Amaziko okuthenga, iibhanki, kunye nokuqonda Izakhiwo Zoshishino: Ukutya kunye nesiselo Ukubuk 'iindwendwe: Iihotele kunye neeholide Amaziko: Ikhampasi, izikolo, izibhedlele Urhulumente: Oomasipala IiNkqubo zoMdibaniso waMandla aVuselelekayo-Inkqubo yoHlaziyo lwaMandla oluHlaziyiweyo-Uyilo lwaMandla eSolar - Amandla oMoya - uLawulo lwaMandla - Izixhobo - iMicrogrids - Ugcino lwaMandla
H2O International kumvelisi Impahla zomthengi Izixhobo zokucoca amanzi Umvelisi weenkqubo zokucoca amanzi esebenzisa iGAC kunye neendaba zeKDF. Uluhlu lwethu lweemveliso lubandakanya i-countertop, i-undersink, ii-dispensers kunye neeyunithi zendlu yonke, kunye nembiza yokucoca amanzi kunye neentloko zeeshawari. Iinkqubo zokucocwa kwamanzi - Amacebo okucoca amanzi aKhaya -Izixhobo zeKhitshi kunye neePompo - Indawo yokuhlambela izixhobo zangasese- I-POU / POE Ukucocwa kwamanzi
Hassell Free Exports, Inc. zokusasaza Izinto zokwakha Izixhobo zoKwakha Eyasungulwa ngo-1999, uVernon Hassell kunye nosapho, oluvela kwisiqithi saseDaba saseCaribbean eSaba, bangabanikazi kwaye basebenzise i-Hassell Free Companies, Inc. ePalm City, eFlorida. Ujoliso lwethu kule Expo ikwiZibonelelo zeSakhiwo sasimahla saseHassell kunye nokuThunyelwa kwelinye ilizwe. Siphatha ukuthengwa, ukugcinwa, kunye nokudityaniswa kwezinto zokwakha kunye nezinye izinto zeprojekthi ezinkulu nezincinci zokwakha kuzo zonke iziqithi zeCaribbean. Sinothungelwano olukhulu lwababoneleli abanikezela ngezixhobo ezininzi ezisivumela ukuba sizifumane ngexesha elifanelekileyo nangamaxabiso afanelekileyo. Sikwabonelela ngoncedo kulungiselelo lokufumana izixhobo ukuya esiphelweni sazo kwisebe lethu lokuhambisa. Injongo yethu ephambili kukunceda abo bakwicandelo lokwakha laseCaribbean ngezinto zokufumana, nangona kunjalo, sihlala sijonge ukusebenzisana nabathengisi bezinto zokwakha ezinokukhuphisana kwintengiso yethu. Siyathemba ukuba uyonwabele indlwana yethu kwaye uzive ukhululekile ukufikelela kuyo nayiphi na imibuzo. Inkampani yokuThengisa kumazwe angaphandle-Ukuhambisa ngenqanawa eCaribbean -Izinto zokwakha -Umgangatho - iiwindows - iiMinyango - iikhabhathi -Ukuhlaziywa kwendawo yokuhlala -Ukwakha indawo yokuhlala
Help Hair Inc kumvelisi Impahla zomthengi IMveliso yezeMpilo kunye nezoBuhle Uncedo lwe-Hair® Shake kunye noNcedo lweeVithamini zeenwele, sebenzisa yonke ifomula yendalo kubandakanya iProtein, kunye neBiotin ebalulekileyo, i-Niacin kunye ne-B-12 zezona vithamini zilungileyo zokulahleka kweenwele ukunceda iinwele zikhule. Iprotein Shake kunye neevithamini zeenwele zondla iifolli zeenwele ezivela ngaphakathi ukuze zikhule ngokukhawuleza iinwele. Singu- # 1 Ugqirha oCetyiswayo oyiMveliso kaGqirha engezizo iinwele. Sebenzisa iHelp Hair® Shake yonke imihla kunye neeNwele zethu zoNcedo lweeVithamini kwizinwele ezisempilweni nezibonakalayo. Iimveliso zethu bezisemarikeni ngaphezulu kweminyaka eyi-14 kwaye sine-1000 yabathengi abonwabileyo. Iyacetyiswa ngaphezulu kwe-400 yeDermatology kunye neeklinikhi zokulahleka kweenwele kwihlabathi liphela. Inkqubo yoNcedo lweNwele® iqukethe amanyathelo ama-4 eenwele ezisempilweni kunye neenzipho ezintle. I-shampoo yethu kunye ne-conditioner isebenza ukususa i-sebum kunye ne-DHT kwi-scalp. Zombini zinezinto ezikhutshiweyo ezithi xa zifunxwe sisikhumba zentloko zikhuthaza ukukhula okunempilo. Zonke iimveliso zenziwe nguGqirha Shapiro ngaphezulu kweminyaka engama-30 yamava okubuyiselwa kweenwele. Izongezo zesondlo sokukhula kweenwele-iShampoo-Isixhobo sokulungisa iinwele-Ukulahleka kweenwele- Iivithamini -Unyango lweBaldness- Imveliso yeClagengen
Hernon Manufacturing kumvelisi Izixhobo zeMizi-mveliso kunye neeNkonzo Izinto zokuncamathelisa kunye neeTywina Hernon Manufacturing, Inc.® ivelisa ukusebenza kokuncamathelisa okuphezulu, ukutywina, ukukhanya kwezibane ze-UV kunye neenkqubo zokuhambisa ngokuchanekileyo. IHernon® igcina ithala leencwadi elingaphezulu kwe-5000 yokuncamathela kunye neefomula ezizodwa ukongeza ekudaleni iifomula ezizenzekelayo ukujongana nemiceli mngeni ethile yokuvelisa. Ilabhoratri egcweleyo ngaphakathi ngaphakathi eqinisekisa ukujika ngokukhawuleza kwiiprojekthi zovavanyo kunye nophuhliso kunye necandelo leMveliso yoVavanyo lwendawo ekuvumela iHernon® ukuba yakhe, isebenze, kwaye idibanise iinkqubo ezizodwa zokuhambisa nakwezona nkcukacha zibalulekileyo. Olu manyano linceda iHernon® ukubonelela abathengi ngesisombululo esipheleleyo saso nasiphi na isicelo esingafaniyo. Imveliso yeHernon® izinze eSanford, FL., Kwaye igcina uthungelwano olwandayo lwabasasazi abangaphezulu kwe-100 kunye neendawo zamaqabane kwihlabathi liphela. Sele ithumela kumazwe angaphezu kwama-60, iHernon® inokubonelela ngezisombululo zokubambelela kwimisebenzi yokuvelisa naphina emhlabeni. Izinto zokubambelela kwimizi-mveliso - Izitywina - Izitywina zomsonto - Izisombululo zokunyanga - Ukuhambisa iirobhothi ezinamathelayo - IziTywina zeGasket - Uthintelo oluvuzayo
Honeycomb Company of America kumvelisi Ukuhamba ngenqwelomoya kunye neAerospace Amanqanaba oMkhosi wezoKhuselo loMkhosi kunye noRhwebo Honeycomb Company of America Inikezela ngeemveliso ezisemgangathweni kunye neenkonzo kwi-Aerospace Industry ukusukela ngo-1948. Le nkampani igxile kwizibophelelo zeebhondi ezisebenzisa isinyithi kwisinyithi, isinyithi kumbindi wobusi, kunye nolwakhiwo oludityanisiweyo. I-Honeycomb yinkampani edityanisiweyo ethe nkqo equka ubunjineli, ukuvelisa, kunye nemisebenzi yokuqinisekisa esemgangathweni. Inkampani inezixhobo zokujongana nokwakha ukuprinta ukuvelisa kwayo nayiphi na into eyakhiweyo yesakhiwo. Xa kufuneka, iHoneycomb inokuguqula iimveliso zenjineli ezingenalo idatha yobuchwephesha efunekayo ekwenziweni. Ukongeza kwimveliso, i-Honeycomb inezixhobo zokulungisa ezinokuphatha ulungiso lwezinto ezahlukeneyo. Xa ukulungiswa kungaphaya kwemida yolungiso lwesiko, iqela lethu lobunjineli linokuhlala liyile kwaye libhale iqhinga lokulungisa lokungeniswa kwiqumrhu elilawulayo elifanelekileyo. Kwiimeko ezininzi, i-Honeycomb inokulungisa iindawo ebeziza kufuna ukubuyiselwa okubiza kakhulu. Aerostructures -Iinyosi zeHoneycomb kunye neeComposites eziDibeneyo- iNadcap eyamkelweyo- Isinyithi esiya kwiCompact yeHoneycomb Composites
Hosmed Inc kumvelisi IiSayensi zoBomi kunye neTekhnoloji yoNyango Izixhobo Zibhedlele Hosmed Inc. uchaze ukhathalelo olubanzi ekuboneleleni ngezixhobo zonyango, izixhobo zonyango, izixhobo zelebhu kunye namayeza. Siyinkampani yaseMelika esekwe eMiramar, eFlorida ukusukela ngo-2009. Hosmed Inc. ngumvelisi ophambili wezixhobo zonyango ezikumgangatho ophezulu ngeendlela ezahlukeneyo ezinje nge: Anesthesia kunye ne-Respiratory, Life Care Solutions, Diagnostic Cardiology, Maternal Infant Care, Ultrasound, X-Ray, IV Therapy, Operating Room, Laboratory, Hospital Furniture and other related iimveliso zezibhedlele, iiklinikhi, kunye nokhathalelo lokuqala. Hosmed Inc. ineqela elizinikeleyo labasebenzi eliza kuthwala uqeqesho lwe-biomedical kunye nobuchwephesha kunye nenkxaso kubasasazi bethu abavela kwihlabathi liphela ngenjongo yokubanceda kufakelo, ukugunyazisa, kunye nokugcina izixhobo zethu zonyango. Iimveliso zethu zithunyelwa ngokubanzi kwiLatin America, Middle East, Afrika, South East Asia. I-Anesthesia kunye ne-Respiratory, iZisombululo zoKhathalelo loBomi, i-Cardiology yokuChonga, uKhathalelo lweNtsana yoomama, i-Ultrasound, iX-Ray, unyango lwe-IV, Igumbi lokuSebenza lezixhobo zezoNyango
HospitalesMoviles.com zokusasaza IiSayensi zoBomi kunye neTekhnoloji yoNyango Unyango oluPhathekayo kunye nezixhobo zikaXakeka HospitalesMoviles.com izicwangciso, uyilo kunye nokwenza iiprojekthi zonyango ezinxulumene noko kwihlabathi liphela-ugxininiso lwethu kunye nenjongo yethu kukubonelela ngeZibhedlele eziSebenzayo eziSebenzayo eziSebenzayo! Ezi projekthi zinokuba, Izibhedlele eziSendleleni eziHambayo, eziQinisekileyo, izibhedlele eziModyuli kunye neKlinikhi. Izibhedlele eziSelfowuni - Iiklinikhi eziSelfowuni - Izibhedlele eziMabala - Izibhedlele zePreFab Covid - Izibhedlele zeTekhnoloji yeNkunkuma yezoNyango kunye neShredders - Isihlanganisi sezixhobo zonyango
IBT Online Mnikezi nkonzo Ezobuchwepheshe UkuThengiswa kweWebhu Ukusukela ngo-2002, besigxile ekuncedeni iinkampani ukuba zikhulise ishishini labo kumazwe aphesheya. Iinkqubo zethu ezikwi-Intanethi zeHlabathi liphela zinengxelo eqinisekisiweyo yokuhambisa izinto ezithunyelwa ngaphandle, intengiso, uphawu kunye nokukhula kweshishini kubathengi bethu, ngokwenza eyona ndawo isebenzayo kwiwebhusayithi, ukuthengisa kwi-Intanethi kunye ne-ecommerce. Indawo yeWebhusayithi -Ntengiso yeHlabathi yeNtanethi
IMR Environmental Equipment kumvelisi Izixhobo zeMizi-mveliso kunye neeNkonzo Izixhobo zokuHlola umoya kunye neGesi IMR Environmental Equipment, Inc.yila kwaye yenze abahlalutyi bokutsha. Sinobukho behlabathi lonke. Sivelisa izixhobo zokuvavanya indawo ngokukhawuleza kunye nezixhobo zeCEMS kuhlalutyo lwendawo. Le yimizekelo embalwa yamatyala okusetyenziswa kwezixhobo zethu: i-HVAC, Amandla, uLawulo lweNkqubo, ukuThengiswa kweGlasi, iZityalo eziMandla, ukutya, iiDyunivesithi, naphi na apho kufuneka khona Uhlalutyo lweRhasi. Abahlalutyi be-IMR-Abavavanyi bokuvuza kweRhasi-Abahlalutyi beRhasi yeFlue-Abavavanyi bokukhutshwa komoya kunye neGesi-Abavavanyi boMgangatho woMoya-i-CEMS -Irhasi ephathekayo kunye nabahlalutyi bomoya
Indian River State College KwiYunivesithi Iziko leMfundo Izifundo ngokubanzi zeKholeji Njengenkokeli kwezemfundo kunye nokuyila, Indian River State College Iguqula ubomi ngokunikezela ngemfundo ekumgangatho ophezulu, efikelelekayo, kunye nokufikeleleka. I-IRSC yikholeji ebanzi evunyiweyo yokuwongwa ngeDigcalaureate Degrees, Associate Degrees, kunye neKholeji kunye neziQinisekiso zobuGcisa. Iziqinisekiso zobuGcisa-isiDanga seBachelor - Iinkqubo zokuFunda kwelinye ilizwe
Industry Equipments Inc. kumvelisi Umlilo kunye noKhuseleko Izicimi-mlilo kunye nezixhobo zohlangulo Khonza ngokufanelekileyo nangokumanyeneyo kwiinkqubo zeShishini, ukuGcina uBomi, ukuGcina ixesha kunye neMali, ngokuQhubeka Ukuphucula imiGaqo yeKamva lethu ngokuSebenza kunye nesiXhobo sokuSebenza esiPhezulu. Iipompo ezincinci (Izixhobo zomlilo) - Izixhobo zeAmbulensi - Izixhobo zeTraki yoMlilo - Izixhobo zoKwakha eziPhindwe ngokutsha - Iilori zoMlilo eziPhindiweyo - IiAmbulensi eziPhindiweyo
Infinium Medical kumvelisi IiSayensi zoBomi kunye neTekhnoloji yoNyango Izixhobo zonyango Umi 2001, Infinium Medical ngumvelisi ophambili kunye nomenzi wezixhobo zonyango. Isekwe eMelika, Infinium Medical unedumela lokubonelela ngetekhnoloji ekhokelela kumgangatho kunye nomgangatho. Sigxininisa kwiiMonitha eziMonde, iiNkqubo zokuBulala iintlungu, iitafile zoqhaqho, iiLaryngoscopes zeVidiyo, unyango lweShockwave kunye nezisombululo zeTelehealth. Ngaphandle kwemarike yaseMelika, Infinium Medical Inothungelwano olukhulu lomhambisi wamanye amazwe, kubandakanya amazwe angama-87. Ukubeka iliso kuMonde kwezixhobo zoNyango -I-Capnografi-i-EKG-Ukuhanjiswa kwe-Anesthesia-Itafile yotyando-I-Pulse Oximeter
iQ Valves kumvelisi IiSayensi zoBomi kunye neTekhnoloji yoNyango Izixhobo zonyango iQ Valves yindlela echanekileyo yokulawula ulwelo lwe-solenoid yomvelisi onika izisombululo zobunjineli kwizicelo ze-OEM. IQ ibamba amalungelo awodwa omenzi wechiza kwezixhobo zolawulo lokuhamba. Siyazingca ngobunjineli bethu obutsha kunye nexesha lokutshintsha ngokukhawuleza. iQ Valves I-Co ibandakanyiwe kwi-2005 emva kweminyaka yamava kwimizi-mveliso nakwimizi-mveliso ye-solenoid phantsi kwegama langaphambili iTeknocraft Inc. Inkampani ibonelele ngeenkonzo zokuvelisa kunye nezobunjineli ezijongana netekhnoloji yevaluva ye-solenoid yezonyango, izixhobo, kunye nokusetyenziswa kwemizi-mveliso ukusukela ngo-1984. 9001: 2015 inkampani eqinisekisiweyo. Ulawulo lweFluid Solenoid Valve - Iipavalment ezilinganayo - Ivaluva zeSolenoid - Izixhobo zeVentilator Equipment
IRI, The CoSort Company kumvelisi Ezobuchwepheshe Ulawulo lweDatha oluKhulu kunye noKhuseleko Eyilwe ngo-1978, i-Innovative Routines International (IRI), a / k / a IRI, The CoSort CompanyUlawulo lwedatha yase-US i-ISV idume ngokusetyenziswa ngokukhawuleza kwedatha kunye nezisombululo zokhuseleko lwedatha. Ikomkhulu laseMelbourne, eFlorida, i-IRI imelwe kwizixeko ezingama-40 kwihlabathi liphela. Abathengi be-IRI bakumashishini amaninzi anedatha enkulu okanye ethe-ethe kwimithombo eyahlukeneyo yokwenza, ukukhusela, ukubonisa, okanye ukubonakalisa. Ixhaswe yi-IRI CoSort okanye iinjini zeHadoop, iqonga lolawulo lwedatha ye-IRI Voracity lidibanisa ukufunyanwa kwedatha, ukudityaniswa, ukufuduka, ulawulo, kunye nohlalutyo kwipaneli enye yeglasi, eyakhiwe kwi-Eclipse. I-Voracity ibandakanya iimveliso kuMlawuli weDatha ye-IRI [CoSort, Extract Fast, NextForm kunye neRowGen] kunye ne-IRI Data Protector [FieldShield, CellShield EE, kunye ne-DarkShield] suites ukubonelela ngemithombo emininzi yolwazi kunye nokuhlelwa, ukuguqulwa kwedatha okukhawulezayo kunye nokufuduka, idatha yokugcina i-ETL kunye nokuphambana kwedatha, ukucocwa kwedatha kunye nokufihla i-PII, idatha yovavanyo eyiyo, kunye nokunye. Ubungasese beDatha-uThintelo loLwazi lwedatha-uLawulo lweDatha eNkulu- iMasking yeDatha-UkuBeka emngciphekweni kwe-ID-Indawo yokugcina idatha - i-ETL -Idatha yoVavanyo-i-GDPR -Ubukrelekrele boShishino -Ukufuduka kwedatha-Ukhuseleko lweCyber
Jacksonville Port Authority (JAXPORT) Mnikezi nkonzo Izibonelelo kunye nezothutho Igunya lezibuko Ifumaneka kuMazantsi mpuma e-US kwindlela enqamlezayo yesizwe kaloliwe kunye nohola wendlela, i Jacksonville Port Authority (JAXPORT) lisango lakho lehlabathi ukuya eFlorida, ilizwe lesithathu ngobukhulu kwilizwe. I-JAXPORT liziko elikhulu lesikhongozeli eFlorida kwaye lelinye lawona mazwe makhulu ekuphatheni izithuthi. Amaninzi olwandle athwala umnxeba eJAXPORT, ekubonelela ngamaxesha okhuphiswano lokuya kumazibuko angama-140 kumazwe angaphezu kwama-70. I-JAXPORT inikezela ngenqanawa ukuthuthwa ngokungenamthungo ngeefemu zeloli ezili-100 kunye noololiwe abangama-40 bemihla ngemihla ngololiwe weCandelo I CSX kunye ne-NS kunye nomgaqo kaloliwe wengingqi we-FEC. Iqela le-JAXPORT elinamava lokuthengisa linokukunceda ukuba uphuhlise isicwangciso esenzelwe wena ukuze uxhamle ishishini lakho. Nxibelelana nathi namhlanje okanye ufunde ngakumbi ngezibonelelo zeJAXPORT. Ukuhambisa ngenqanawa elwandle-Ukuphathwa kwemithwalo-ukuGcina uLwabiwo-ukuHanjiswa-kweTheminali yokuhamba ngenqanawa
Just Fur Fun kumvelisi Impahla zomthengi IiNkonzo zePetro Ukunxiba kunokuba mnandi kakhulu! Ke kaloku, xa ufikelela kufikeleleko, kunjalo nangabahlobo bakho abanoboya! Just Fur FunI-® ine-line epheleleyo ye-canine ekhethekileyo, i-feline, i-human and equine accessories-beaded accessories. ke ukudibanisa ndawonye ikhola yenja efanelekileyo kubo, kunye nebhanti ehambelana nawe, kuya kuba mnandi kwaye kube lula! Just Fur Fun® ifuna ukunceda ukudala olo manyano longezelelekileyo phakathi kwakho nezilwanyana zakho kuba sikholelwa ukuba ukubonakalisa isimbo sakho kufuneka kuqhubekeke nge-leash! I-leashes yethu yesikhumba kunye neekhola zihonjiswe ngokwenza i-beading eyenziwe ngezandla ukuze zifanise enye nenye, kunye nezixhobo zokuzonwabisa ezenzelwe wena ngokukodwa ukuba zitshatise! Eyethu Just Fur FunUmgca wemveliso eyahlukileyo ® ubandakanya: iikholeji zezilwanyana zasekhaya, ii-leashes zezilwanyana zasekhaya, iibhanti zesikhumba kunye neseti ye-equine; iibhanti zokuhombisa ezenziwe ngezandla, i-spurs kunye ne-spur straps. Zonke Just Fur FunIzinto ze-100 zenziwe ngesandla e-USA. Zilungiselele ii-oohs kunye nee-ahhhs kuba ngoku ukuhamba epakini kuya kujika iintloko kunye nesilwanyana sakho esine-beaded pet kunye nezinto zabantu! Iikhola zeenja ezenziwe ngesandla - Izandla zezinja ezenzelwe izandla - Amabhanti ezandla zenziwe ngobuGcisa
Keiser University KwiYunivesithi Iziko leMfundo Abasebenzi bezeMfundo, iManyano yezeMpilo kunye noShishino lweHlabathi At Keiser University, Silapha ukukunceda uphumelele ngokubonelela ngesiseko sobungcali kunye nesifundo esifunekayo ukufezekisa iinjongo kunye neenjongo zakho zemfundo. Co-eyasekwa nguGqirha Arthur Keizer, Chancellor, kunye nomfundi omnye kuphela kwiminyaka engama-43 eyadlulayo, namhlanje Keiser University yeyona yunivesithi inkulu yaseFlorida, hayi eyenzuzo. UKeizer ugunyaziswe ngokwengingqi nguMbutho waseMzantsi weeKholeji kunye neZikolo njengezinga lesithandathu leyunivesithi, ebonisa amanqanaba kwinqanaba lobugqirha elandisiweyo kunye nomdla wophando. Njengelungu leekholeji ezizimeleyo kunye neeDyunivesithi zaseFlorida Keizer ukhonza ngaphezulu kwabafundi abangama-20,000 kwizifundo zayo ezingama-21 eFlorida. UKeizer wamkelwa nguMbutho wamaSpanishi weeKholeji neeDyunivesithi njengeziko laseSpain-lokuKhonza. Keiser University iyaqhubeka nokuba liqabane elixabisekileyo kubaqeshi, eluntwini, kwaye, ngaphezulu kwako konke, ukhetho oluxabisekileyo lwabafundi abanzulu ngemfundo yabo kunye nomsebenzi wabo. Nxulumana neNkqubo yeziDanga zobugqirha- iManyano yezeMpilo- iNzululwazi yezobuGcisa-uLawulo lwezoShishino- iTekhnoloji yoLwazi -Ukubuk 'iindwendwe
KIZANDY kumvelisi Impahla zomthengi Imveliso yeConfectionery Kizandy, Inkampani yaseMelika yasekwa ngo-2010 ukwenza umgca weemveliso ze-confectionary ezipakishwe kwiitoti zoyilo ezintsha ezinokubhenela kubathengi kwihlabathi liphela. Sithathe ixesha lethu ukuphanda, ukuphuhlisa kunye nokwenza iimveliso ezinencasa enkulu kunye nomtsalane kwilizwe ngokubanzi. Ukukwazi kwethu ukwenza uyilo lweephakeji ezintsha kukhokelele ekuwineni iitoti zoyilo. Oko kuxhamle abathengisi ekuveliseni ukwanda kumazwe angaphezu kwama-40! Iiswidi eziSimahla - Izinto zePipi
Kushae by BK Naturals kumvelisi Impahla zomthengi IMveliso yezeMpilo kunye nezoBuhle I-Kushae yi- # 1 kwaye KUPHELA kwendalo yemveliso yococeko lobufazi eyenziwe yi-OB / GYN ... iKushae yiyo yonke inkathalo yendalo ezantsi phaya! I-OB / GYN-Ukhathalelo lwezeMpilo yabasetyhini
LatamXport LLC zokusasaza Impahla zomthengi Izixhobo zokuLungiselela ngokungxamisekileyo LatamXport LLC liShishini elincinci eliNabaniniweyo. Sibonelela ngokulungela okungxamisekileyo kunye neemveliso zoncedo lweentlekele ezinje ngee-COVID-19 zoNyango, iiSandbags ezingenasanti, iifowuni zesathelayithi. Ezi mveliso zinokuthengwa ngamaQumrhu kaRhulumente, amashishini amancinci, amacandelo abucala nawoluntu, imibutho yabanini makhaya, izikolo zikarhulumente nezabucala, izibhedlele, abacimi-mlilo, izakhiwo kunye nolunye uluntu lwasekhaya kunye neeyunithi zokuphendula ngokungxamisekileyo. Ukuzilungiselela ngokungxamisekileyo-Uncedo lweNtlekele - I-COVID-19 Izixhobo zoNyango-iiSandbags ezingenasanti - Unxibelelwano lwesathelayithi- Imilinganiselo yokutya okungxamisekileyo- Ilanga lokugxotha iingcongconi elangeni
Liquid-Vet by COOL PET Holistics kumvelisi Impahla zomthengi IiNkonzo zePetro I-Liquid-Vet® luphawu # 1 lwedosi engamanzi "i-nutraceuticals" yezilwanyana zasekhaya ezinencasa, ezilula, nezisebenza ngokukhawuleza kuneepilisi, umgubo kunye nokuhlafunwa okwangoku kwintengiso. Ngapha koko, iifomula zeLiquid-Vet® zenziwe eMelika kwaye zinesiqinisekiso sokubuyiselwa imali. Impilo yezilwanyana kunye neziXhaso zokuPhila
LOKSAK kumvelisi Impahla zomthengi UkuGcinwa kweeMveliso zaBantu LOKSAK, Naples, eFlorida ngumsunguli weLOKSAK, OPSAK, SHIELDSAK kunye ne-CBRNSAK. Iimveliso zethu ziphela zinokuthengiswa kwaye zingena manzi ngokupheleleyo, ubungqina bothuli kunye nengxowa yokugcina ubungqina bokufuma obufumanekayo kwintengiso yabathengi. Iimveliso zethu zazenzelwe ukugcina umxholo ukhuselekile emanzini, kodwa kwacaca ngokukhawuleza ukuba ibhegi inakho okungaphezulu. Ngo-2006, njengoko imveliso yayivelisa ukubanakho kokwenza ukuba iibhegi zethu zigcinwe zingavumi ukungena nakwivumba ngokunjalo, sisungule imveliso entsha-OPSAK iingxowa ezizinzileyo. Ezi ngxowa zinobungqina bevumba zilungele ukugcina iifriji zingenamavumba aqinileyo kunye nokugcina izilwanyana zasendle kude nokutya ezinkampini. LOKSAK ithengisa iimveliso kwiimarike ezahlukileyo njengokusetyenziswa kweemveliso zethu. Sithengisa kumazwe aphesheya kwezona ntengiso zininzi zangaphandle kunye nezoluntu kunye nawo onke amasebe omkhosi, urhulumente kunye nokunyanzeliswa komthetho kwihlabathi liphela. Xa kuziwa kugcino oluphezulu, sikulungele ukuhlangabezana nomceli mngeni omkhulu olandelayo. Izikhwama zoGcino ezinokuphinda zisetyenziswe zinokuphinda zingabinamanzi - Izikhuselo zoonomathotholo zoonomathotholo - Izikhongozeli zothuli-Iziqulatho zobungqina bokufuma
Loos Naples kumvelisi Ukuhamba ngenqwelomoya kunye neAerospace Ukulungiswa kweeNqwelomoya kunye nokuLungiswa Umnikezeli ngenkonzo ogcweleyo woomatshini besiko, intambo yocingo, izixhobo zentambo, izixhobo, kunye neendibano. Ukuchaneka ngokwezifiso-Intambo yocingo - Ukufakwa kweentsontelo zentsimbi -Izilinganisi zethambo - Abasiki beentambo - Iipleyi - Izithungu
Lotus Bio-Mineral kumvelisi Impahla zomthengi IMveliso yezeMpilo kunye nezoBuhle Phila ubomi obucocekileyo, obuhle bemihla ngemihla kwaye ngawo onke amaxesha ngokuzithemba kokunxiba iimveliso onokuzithemba. Izinto zokuthambisa ezicocekileyo ze-lotus bio zamaminerali zenziwe ngononophelo kwaye zaveliswa ngaphandle kwezithako eziyityhefu. Sizibambe kumgangatho ophezulu wokungafihlisi kunye nokulula kokusebenza okuninzi, izithako ezisekwe kumgangatho. Ngokwenza izinto ezintsha ngobukrelekrele, ukuthotyelwa kunye nokunyuselwa, uMbutho ococekileyo woNobuhle uqhagamshela imixokelelwane yonikezelo, ukuhlangabezana neemfuno zokuthotyelwa kunye nokufezekisa iinjongo ezibekwe ngabathengi kunye neempawu ngokufanayo. Izinto zokuthambisa- Iimveliso zobuhle-Iimveliso zoKhathalelo lolusu
Madico, Inc. kumvelisi Automotive Iingubo zeglasi kunye neeLaminates Madico, Inc. ngumenzi ophambili wemiboniso bhanyabhanya yeefestile ezintsha, ukutyabeka, izisombululo zentsimbi kunye nezokulaminetha. Iimveliso zeenjineli zaseMadico ukugqitha kulindelo kumashishini kwihlabathi liphela kubandakanya elezemoto, uyilo, ukhathalelo lwempilo, i-aerospace kunye nezinto zombane zabathengi. I-ProtectionPro® sesona sikhuselo siphambili sescreen kunye nomkhuseli womzimba wazo zonke izixhobo. Inkqubo yethu yokusika kwiimfuno kunye nesoftware esekwe kwilifu ebandakanya ngaphezulu kwe-20,000 iipateni zezixhobo zesiko eziqinisekisa ukuba abathengisi baya kuba nakho ukugubungela nasiphi na isixhobo esivela kwezona zitsha zikhutshiweyo kwiimodeli zelifa. Amawaka abathengisi behlabathi baphethe iPeoplePro. Ikomkhulu leTampa Bay, eFlorida., UMadico ubeka abathengi kuqala ngokuziqhelanisa, nokwenza intsebenziswano. Ngophando olomeleleyo noPhuhliso, uMadico ubalasele ekuphuhliseni izicelo ezitsha zokusombulula imiceli mngeni yabathengi. Ukusukela ngo-1903, uMadico ubenguvulandlela kwimveliso kunye nokuzibophelela okungathethekiyo kumgangatho. Ukwahlulwa kwefilimu -Ukufakwa kweefestile- Ukutyabeka ngeglasi- iiLaminates-Ukuprintwa kwefestile- UkuTywinwa kweGlasi- Izixhobo zeZithuthi - Izixhobo zeLwandle- Izixhobo zoThutho
Magic Tilt Trailers, Inc. kumvelisi Iimveliso zaselwandle kunye neTekhnoloji Iinqwelwana zeenqanawa kunye neenxalenye Ukusukela ngo-1953, iMagical Tilt Trailers, i-Inc ihlala ivelisa ezona nqanawa zeenqanawa ziphezulu ngexabiso elikhethekileyo. Iminyaka yamava, uphuculo lomgangatho oqhubekayo, kunye nezigidi zeekhilomitha kwiitreyila zethu zikunika uxolo lwengqondo lokuba iMagical Tilt yenza inqwelomoya ekufaneleyo ukuba uyithembe kwaye uyityale. Iinqwelwana zeenqanawa kunye neenxalenye
Magna-Bon International zokusasaza Iikhemikhali kunye nePetrochemicals Ifungicides yezolimo Magna Bon International LLC ngumhambisi waphesheya kweemveliso zeMagna Bon (www.magnabon.com) kubandakanya imveliso eyaziwayo emhlabeni CS-2005. Lo mxholo uphantsi wobhedu kwisisombululo sokungunda ubonakalise ukuba yinkokeli yeshishini kunye nesisombululo kwiimfuno zabalimi. Imveliso ngoku iyathengiswa kwaye iyavavanywa kwizilingo eBrazil, Spain, Greece, Turkey nase Israel. Samkela bonke abasasazi abanqwenela ukuvavanya nokuvavanya imveliso. Siza kunceda ekuboneleleni ngeesampulu kunye nokuyila iiprotokholi zovavanyo lwesityalo ukuqinisekisa impumelelo. I-Copper Organic Fungicides -Izolimo iBactericide - Izixhobo zoLimo Sanitization - iCopper Sulfate
Mainstream Engineering Corporation / QwikProducts by Mainstream kumvelisi Iikhemikhali kunye nePetrochemicals Izixhobo zeZithuthi kunye neHVAC yoNyango kunye neziXhobo Eyona nto iphambili yasekwa kwi-1986 nguGqirha Robert P. Scaringe. Eyona nto iphambili sisisombululo esisekwe kwisisombululo, uphando, uphuhliso kunye nokuvelisa amashishini amancinci abekwe eRockledge, FL. Ukuqala ngokubanzi kwaqala ngeemvumelwano ezimbini ze-R & D ezivela kwi-US Air Force. Ngoku senza izixhobo kwaye senza uphando lwe-R & D kwii-arhente ezininzi zikarhulumente wase-US kunye neenkontrakthi zikarhulumente eziphambili. Iimveliso eziphambili zithengiswa kwihlabathi liphela kwaye sibambe iSebe lezoKhuselo loRhwebo lweNkcazo ye-95%. Iimveliso zeQwik ziBunjineli obuPhambili zenza iimveliso ezikumgangatho ophezulu ezintsha, kwaye zibonelela ngoqeqesho, ukuvavanywa kunye nokuqinisekiswa kweshishini le-HVAC / R. Isicoci soMoya / iSanitizer - Izixhobo zokuLungisa iiTheminali - IKhithi yokuVavanya iAcid - Ukuvuza okuValiweyo - Isikhenkcisi kunye noNyango lweoyile - Isicoci esigwebu seCoil - Isixhobo soVavanyo lomngundo - IKhithi yokuVavanya iKhola yoVavanyo-Umsi woVavanyo lweRhasi
Mamachas Trading zokusasaza Impahla zomthengi IMveliso yezeMpilo kunye nezoBuhle Ukumela ubuchwephesha obudumileyo kunye nevenkile zentengiso kunye neempawu zolusu emhlabeni. Izithambiso-Izinto zoBuhle-iiMveliso zoKhathalelo lobuqu
Mason Vitamins, Inc. kumvelisi Impahla zomthengi IMveliso yezeMpilo kunye nezoBuhle Malunga noMason Vitamins Umgangatho onokumthemba ukusukela ngo-1967 Ibali lethu Konke kwaqala ngo-1967 ngombono wokwenza iimveliso ezikumgangatho ophezulu kunye nokugcina eyona nkonzo ibalaseleyo kubathengi. Ishishini lethu laqala kwiivenkile ezithengisa iziyobisi, kwaye ukusukela ngoko siye sandisa ubukho bethu kwimarike kwaye safumana ukwamkelwa kwabathengi kwihlabathi liphela. Siyazi ukuba impilo yosapho lwakho yeyona nto iphambili kuwe, ke ngoko, kule minyaka idlulileyo songeze ngaphezulu kwama-300 eevithamini kunye nezongezo kwimigca yethu ukwanelisa iimfuno zakho zempilo kunye nokuxhasa indlela ophila ngayo. Ukuzibophelela kwethu Sizimisele kwiimveliso zethu nakwimpilo-ntle yakho. Njengenxalenye yomsebenzi wethu, sizabalazela ukubonelela ngeyona mveliso intle yokugcina impilo esempilweni ngokusebenzisa ezona zithako zomgangatho uphakamileyo zihlangabezana neemfuno zolawulo. Izongezo zokutya-iivithamini - iiHerbals - iiGummies -Iikhrimu zobuhle-Iioyile ezibalulekileyo
McILPACK kumvelisi Impahla zomthengi IMveliso yezeMpilo kunye nezoBuhle At Mcilpack Siyazingca ngokukwazi ukubonelela ngeenkonzo ezahlukeneyo ngaphakathi endlwini, ezisivumela ukuba sibe yindawo yokuma kwindawo enye kuzo zonke iimfuno ezinokuvela kwiprojekthi yemveliso yezithambiso. Akukho projekthi incinci kakhulu okanye inkulu kakhulu kuthi. Nokuba ufuna iimveliso zombala weenwele, ukhathalelo lolusu, okanye iimveliso ze-spa, sinokukunceda. Ukuba awunayo ifomula, sinokukunceda ukuba uphuhlise enye. Ukuba unayo ifomula, sinokuyenzela imveliso, okanye sikuncede ukuphucula ifomula yakho. Sifuna ukukunceda wenze imveliso yakho kwaye uyikhuphe kwintengiso, lelinye lamaxesha akhawulezayo okujika kweli shishini. Nxibelelana nathi ukuze siqale ukusebenza kwiprojekthi yakho. Ukuthengiswa kweKhontrakthi -Ukhathalelo lweenwele-Umbala weenwele- uKhathalelo lweSikhumba- iiMveliso zeBhafu
Meopta kumvelisi Iifoto kunye neOptics Ezomkhosi kunye neAerospace Optics Meopta yinkampani yamazwe aphesheya enesiko elide, elityebileyo lokuphuhlisa, elenza imveliso, kunye nelokuhlanganisa iimveliso ezikumgangatho wehlabathi, ezokukhanya, kunye nemveliso yeelectronics. MeoptaUyilo lobuchwephesha bobuchwephesha, ukuveliswa kobunjineli kunye nokukwazi ukwenza ibandla ukuba libonelele ngeemveliso ezisemgangathweni ophezulu kunye neenkonzo kwimarike yezorhwebo, yezomkhosi kunye neyabathengi. Optical - Opto Mechanical - Optoelectronic - IiProjekti zeCinematic zeDijithali- Iitekhnoloji zeAerospace - Iinkqubo zeZikhali zoMkhosi
Meryt kumvelisi Impahla zomthengi Ukucoca kunye neMveliso yokuCoca Meryt I-Corp ivelisa izixhobo zokucoca izandla ngesandla, isibulala-zintsholongwane, izixhobo zokucoca kunye ne-degreasers eBroward County Florida, e-USA. Meryt Iimveliso zeCorp zoShishino zenziwe kusetyenziswa ubuchwephesha be-organic kunye nobuchwephesha obunobungqongileyo. Iqela lethu loyilo lweekhemesti kunye neenjineli zineminyaka engaphezu kwama-45 yamava edityanisiweyo enza imichiza ekhethekileyo kumashishini alawulwayo. I-FDA yethu ibhalise izixhobo zokucoca izandla kunye ne-EPA yokubulala iintsholongwane zihlangabezana nomgangatho ophezulu kwimarike. Meryt Umsebenzi weCorp uhlala usenza imveliso eluhlaza kunye nokuzinzileyo kokusingqongileyo ukudala izisombululo kumashishini amaninzi. Ukucoca iikhemikhali -Imichiza yokubulala iintsholongwane- Isicocisi sezandla
Miami Dade College KwiYunivesithi Iziko leMfundo Ishishini leHlabathi liphela, iZorhwebo kunye noPhando ngezoThutho Miami Dade College lelona ziko lahlukeneyo elizweni. Iikholeji zeekholeji ezisibhozo, amaziko okufikelela kunye neMDC kwi-Intanethi zibonelela ngeendlela ezingaphezu kwama-300 ezibandakanya izidibanisi kunye ne-baccalaureate degrees, izatifikethi zomsebenzi kunye nokufunda. I-MDC ingumamkeli wamabhaso amaninzi aphambili esizwe kubandakanya ne-Aspen Prize. Ikholeji isebenza njengenkokeli yezoqoqosho, inkcubeko kunye noluntu ekuqhubeleni phambili uluntu lwethu olwahlukeneyo lwehlabathi. Abasebenzi kunye nabasebenzi bayo banegalelo elingaphezulu kwe- $ 3 yezigidigidi ngonyaka kuqoqosho lwasekhaya, kwaye abaphumelele iMDC bakwizikhundla eziphezulu zobunkokeli kuwo onke amashishini aphambili. Ngolwazi oluthe kratya, ndwendwela mdc.edu. I-MDC imelwe e-FITE zizikolo zayo ezine: iMiguel B. Fernandez Family School yoShishino lweHlabathi, uRhwebo noThutho, iZiko loPhuculo lwezoShishino kunye neTekhnoloji (BIT), iMfundo eQhubekayo kunye noPhuhliso lobuGcisa (SCEPD), Ubunjineli neTekhnoloji (i-EnTec ), MDC kwi-Intanethi, kwiSikolo seNzululwazi. Ishishini leHlabathi-Izifundo zoRhwebo kunye nezoThutho-iiNkqubo zokuFunda kwelinye ilizwe
Miami International University of Art & Design KwiYunivesithi Iziko leMfundo IiSayensi zezoBugcisa IYunivesithi yaseMiami yamazwe aphesheya kwezobuGcisa noYilo (i-MIU) yiyunivesithi yobugcisa yokuyila kwindawo yokuqala yeNkulumbuso yabafundi abanomdla wokufunda e-USA. Ikhampasi yethu ibekwe entliziyweni yeZithili zoBugcisa kunye noYilo zeMiami. Iinkqubo zesidanga sethu zilungelelaniswe kumacandelo eFashoni, ukuDlala kunye neTekhnoloji, iFilimu kunye neMveliso, oopopayi kunye neZiphumo, ukuThengisa, ukuPhakathi kunye noYilo lwezoShishino, uyilo olubonakalayo kunye neNkcubeko Zonke iidigri zethu zinesiseko esomeleleyo kwezorhwebo nakwishishini kwaye sigxile kugxininiso oluthile, olufana nokuYilwa kweFashoni kunye nokuThengisa, ubuGcisa boBugcisa, uyilo lweMizobo, ukuYilwa kwangaphakathi, oopopayi beKhompyuter, Iziphumo zokuBonwa, ukuveliswa komsindo, ukuYilwa kweDijithali, ubugcisa bemidlalo kunye noyilo kunye Kaninzi! Uyilo oluyinyani-Uyilo lwangaphakathi-oopopayi kunye neziphumo-Ifilimu kunye neMveliso-yeFashoni
Miracle Fruit Oil kumvelisi Impahla zomthengi IMveliso yezeMpilo kunye nezoBuhle Miracle Fruit Oil Inkampani ibonelela ngokusebenza okuphezulu kwezempilo / impilo kunye neemveliso zobuhle ezingqinisisiweyo zisebenza kwaye zixhaswe sisayensi eqinileyo enesiQholo seMveliso yeMbewu yeoyile®. Siyi-1 yehlabathi kwaye yinkampani ekuphela kwayo yokwenza iimveliso eziqulathe iMmangaliso yesiQhamo seMbewu yeoyile®, enqabileyo kwaye engaqhelekanga imbewu yeoyile yeziqhamo evela kumthombo wendalo kwaye usempilweni, ummangaliso weziqhamo zamaqunube. Amalungelo awodwa omenzi wechiza afakwa kunye neempawu zorhwebo ezibhaliswe e-USA nakwamanye amazwe. Unyango lweziqhamo lweMbewu yeOyile® yoNyango lweNwele yeyona mveliso yokuqala kunye nokuphela kweoyile yeenwele eziqulathe iMbewu yesiQhamo seMbewu yeoyile, eqinisekiswe ukuba ikhuselekile kwaye iyasebenza ekomelezeni iinwele, ukunciphisa ukophuka, ukunciphisa ukulahleka kweenwele ngenxa yokwaphuka, kunye nokubuyisela iinwele ekonakaleni. . Isiqhamo seMbewu yeoyile yokunyanga iinwele - Izinto zoBuhle - Izinto zokuthambisa - unyango lweenwele
Morganna's Alchemy Skin Care kumvelisi Impahla zomthengi IMveliso yezeMpilo kunye nezoBuhle KwiAlchemy kaMorganna, sizibophelele ekwenzeni iimveliso zolusu ezilungiselela lonke uhlobo lolusu. I-Alchemy kaMorganna kudala inikezelwe ekufumaneni izithako ezisemgangathweni ezivela kwihlabathi liphela kwaye ukukhangela kwethu kusincede sachonga ezinye zezona zinto zilungileyo zendalo. Ngokusebenzisa inkqubo yethu yokutyikitya i-Phyto-Dermo-Cosmeceuticals, izinto ezinamandla zibekwa kulungelelwaniso, ukuhambisa iziphumo ezinamandla ngokukhawuleza nangokukhuselekileyo. Ixhaswe zizinto ezilandelelweyo kunye nezeklinikhi eziqinisekisiweyo, iAlchemy kaMorganna inamandla, izinzile, kunye nolusu lwendalo onokuluthemba. ICOSMOS Eco-Eqinisekisiweyo. Yenziwe e-USA. Ukuncipha imibimbi - Izinto zokuthambisa - iAntioxidants - Izinto ezicocekileyo - Ukhathalelo lwamehlo - Ukhathalelo lweenwele - Izikhuselo zobuso kunye neMaski - Ukunyamekelwa kolusu lweOrganic
Motive Learning Mnikezi nkonzo Iinkonzo zezeMali nezeNgcali Uqeqesho lwabasebenzi Umzi mveliso wakho, iinkqubo zakho, imigaqo-nkqubo yakho. Akukho nto yokusika i-cookie malunga nayo. Uyilo loMyalelo lujolise kumava omsebenzisi obandakanyekayo. • Abahlalutyi beenkcukacha abagqiba ukuthobela inkampani yakho • Iingcali zeVidiyo ezinesakhono kubugcisa bonxibelelwano e Motive Learning sikholelwa ukuba zonke iiprojekthi ezinkulu ziqala ngombono wokuyila kunye nesicwangciso-qhinga. Sikukhokela kwindlela yethu yokuyila ukuyila umbono woqeqesho lwakho ukuqinisekisa ukuba luhambelana ngokufanelekileyo neenjongo kunye neenjongo zakho. Sisonke sihlalutya ngononophelo inkcubeko yombutho wakho kunye neentshukumo zabafundi ukumisela ifomathi efanelekileyo ye-eLearning, ithoni, inqanaba lokunxibelelana, ukusetyenziswa koburharha, kunye nezinye izinto ezandisa amava okufunda. Ulawulo lweziQinisekiso zaBasebenzi - Uqeqesho lwabasebenzi - Uqeqesho lomsebenzi - Uvavanyo lokuSebenza koMqeshwa
MRE STAR kumvelisi Iimveliso zokutya Ukutya okulungele Ukutya MRE STAR Ukutya kwe-MRE, Ukulungele ukuTya (i-MREs) zizele, ukutya okunesondlo okunesondlo okuveliswe kwinkcazo yemikhosi yobomi obude beshelfu kunye nencasa enkulu. Isidlo esinye esipheleleyo siqulethe phakathi kwe-1,100-1,300 yeekhalori kwaye kubandakanya ukungena, istatshi, ukutya okutyayo, idizethi, umxube wesiselo esineziqhamo kunye nepakethi yokufikelela nazo zonke izinto eziyimfuneko, kunye nekofu, iilekese kunye neepepile ebomvu. Izidlo ze-MRE zikulungele ukutyiwa kwaye ukuba wongeza isifudumezi esingenasiphelo, emva koko unokufumana isidlo esishushu, esimnandi nesinempilo, naphina kwaye ngalo naliphi na ixesha. Isabelo soMkhosi kunye noKutya okuNgxamisekileyo
MRT Cloud Mnikezi nkonzo Ezobuchwepheshe ngomnxeba Ngokudibana ne-Avaya, isoftware ye-AutoCrew Cloud ibonelela ngokuqhubeka kweshishini, unxibelelwano oluthembekileyo kunye nokuguquguquka kuwo onke amashishini, kubandakanya ukhathalelo lwempilo, imfundo, ushishino kunye noorhulumente basekhaya. I-AutoCrew Cloud iqinisekisa ukuba umbutho wakho uhlala ungaphazanyiswa ngala maxesha angalindelekanga. Inkqubo yethu yenzelwe ukuhlangabezana neemfuno ezahlukileyo zemibutho ngexesha lobhubhane we-COVID 19, ukuqinisekisa ukuba iimpendulo zifike ngexesha, zinamanzi kwaye zisebenza-zinika uluntu olona thuba lokuhlala lukhuselekile. Ezi zisombululo aziphelelanga kodwa zibandakanya: Amaphulo oKwazisa abahlali ngokuzibandakanya kwe-COVID ukubuyela emsebenzini kuvavanyo lokuKhangela ngokuZenzekelayo (inqanaba lombutho kunye neLizwe) ukufaneleka kwe-Vaccine kunye nokukhutshwa kwamaphulo Ukucwangciswa kokuqeshwa kunye nezikhumbuzo Ukongeza kwizisombululo ze-COVID 19 i-MRT igxile kulwaziso ngobuninzi, Iifom ze-IVR Auto kunye nabaZenzekelayo, iNgxoxo yeWebhu kunye neeNombolo zoMnxeba ezenziwe ngokwezifiso kwiimfuno zakho. I-AutoCrew Cloud (ACNS) -Ithekhnoloji yoNxibelelwano oluNgxamisekileyo-Itekhnoloji yoNxibelelwano lweNtlekele-Izixhobo zoLwandle
Multicom kumvelisi Ezobuchwepheshe Izixhobo zonxibelelwano lwebhendi ebanzi Imveliso elandelayo ye-Gen Fiber Optic- Multicom ibhengeza isizukulwane sayo seFibre Optic Actives kunye nePassives eneenkcukacha kwi Multicom iwebhusayithi: www.multicominc. Multicom ukwazisa isimemo esitsha kunye nemowudi yemveliso esekwe kwimowudi emininzi, kubandakanya ukufakelwa kunye neemveliso zezixhobo: Multicom I-Fusion Splicer ezenzekelayo, i-OTDR, kunye nokunye-kuyafumaneka ngoku. Isizukulwana esilandelayo, sityebile, sinexabiso Multicom Umgca wemveliso yefayibha ye-fiber optic ikwabandakanya i-1310 kunye ne-1550nm Optical Transmitters, amandla asemgangathweni kunye namandla aphezulu e-1550nm EDFAs, ii-Optical Receivers, amandla asemgangathweni kunye namandla aphezulu kunye nokufumana iiMicro-Node kuphela, kunye neendlela ezahlukeneyo zeCorning-fiber-based passives, splitters, WDMs, patch kunye splice ezibiyelweyo kunye Corning ifayibha optic intambo. Multicom inebhongo lokubonelela ngobugcisa be-state-of-the-art, i-GPON / FTTH / HFC / i-Wireless / i-IT / i-fiber optic izisombululo zokuphela kweziphelo zedatha-yevidiyo-yenethiwekhi yevidiyo- ngamaxabiso amangalisayo. Izixhobo zonxibelelwano lweBroadband -Ifayibha ye-Optic Cable -I-Pole Line Hardware- Iikhowudi zeVidiyo kunye neeModyuli - Izitya zeSatellite - Izixhobo zoVavanyo lweFayibha
Multi-Media Works Mnikezi nkonzo Iinkonzo zezeMali nezeNgcali Ukuveliswa kwevidiyo Multi-Media Works yinkampani yemithombo yeendaba ephumelele amabhaso evelisa iividiyo, unxibelelwano noluntu, ukubhala umxholo kunye nemidiya yoluntu. Isiseko sethu kukubhala kunye nokuvelisa iividiyo zokubalisa amabali-iimuvi ezincinci zeenkampani, iiarhente zikarhulumente, ezingenzi nzuzo. Yintoni ekwenza ubalasele? Sifumanisa kwaye siyizisa ebomini iividiyo ezingalibalekiyo. Ukongeza, sikhuthaza iividiyo ngentengiso yedijithali ukuqhuba ukugcwala kwiWebhusayithi yakho. Njengee-generalists ezizinze eMzantsi Florida, sivelise apha ekhaya, kwilizwe lonke nakwihlabathi liphela. Ividiyo sisixhobo esinamandla sentengiso. Iyabandakanyeka kwaye iqinisekise ithemba lokukhetha wena kukhuphiswano lwakho. Namhlanje abantu bakhetha ukubukela ngaphezulu kokufunda-i-83% yazo zonke izithuthi ze-Intanethi yividiyo. Imveliso yeVidiyo- PR-Ukubhalwa kweMixholo
Natalie's Orchid Island Juice Company kumvelisi Iimveliso zokutya iZiselo Kule minyaka ingama-30 idlulileyo, besizinikezele ukondla iintsapho njengomthombo wesondlo esifanelekileyo. Ukuvelisa incindi entsha, ecocekileyo yelebheli ibingumsebenzi wothando kusapho lwethu. IiJusi zendalo- iiJusi zendalo- IziXhobo zokutya - Iimveliso zeDetoxification
Natural Vitamins Laboratory Corp kumvelisi Impahla zomthengi IMveliso yezeMpilo kunye nezoBuhle Ukuveliswa kwesiko iivithamini kunye nezongezelelo kwiidosi ezahlukeneyo kunye neefom zabanini beempawu Iivithamini kunye nezongezelelo -Izongezelelo zeZondlo, iiMinerali - iiHerbs - UkuLungiswa kweeleyibheli yaBucala
New England Machinery kumvelisi Izixhobo zeMizi-mveliso kunye neeNkonzo Izixhobo zokupakisha Inkokeli yamanye amazwe kwinto entsha kunye netekhnoloji ephezulu, New England Machinery (NEM) yenza oomatshini bokupakisha abakhawulezayo bokutya, isiselo, amayeza, i-nutraceutical, izithuthi, iikhemikhali kunye namashishini okhathalelo lomntu. I-NEM igxile kwi-Unscramblers, Cappers, Orienters, Lidders, Cap Tighteners, Overcappers, Pump Sorters, Pump Placers, Scoop feeders, Plugger, Hopper Elevators, Spout Inserters nokunye. Ukongeza kumgca opheleleyo weemveliso ezisemgangathweni ezisemgangathweni, uyilo lwe-NEM kunye nokwakha oomatshini bokupakisha ngokwesiko kwizicelo ezizodwa. New England Machinery unamava angaphezulu kweminyaka engama-47 kwaye amawaka oomatshini abekwe kwihlabathi liphela, kokubini kwiinkampani zeFortune 500 kunye nakumashishini amancinci okuqala. Eyilwe ngo-1974 ziinjineli ezinamava zokupakisha, i-NEM iyaqhubeka nokutyala imali kakhulu kwi-R & D ukubonelela ngobugcisa betekhnoloji kubathengi bayo abaninzi. Itekhnoloji ephezulu edibene nenkonzo yabathengi ebalaseleyo ifumene i-NEM igama lokuhlonitshwa okuphezulu. Izixhobo zokupakisha - Abangasuki ndawo - IiCappers - iiOrierser - iRetorquers - iiPlac Placers - iiLidders - iScoop feeders
NonaMins Gummy Vitamins zokusasaza Impahla zomthengi IMveliso yezeMpilo kunye nezoBuhle Umgca we-NonaMins wevithamini wonyusa ukhuseleko kunye nempilo iyonke. Ifomula kagqirha eyenziwe ngomgangatho ophezulu wezithako: IiVithamini ezingazenziyo abantwana bagcwalisa iiVithamini ezininzi zinika ukonyusa imihla ngemihla kumzimba womntwana wakho iivithamini ezifanelekileyo kunye neeminerali ezinje ngeVithamini A, C & D, iZinc kunye neCalcium. Indlela elungileyo yokuphucula isondlo kubantu abakhethiweyo. * IiVithamini D ezingezizo iVithamini D zilungele impilo yethambo, ukuthintela umhlaza kunye nokuba sempilweni ngokubanzi. Inciphisa uxinzelelo, ukudinwa, iintlungu zomzimba kunye neentlungu. Hlukana neblah! * IiNonithron zentsimbi ezineeMultivitamini yeyona ndlela imnandi yokufumana i-ayoni yakho. Kunye ne-B-complex, ezi vithamini ziya kunceda ukwandisa amanqanaba akho amandla, ulale ngcono kwaye ulahle inkungu yengqondo, ukuphucula ukugxila kwakho kunye nokunceda ukondla nokubuyisela umzimba wakho iivenkile ezigqityiweyo zentsimbi. Iivithamini -Izibonelelo-zeMpilo kunye neMveliso yeMpilo
NovoaGlobal, Inc. kumvelisi Ezothutho kunye nezixhobo Izibonelelo kunye nezothutho INovoaGlobal ® ngumphuhlisi ophambili kunye nomenzi wolawulo lwezithuthi oluphambili, unyanzeliso lweefoto kunye nezisombululo zobukrelekrele eziyilelwe ukuphucula ukhuseleko ezindleleni, ukunciphisa ukonzakala ezindleleni kunye nokusweleka kunye nokunceda ukuthotyelwa komthetho kunciphise / kusombulule ulwaphulo-mthetho kwiindawo abahlala kuzo. Ikhamera yokukhanya ebomvu yeNovoaGlobal ezenzekelayo kunye nesisombululo sokunyanzeliswa kwesithombe kubandakanya ubuchwephesha bokusika kutshanje kwikhamera kunye nokufunyanwa kwevidiyo, ukubanjwa kwemifanekiso ye-HD kunye nokulungiswa kwemifanekiso, kunye ne-radar yokulandela umkhondo emininzi, ukubala nje ezimbalwa. NgokuKhanya ngokuBomvu kunye nokuNyanzeliswa kweFoto yokuNyanzeliswa, iNovoaGlobal inceda oomasipala ukuba bafikelele kwiVision Zero kunye neenjongo zeSixeko esikhuselekileyo. INovoaGlobal ibonelela ngeendlela zokunyanzeliswa ezinje ngokuwela indlela, igridlock, uphawu lokumisa, ukupaka, ukugqithisa isithuthi, ukuwela kaloliwe, itikiti elektroniki, kunye nekhamera yomzimba. Ukongeza, inkqubo yeNovoaGlobal's Automated Plate Recognition (ALPR) idityaniswe ngokupheleleyo kwisibane esibomvu kunye nesisombululo sokunyanzeliswa kwesantya. Itekhnoloji yezendlela asiyiyo ishishini lethu nje; ngumnqweno wethu. Sisebenza ngokungakhathali ukuphucula ukhuseleko ezindleleni yonke imihla. Ukunyanzeliswa koThutho oluZenzekelayo (i-ATE), uKhuseleko loLuntu, uKhuseleko eziNdleleni, uLawulo lweziThuthi, uKhuseleko eziNdleleni, Ukunyanzeliswa kweefoto, Ikhamera yoKhuseleko eziNdleleni, Ukunyanzeliswa okuzenzekelayo, Ukunyanzeliswa komthetho, Ikhamera yokuKhanya ebomvu, isantya seKhamera
Olivia Oils & Supplements zokusasaza Impahla zomthengi Ukusasazwa kweMveliso yoRhwebo UOLIVIA uphenjelelwa kukuzinikela. Sizimisele ukubonelela ngeemveliso ezinceda abantu ukuba baphile ubomi obusempilweni, obonwabisayo.Kwaqala ngombono wokudala ipotifoliyo eyahlukileyo egxile kwimixholo emitsha. Ulwazi lwethu kunye namava ethu abeka umgangatho ophakamileyo nomgangatho ofunekayo ekudaleni icandelo ngalinye.Njengoko siqhubeka nohambo lwethu olungapheliyo lokuphucula indlela yokuphila esempilweni, niya kuhlala nisembindini we-OLIVIA. Inkampani yokuLawula ukuThumela ngaphandle - Iimveliso zokutya
Organic Farms Vitamins kumvelisi Impahla zomthengi IMveliso yezeMpilo kunye nezoBuhle Organic Farms Vitamins inomgca obanzi womgangatho ophezulu, zonke iivithamini zendalo kunye neemveliso zokutya ezenziwayo ezenziwe e-USA, ezikhule kule minyaka ingamashumi amabini anesihlanu idlulileyo. Olona phawu lubeka ecaleni kuthi kuninzi lweemveliso ezongezelelekileyo ziintlobo ngeentlobo zeefomyula ezinzima esizinikayo endaweni yeemveliso zesithako esinye kuphela. Iifomula zethu ezinzima zijolise kwizizathu ezininzi zeemeko ezithile zempilo ngendlela ebanzi ngakumbi endaweni yokufuna ezinye iimveliso ezininzi zezibonelelo ezifanayo. Organic Farms Vitamins ziqhutywa kubathengisi abakhulu beekhemesti ezinje ngeWalgreens, kunye nezinye iikhemesti ezizimeleyo kunye neevenkile zokutya ezempilo. Sikwanenkqubo yokuthengisa ethe ngqo esebenzayo ePuerto Rico enedatha yabathengi abangaphezu kwama-300,000. Ngoku siyanda kwilizwe jikelele ukuzisa umgangatho kunye neemveliso eziqinisekisiweyo kwamanye amazwe. Sinomdla wokusebenza nabasasazi okanye ngokuthe ngqo kubathengisi abafuna ukubonelela ngempilo yabo abathengi abathengi esisisombululo esithembakeleyo. Izongezo zokutya-Iivithamini-Amalungiselelo eHerbal
PABOT Mnikezi nkonzo Izixhobo zeMizi-mveliso kunye neeNkonzo Ummeli woMenzi INKOKELI KWI-GLOBAL INDUSTRIAL CONSULTING Inkampani yethu inxulunyaniswa neengcali ezinobuchule kwiinkalo ezininzi ezivela kumazwekazi amaninzi. Sikulungele ukusombulula iingxaki zakho ezinxulumene nokwenziwa kwezixhobo zedayimani, izinto zokungqubana, kunye nentsimbi ye-thermosetting. Sibonelela ngezinto ezingavunyelwanga, izixhobo zokuvelisa, iimveliso ezigqityiweyo kunye ezigqityiweyo, kunye neenkonzo zomntu wesithathu zokubonisana. Amava ethu ehlabathi asenza ukuba siqonde iinkcubeko ezahlukeneyo kwaye asinike ubhetyebhetye kunye nokukwazi ukujongana namashishini ahlukeneyo. Ukuthengwa kweMathiriyeli ekrwada-Iinkonzo zokubonisana zomntu wesithathu-Inkampani yeShishini lokuThumela ngaphandle - Izixhobo zedayimani- Izixhobo zeMizi-mveliso
Palladio Beauty Group kumvelisi Impahla zomthengi IMveliso yezeMpilo kunye nezoBuhle Palladio Beauty Group Inkampani ehamba phambili ngobuhle necocekileyo yaseMelika eyasekwa ngo-1999 ngamagqala emizi mveliso kwaye izinze kuMazantsi eFlorida. Ijolise kwimigca yexabiso leProfessional yemveliso ebandakanya: IPalladio Cosmetics Eyaziwayo ngokulunga kwakho kwifomula yezityalo kunye neevithamini. IPalladio Cosmetics ayiSimahla yiParaben, ayinaNkohlakalo, kwaye ibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zeVegan kunye neeMveliso eziSimahla zeGluten. Iprobelle Inkampani ehamba phambili yokunyamekela iinzipho kunye neenyawo, kunye nonyango lokuthintela ukungunda Iprolana Uphawu lomgangatho wemveliso yasesalon egxila ekomelezeni iinzipho eMelika iPalladio ithengiswa kwisitishi sobuhle sobungcali esinamanqaku angaphezu kwama-5,000 50 okuthengisa. . Ehlabathini lonke, iimveliso zePalladio zithengiswa kumazwe angaphezu kwama-XNUMX. Izinto zokuthambisa -Izixhobo zoBuhle- Yenza izixhobo zeKhitshi - Izixhobo kunye neebrashi - Iicitamin ezifakwe kwiVitamin
Palm Beach Atlantic University KwiYunivesithi Iziko leMfundo Izifundo ngokubanzi zeKholeji Palm Beach Atlantic University ihleli entliziyweni yenye yezona ndawo zintle kwaye zithandwa eMelika, edolophini eWest Palm Beach, eFlorida. Ukongeza kubuhle bendalo kwindawo yethu kwi-Intracoastal Waterway, i-PBA ibonelela ngamathuba angenakuthelekiswa nanto emfundo kunye nobungcali. Sinikezela ngaphezulu kweenkqubo zemfundo ezingama-50 kunye neejors kwaye ubungakanani beklasi yethu ephakathi bu malunga nabafundi abali-17. Uya kuba ngumntu oxabisekileyo onjongo, umdla, iimfuno kunye namaphupha axhaswa yonke imihla liqela lamadoda nabasetyhini abazinikeleyo abaziingcali ezaziwayo kunye nootitshala abazinikeleyo. Umbono wehlabathi lobuKristu ufakwa kuyo yonke imiba yamava e-PBA, ukusuka kwigumbi lokufundela ukuya kubomi babafundi. Isidanga kunye nesidanga sokuthweswa isidanga - Iinkqubo zokufunda kwelinye ilizwe - ubuGcisa - Ubuntu - iSayensi
Palm Beach Naturals kumvelisi Impahla zomthengi IMveliso yezeMpilo kunye nezoBuhle Eyilwe kwi2014, Palm Beach Naturals Inikezelwe ekuphuhliseni iindlela ezikhuselekileyo, zendalo kunye nezisebenzayo kwiikhemikhali ezinobungozi nezihlala zinetyhefu kunye namayeza aqhele ukusetyenziswa kwimpilo yanamhlanje kunye neemveliso zobuhle. Umzila we-FOOT SENSE wazo zonke izinto zokunyamekela unyawo lwendalo ufumaneke uyindlela esebenzayo kakhulu kwimichiza esekwe kunye nezinye iimveliso ezingasebenzi kakuhle abathengi abathembele kuzo. Sivelisa eyona mveliso ikumgangatho ophezulu sisebenzisa kuphela ezona zinto zithambileyo zendalo ezivela kulo lonke ihlabathi. Zonke iimveliso zethu zenziwe eMelika kwaye zixhaswe sisiqinisekiso sokubuyiselwa imali esiyi-100%. Ngamafutshane, ilayini ye-FOOT SENSE ngumdlalo otshintsha! Iimveliso zeenyawo zeOrganic-Iimveliso zeendevu-Iiproteni Iziselo-Iiprobiotic
Pegasus Medical.net Mnikezi nkonzo IiSayensi zoBomi kunye neTekhnoloji yoNyango Izixhobo Zibhedlele I-Pegasus Medical Concepts Incorporate yinkokeli yehlabathi ekunikezeleni izisombululo zokugcina eziphumelelayo zemibutho yanamhlanje ekhokhela ukhathalelo lwempilo Imveliso yethu ebanzi ibandakanya uluhlu olubanzi lwezisombululo zokugcina zonyango kunye neekhabhathi zonyango kunye neendlela ezahlukeneyo zothutho, zokuvuselela, kunye neenqwelo zenkqubo. Iikhareji - Iikhabhathi - Ii-Racks ezivulekileyo - UkuGcina-Ifenitshala
Perry Baromedical kumvelisi IiSayensi zoBomi kunye neTekhnoloji yoNyango Izixhobo zonyango Perry Baromedical yinkokeli yehlabathi kuyilo nakwimveliso yeenkqubo zehyperbaric oxygen therapy (HBOT). Izibonelelo zayo ngaphezulu kweminyaka engama-60 yamava ngoxinzelelo lobunjineli bemveliso kunye nemveliso. I-Perry ifake ngaphezulu kweenkqubo ze-1,500 kumaziko ezempilo kuwo onke amazwe angama-40, ngaphezulu kwe-4.5 yezigidi zonyango zigqitywe ngokukhuselekileyo. Amagumbi e-Hyperbaric zizixhobo zonyango ze-US FDA zeklasi yesibini ezisetyenziselwa unyango lweshumi elinesine (14) lwezonyango ezamkelweyo ze-US FDA. Phakathi kwala manxeba angapheliyo kubandakanya ii-DFUs, ukwenzakala emva kwemitha, kunye nokuchaphazeleka okungafunekiyo kunye nokufakelwa. Ukubala kukaPerry phakathi kwabathengi bayo yeyona nkathalo yeenkonzo zononophelo lwamanxeba eziphambili e-USA, i-US NAVY kunye ne-AIR FORCE, kunye nezibhedlele ekubhekiswa kuzo e-USA, Japan, Taiwan, Canada, UK, Spain, Australia, nakwezinye iindawo. I-Perry ivelisa eyona monoplace inkulu kunye neyona nto intle kwihlabathi liphela kunye neemodeli ezimbini zegumbi le-HBOT, kubandakanya zombini uphawu lweSigma kunye neBARA-MED. Amagumbi oNyango lweOxygen Oxygen
Pole Star Mnikezi nkonzo Ukuhamba ngenqwelomoya kunye neAerospace Itekhnoloji yokuKhangela eGPS At Pole Star siphuhlisa itekhnoloji yobuvulindlela, ikugcina uphambili kulwazi lwaselwandle kwaye uxhobisa izigqibo zakho zokwenyani zehlabathi. Siyazingca ngokusebenza noorhulumente kunye namashishini kulo lonke unikezelo lweenkonzo. Sisonke, sidlala indima ebalulekileyo ekudaleni indawo yokusebenza ecacileyo, ekhuselekileyo nehambelana nayo. Uluhlu lwethu olubanzi lwezisombululo luyilelwe ngokukodwa ukuguqula idatha entsonkothileyo ibe kukuqonda okufikelelekayo kulungelelwaniso lolawulo, ukuvavanywa kwezohlwayo, ukuthotyelwa korhwebo, ukulandelela, ukubeka esweni kunye nokukhuseleka kwenqanawa. UkuJongwa koLwandle-uLawulo lweziganeko-Inkonzo yeNgcaciso yeNgcaciso yeNgcaciso-yokuKhangela eMaritime yoRhwebo -Ukuhambelana kweLRIT-uLwaziso lweDomain yaseLwandle
Port Canaveral Mnikezi nkonzo Izibonelelo kunye nezothutho Igunya lezibuko Port Canaveral Isango lodidi lwehlabathi lohambo ngenqanawa, imithwalo, ulonwabo kunye nolungiselelo, kunye ne-portal yemida emitsha. Port Canaveral Inendima ebalulekileyo kunye noxanduva ekwakheni nasekuzinziseni uqoqosho olomeleleyo eFlorida Coast yaseFlorida nakwingingqi yeCentral Florida- ngoku yeyona ndawo yentengiso yabathengi enkulu e-10 e-United States, ngokukhula koqoqosho ngaphezulu komndilili wesizwe. Ngepotifoliyo yemithwalo eyahlukeneyo kunye neemfuno ezikhulayo zommandla wentengiso yommandla, izibuko lityale imali ekwandiseni amandla ngokuphuculwa kwamazibuko kunye neziseko zomhlaba, ezinje ngokwakha kunye nokuhlaziya iindawo ezinamanzi anzulu amaninzi ukuze zihambelane neemfuno kunye nokukhuthaza ukuchuma kwezoqoqosho kulo mmandla. Indawo yokurhweba ngaMazwe ngaPhandle ye-Port ayi-136 ibonelela ngendawo yokuhamba ye-quadrimodal eyahlukileyo, edibanisa ulwandle, umhlaba, umoya kunye nendawo enezibonelelo ezibandakanya ukufikelela kohola wendlela ngokulula, uyilo lomoya olungathintelwanga, ukufikelela kulwandle olunzulu ngeenyawo ezingama-43 kunye nokufumana izinto ezininzi. Ukuhambisa ngenqanawa elwandle-Ukuphathwa kwemithwalo-ukuGcina uLwabiwo-ukuSasazwa-kweCruise Ship Terminal
Port Everglades Umbutho ongekho phantsi kukarhulumente Izibonelelo kunye nezothutho Igunya lezibuko Indawo yamandla ehlabathi kurhwebo lwamanye amazwe, Port Everglades Ngokwesiqhelo iphatha ngaphezulu kwesigidi esinye se-TEU minyaka le kwaye isebenza njengesango eliya eLatin America, kwiCaribbean naseYurophu. Ifumaneka kwizixeko zaseFlorida iFort Lauderdale, iHollywood, kunye neDania Beach, Port Everglades isentliziyweni yenye yezona ndawo zinkulu zabathengi behlabathi, kubandakanya ukuhamba rhoqo kwezigidi ezimalunga ne-112 yezigidi zabakhenkethi kwilizwe liphela kunye nabahlali abazizigidi ezi-6 ngaphakathi kwe-80-mile radius. Port Everglades inokufikelela ngokuthe ngqo kwinkqubo ye-interstate uhola wendlela kunye neFlorida East Coast Railway's 43-acre intermodal container transfer station, kwaye ikufutshane neAtlantic Shipping Lanes kunayo nayiphi na enye izibuko laseMazantsi mpuma eUS. Uphuculo lwenkunzi oluqhubekayo kunye nokwandiswa okuxabisa i-3 yezigidigidi zeedola kwiminyaka eli-10 ezayo kuqinisekisa ukuba Port Everglades iyaqhubeka nokusingatha ukukhula kwexesha elizayo kwezithuthi. Ukuhambisa ngenqanawa elwandle-Ukuphathwa kwemithwalo-ukuGcina uLondolozo-ukuhanjiswa
Port Tampa Bay Mnikezi nkonzo Izibonelelo kunye nezothutho Igunya lezibuko Port Tampa Bay kuye kwavela njengesisombululo esitsha sokubonelela saseFlorida sokuthwala imithwalo, isandisa indima yayo njengesango elikhokelayo likarhulumente lokufumana izinto ezininzi. Ukongezwa kweenkonzo zezikhongozeli zaseAsia ngokuthe ngqo kunye nokunxibelelana okutsha eMexico kuyiphucule kakhulu indima yethu ekukhonzeni eyona rhwebo likhulu nelikhula ngokukhawuleza kwilizwe- iTampa Bay / Orlando I-4 Corridor, eFlorida yokuSasazwa kweFlorida. Lo mmandla weCentral Florida ukwenye yeemarike ezithengisa izindlu kwilizwe kunye nehabhu yaseFlorida yokuhambisa, ukuhanjiswa kwempahla kunye nemveliso. Ikhaya ukusondela kwisiqingatha sabemi baseFlorida babahlali abazizigidi ezingama-21, kwaye besamkela uninzi lwabakhenkethi abangaphezu kwezigidi ezili-126 minyaka le, i-I-4 Corridor ineyona ndawo inkulu yoxinaniso lweDCs kurhulumente. Njengomnyango wangaphambili kwi-I-4, Port Tampa Bay imi kakuhle ukuba ikwazi ukunceda ukukhula okuqhubekayo kommandla, ukonyusa ibango lentengiso, i-ecommerce, ukutya kunye nesiselo, iimveliso zamandla, nolwakhiwo kunye nezinto zokwakha. Ukuhambisa ngenqanawa elwandle-Ukuphathwa kwemithwalo-ukuGcina uLwabiwo-ukuSasazwa-kweCruise Ship Terminal
PortMiami urhulumente Izibonelelo kunye nezothutho Igunya lezibuko PortMiami zihambise i-1,066,738 ze-TEUs, ezimele ngaphezulu kwe- $ 45 yezigidigidi ngexabiso lempahla. PortMiami sinethamsanqa lokuhambisa imithwalo ivela kwiingingqi ezintathu eziphambili zehlabathi, ne-46% yemithwalo yethu ivela eLatin America naseCaribbean, i-33% isuka e-Asiya, i-20% isuka eYurophu, iGlobal Gateway yokwenene. Sijonge ukukhulisa imithwalo ngentsebenziswano namanye amazibuko aseFlorida. Ukuhambisa ngenqanawa elwandle-Ukuphathwa kwemithwalo-ukuGcina uLwabiwo-ukuSasazwa-kweCruise Ship Terminal
Power-Pole Products kumvelisi Iimveliso zaselwandle kunye neTekhnoloji Iiankile zaselwandle kunye nezixhobo JL olwandle (Power-Pole Products), Abavelisi bee-Anchor zaManzi ezingacacanga, banikezela uluhlu olubanzi lwezinto zaselwandle ezenzelwe ukubonelela ngoLawulo lwePhenyane, kubandakanya ne-Blade Series Series iiankile zamanzi, i-Micro Spike Driver yombane, i-CHARGE Isikhululo soLawulo lwaManzi (eMntla Melika kuphela) nangaphezulu. Iiankile zamanzi ezinzulu: ii-ankile - iiMbane zoMbane - iiTrolling Motors - iiMoto zoMbane zoMbane
PPP Traffic Safety Innovations kumvelisi Izibonelelo kunye nezothutho Ukhuseleko lwabahambi ngenyawo nabaqhubi Ngenzondelelo sizisa kwintengiso yendlela ezindala ezisindisa nezikhusela ubomi phambili kwimibutho yokucinga, kwihlabathi liphela, ezinqwenela izisombululo zoqoqosho ezinokuphunyezwa ngokulula ukuhlangabezana neemfuno zendlela eziguqukayo kunye nokuphelisa ukubulawa kwabantu. Iimveliso zokuMakishwa kwePavumente-Ukuphuculwa koPhawu lweTrafikhi-Iimveliso zoKhuseleko eziNdleleni - Iimveliso zoKhuseleko lwabahambi ngeenyawo - Abahluli beNdlela - Iimveliso zoKhuseleko kwabahambi ngebhayisikile- Iiretroreflectometers - Iimveliso zoKhuseleko lweNdiza
Prism Lighting Services kumvelisi Umlilo kunye noKhuseleko Ukukhanyisa kwangaphandle Umvelisi weenkqubo zePrism. Izibane zeZikhukula-Ukulungela okungxamisekileyo-Izixhobo zeNtlekele-UkuKhangela kunye noHlangulo-Izibane ezingxamisekileyo-Izibane zangaphandle zorhwebo
Products On The Go kumvelisi Impahla zomthengi IMveliso yezeMpilo kunye nezoBuhle Products On The Go Ikhulisa kwaye ithengise iimveliso ezisisiseko, ezendalo, ezikhuselekileyo kunye ne-eco-friendly zemveliso kunye nokunakekelwa kwelanga e-US kunye nelungelo elilodwa lomenzi lilindile, i-NPA eqinisekisiweyo yendalo, kunye nogqirha ovunyiweyo. Isisombululo sethu esifanelekileyo sokutyikitya ngokusekwe kwiiseti zokuhamba zilungele indlela yokuphila yabathanda ngaphandle, abahambi ngeempelaveki, kunye nabazali ngokufanayo. Sinikezela abathengi ngenkqubo epheleleyo yendalo yemveliso eyahlukeneyo phantsi kweempawu ezimbini. Iinzwane ezincinci kunye nokukhanya kwelanga ekuhambeni. Iinzwane ezincinci zibandakanya izinto ezenziwa ngumntwana ekubambeni kunye nokukhanya kwelanga kwi-The Go kubandakanya iimveliso zokhathalelo lwendalo, kubandakanya iiminerali ezikhuselekileyo elangeni, kunye nezithambisi kunye neebhals zomlomo. Zonke ezi mveliso zinokuthengwa ngokobungakanani betyhubhu yokuhamba, ukunikezelwa kwesambuku esikhethekileyo, kunye nesiko elenzelwe ingqokelela yokuhamba. I-Rash Cream-Isikrini selanga-iGlitter
QCS Mnikezi nkonzo Iimveliso zokutya Ukuthobela uKhuseleko lokutya Ngobukho behlabathi obuhlala busanda, QCS Uzibophelele ekuncedeni amafama kwihlabathi liphela ukuba ahlale exhulumene kwaye azibophelele kwezona ndlela zokulima zifanelekileyo. Nokuba uyangqinisiswa nathi okanye u-12 unombuzo nje onokuqinisekisa ngento enye: Naphi na apho ukhoyo, silapho kwaye sikulungele ukunceda. UMthetho woKhuseleko loKutya
Ramtech Overseas, Inc. kumvelisi Izixhobo zeMizi-mveliso kunye neeNkonzo IiReins zeplastiki Yasekwa ngo-1987 eTampa, eFlorida, e-USA, Ramtech Overseas, Inc. ngumthumeli ophambili othumela ngaphandle isamente yesinyibilikisi se-PVC kunye nentlaka eyenziweyo evela kubavelisi be-petrochemical yaseMelika nakwamanye amazwe kubathengi baseTurkey, Middle East, Afrika, Asia, naseLatin America. Uluhlu lwethu lwemveliso lukwabandakanya iirobhothi, inkqubo yoxinzelelo yokususwa kwekhonkrithi ephezulu kumzi-mveliso wekhonkrithi we-readymix. IiReins zokwenziwa zeplastiki - i-PVC - i-PE-i-PP-i-EVA- iPluu yeGlu
Ipaki yophando kwi-FAU KwiYunivesithi Iziko leMfundo Education Global Ventures at FAU inceda iinkampani zobuchwephesha ezihlumayo ukuba zande ukusuka kwiimarike zasekhaya ziye eSouth Florida, isixeko esikhulu se-7th e-US ngokwabelana nenethiwekhi yabasebenzi abaziwayo beshishini laseFlorida kunye nophando lobuchule beenkampani zalo ukuba zikhule ngelixa zisaphula amakhonkco awomeleleyo kwimakethi yaseMzantsi Florida. I-Global Ventures ikhawulezisa ukukhula kwakho usebenzisa iminyaka engama-20 + yamava: njengenxalenye ye Florida Atlantic University (FAU) indawo esihlala kuyo sikuqhagamshela kwimithombo yophando ye-FAU, egxile kukhathalelo lwempilo, isayensi yobomi, iisenzi, kunye nothungelwano kunye nobunjineli bolwandle kunye nesayensi yezendalo. Abafundi abangama-30,000 + be-FAU bakhuthazekile kwaye bayafumaneka ukuba basebenze kunye nawe njengabafundi abasafundayo okanye abasebenzi abongeza kwiqela lakho njengoko likhula kwisiseko sabathengi baseMelika. Iinkonzo zethu zibandakanya izibonelelo zokungena kwintengiso, iintshayelelo kwinethiwekhi yethu yabathengisi kunye nabathengisi, ukufikelela kwimali yotyalo-mali kunye nenkcubeko kunye namanye amathuba oqeqesho. Uphando olusekwe kwizifundo-Ushishino-i-Incubator yeShishini-iTekhnoloji kunye neNtsha
RGF Environmental Group, Inc. kumvelisi Iimveliso zokutya Izixhobo zoKhuseleko lokutya I-RGF ivelisa ngaphezulu kweemveliso zokusingqongileyo ezingama-500 kwaye inembali yeminyaka engama-35 + yokubonelela umhlaba ngumoya okhuselekileyo, amanzi kunye nokutya ngaphandle kokusebenzisa imichiza. I-RGF yi-ISO 9001: yophando eqinisekisiweyo ka-2015 kunye nenkampani entsha, ephethe amalungelo awodwa omenzi wechiza kwiinkqubo zokucoca amanzi amdaka, izixhobo zokucoca umoya, kunye neenkqubo zogutyulo lokutya. Ime embindini weZibuko lePalm Beach Zone Enterprise, ikomkhulu leRGF liziihektare ezili-9, lineenyawo ezili-130,000 zokwenza, indawo yokugcina izinto kunye neofisi. Kutshanje i-RGF iphucule amaziko abo, idala indlela ethe nkqo kwimveliso, ivumela inkampani ukuba ibonelele ngeyona mveliso ikumgangatho ophezulu kunye neyona njineli yentengiso. Unyango lwaManzi oMbane-Izixhobo zoKhuseleko lokutya ezingezoMichiza, iiMveliso zoMoya oPhakathi ngaphakathi - Iinkqubo zokuCoca uMoya - Unyango lwamanzi amdaka -Ukuphinda usebenzise kwakhona amanzi-Ucoceko lokutya
Richard's Paint Mfg. Inc. kumvelisi Izixhobo zeMizi-mveliso kunye neeNkonzo Ipeyinti kunye nokuDityaniswa Ngaphezulu kweminyaka engama-60, ibiyinjongo yethu ukukhonza abathengi bethu ngononophelo nangobungcibi obunikezelwa ngokukodwa lishishini eliqhutywa lusapho-usapho lakwaRichard. Ngomnyaka we-1954 uEd Richard, uSr., ikhontraktha yokupenda ngelo xesha, wakha ibhetshi yakhe yokuqala yepeyinti. Ehambisa le mveliso intsha kwabanye abapeyinti, wahamba wathetha nabo njengoko wayefunda eyona nto bayifunayo kwezingubo abazisebenzisileyo. Yaqala njalo ke indlela kunye nelifa leRichard's Paint Production. Kunye neeofisi, ukuvelisa kunye neendawo zokugcina izinto eRockledge, FL, iSpace Coast likhaya lethu. Sikhule ukusuka kwisiqalo esithobekileyo ukuza kuthi ga ngoku sisebenzela abathengi kwiindawo zokuhlala, amaziko, ezorhwebo nezorhwebo ngamakhulu eemveliso phantse kuwo wonke umphezulu ofuna ukuhonjiswa nokukhuselwa. Ipeyinti - Amabala - iVarnishes - iCaulking - iiKhonkrithi zekhonkrithi
Saint Leo University KwiYunivesithi Iziko leMfundo Izifundo Zamazwe ngamazwe Eyilwe kwi1889, Saint Leo University yeyona yunivesithi iphambili, eyunivesithi yabucala eFlorida. ISanta Leo likhaya elingaphezulu kwabafundi bamazwe aphesheya abangama-600 abavela kumazwe angaphezu kwe-100. Sinikezela abafundi bethu ngamava afanelekileyo ekholeji- kwizifundo zethu ezikhokelayo ezinenkqubo ezingaphezu kwama-50 kunye neziqu ezikhethekileyo ezikhawulezayo ze-3 + 1 kunye nomfundi kwi-faculty ratio ye-14: 1 kukuzibophelela kwethu kwiinqobo ezisemgangathweni zeBenedictine. Sinomgaqo-nkqubo wokuzivavanya ongafuni ukuba abafaki zicelo zesidanga sokuqala bathumele i-SAT, UMTHETHO okanye iGRE, amanqaku e-GMAT ngexesha lenkqubo yokwamkelwa. U-Saint Leo ubonelela ngezifundo zokufunda zabafundi abenza isidanga, ukunceda ekwenzeni imfundo yabucala yase-US ifikeleleke kwaye ifikeleleke kubafundi abasuka kwihlabathi liphela. Izifundo zamanye amazwe-Inkqubo yokufunda kwelinye ilizwe
Santa Fe College KwiYunivesithi Iziko leMfundo Izifundo ngokubanzi zeKholeji Santa Fe College yasekwa ngurhulumente kurhulumente kwi1965 ukubonelela ngokufikelela ngokubanzi kwimfundo ephezulu esemgangathweni. Ukusukela ngoko, ikholeji iseke iinkqubo kunye neenkonzo ezizalisekisa injongo yazo yamathuba emfundo, ukuphendula eluntwini, uphuhliso lwezoqoqosho kunye nokwenza izinto ezintsha kuluntu. Ifilosofi yekholeji ibikhona, kwaye iyaqhubeka, ijolise kubafundi. Santa Fe College likhaya kwiziko leplanethi, indawo yokugcina izilwanyana eyaziwayo kwilizwe lonke, i-geological (imiqolomba engaphantsi komhlaba) elebhu yentsimi kunye neholo yobugcisa obuhle, kwaye rhoqo ngonyaka ivelisa uMnyhadala woBugcisa beNtwasahlobo, owona msitho mkhulu kwezenkcubeko nezobugcisa eAlachua County, FL . Santa Fe CollegeIiNkonzo zaBafundi beZizwe ngeZizwe (ISS) zinikezelwe ekuboneleleni ngabafundi bamazwe aphesheya kunye neentsapho zabo ngolwamkelo kunye nesikhokelo sokuziqhelanisa, kunye nokuxhasa abafundi bamazwe aphesheya ngoku neengcebiso zokufuduka kunye nenkxaso eqhubekayo yobhaliso. Izifundo zeKholeji Jikelele- Iinkqubo zokufunda kwelinye ilizwe
SCALA Global Accelerator Umbutho ongekho phantsi kukarhulumente Umbutho Wophuhliso Loqoqosho Utyalomali oluthe ngqo lwaNgaphandle Siliqela elinamava ngeelwimi ezininzi zeenkokheli zeshishini eziphumeleleyo, iingcali, kunye nabangaphakathi abasebenza kunye ukubonelela ngeenkonzo zokubonisana ezikumgangatho wehlabathi kunye neenkonzo zobuchwephesha kwiinkampani ezingezizo ezase-USA, abantu, okanye abatyali mali abafuna ukwenza isicwangciso sokuqhuba ishishini eMelika. Ukubonisana ngokuthe ngqo ngotyalo mali
Sea Hawk Paints kumvelisi Iimveliso zaselwandle kunye neTekhnoloji Iingubo zeHull kunye nepeyinti I-trendsetter yokuthanjiswa kwaselwandle, i-New Nautical Coatings, Inc. kunye ne-brand Hawk yase-Sea zasekwa ngo-1978 kwaye bazinikele ekuziseni kuphela olona mgangatho uphezulu, iimveliso ezikumgangatho waselwandle kunye nokwoneliseka kwabathengi kulwandle lwanamhlanje. Inika uluhlu olubanzi lwesicelo esithile semveliso yokutyabeka elwandle ebandakanya ipeyinti yangaphantsi yokuthintela ukungcoliswa kwamanzi, ukungangenwa kwamanzi kunye nokutywinwa kwezinto zokuqala, ukutyabeka okungcolileyo, iidyasi, i-epoxy, izinyibilikisi, ivanishi kunye nentlaka. Ngoku ibonelela ngeemveliso ezintsha kwihlabathi liphela, iSea Hawk iyaqhubeka nokukhula njengoko iimveliso zayo ziya zifuneka kwihlabathi liphela. Ipeyinti - ii-Epoxies- iiPrimers- iiHull Cleaners- Izinto zokuNxiba ukungcolisa uLwandle
Sentry View Systems kumvelisi Ezobuchwepheshe Khu seleko no Khu seleko Sentry View Systems (SVS) izinze eMelbourne, eFlorida ngeendawo ezongezelelweyo eMontana, eMantla Dakota, e-Utah nase-Wyoming. Ifumaneka entliziyweni yeFlorida Coast Coast, i-SVS yinkampani ephambili yobunjineli. Sigxile ekwenzeni izisombululo ezifanelekileyo zokufuna iindawo ezikude nezirhabaxa. Sibonelela kwiimfuno zabadibanisi beenkqubo ngokubonelela ngezisombululo ezisekwe kumda osusela, ukubek 'esweni, ukuHlola iVidiyo ekude (RVA) kunye nokugcina, izisombululo zamandla akude, ubunjineli besoftware efakwe, ulawulo lwezixhobo ezikrelekrele ukulungiselela ukulungelelaniswa kwenkqubo elungileyo, kunye nokusonjululwa kude. I-SVS iyavuya ukwazisa ngeQonga lethu lokuFumanisa iiNdawo eziDolophini (UMDP) kunye neQonga eliLungisiweyo. Amaqonga ethu ahlanganisa iipakeji zenzwa ukubona, ukuchonga, ukulandela umkhondo, kunye nokubonelela ngamanyathelo okuphikisa iiNkqubo zeAriyali ezingacwangciswanga (UAS). Omabini la maqonga anikwe amandla liqonga lesoftware ye-SVS Nexus C2 kwaye anikezela ngesisombululo esineendleko kunye nesigqibeleleyo kumsebenzisi wokugqibela. Iinkqubo zokuchongwa kwe-CBRN-uVavanyo oluBonwayo oluKude-uKhuseleko lweziSeko-UkuKhuselwa kweeXabiso eziPhezulu-UkuJongwa kweMida-Ukhuseleko lwePerimeter ekude-Uhlalutyo lweVidiyo
SimBlocks.io Mnikezi nkonzo Ezobuchwepheshe Uphuhliso lweZofthiwe SimBlocks.io lishishini elincinci eligxile ekusebenziseni ii-injini zomdlalo we-3D wexesha lokwenyani, ukulinganisa, kunye noqeqesho ngokuxhasa imigangatho yeshishini lendawo ye-geospatial, iimodeli ze-3D, kunye nonxibelelwano lwentsebenzo. https://www.youtube.com/simblocksio/videos Imephu ye-Geospatial - Imephu yommandla womhlaba-iTekhnoloji ye-3D-iTekhnoloji yeJinjini yoMdlalo-ukuBonwa kweMhlaba wonke -Ukulinganisa iMiddleware
SIMETRI, Inc. kumvelisi IiSayensi zoBomi kunye neTekhnoloji yoNyango Ukulinganisa uQeqesho lwezonyango Eyilwe kwi2009, SIMETRI, Inc. inabaqeshwa abangama-32 ababonelela ngemodeli, yokulinganisa, kunye netekhnoloji yoqeqesho; uqeqesho kwezonyango kunye noqeqesho; ubungcali kwimicimbi yezonyango; i-chemistry yohlalutyo kunye nekhompyuter; kunye nophando, ubunjineli, ubuchwephesha kunye neetalente zokwenza izinto ukuxhasa ukusebenza kunye nokufundisa. SIMETRI, Inc. ngumfazi kunye nomncinci onamashishini amancinci ahambisa iimveliso ezintsha, zobugcisa kunye neenkonzo eziphakamisa ubuchule kunye netekhnoloji ngaphandle komda wokuphucula amava oluntu. Ukusukela ekusekweni, oku kuye kwathetha ukuba kwenziwe uphando, kuphuculwe, kwaye kuhanjiswe iimveliso kunye neenkonzo eziphambili, ikakhulu kwisizinda sokulinganisa kwezonyango, kodwa kubandakanya inethiwekhi kunye nobunjineli besoftware, izixhobo zesayensi, uphando ngendalo esingqongileyo kunye noqeqesho. Uqeqesho Lwezonyango -Izixhobo ze-Anatomy zoLuntu- abaQeqeshi boQeqesho lwezonyango
Slice Engineering kumvelisi Ezobuchwepheshe Itekhnoloji yokuprinta ye3D Slice Engineering Uyilo, ukuvelisa, kunye nokuthengisa izinto kubashicileli be3D. Sisebenza nabathengi kunye namashishini asebenzisa ukushicilelwa kwe-3D, ukuvelisa okongeziweyo), kunye nabavelisi be-3D. Ukuba sele usebenzisa ushicilelo lwe-3D njengenxalenye yemisebenzi yakho okanye ungathanda ukufunda okungakumbi malunga nendlela yokwenza njalo, sinokukunceda (okanye ubuncinci sikukhombe kwicala elifanelekileyo)! Umsebenzi wethu wemihla ngemihla kunye nenjongo ephambili kukuguqula izimvo zibe yinyani. Sikwenza oku ngokwenza imveliso eyongezelelekileyo yokufumana izisombululo ezizodwa kubathengi bethu. Iiprinta ze3D- Izixhobo zokuprinta i3D- Ubunjineli boPrinta be3D- iTekhnoloji yokuPrinta ye3D
Southeastern Aerospace Services, LLC. Mnikezi nkonzo Ukuhamba ngenqwelomoya kunye neAerospace Ukulungiswa kweeNqwelomoya kunye nokuLungiswa Iinkonzo zeAerospace mpuma LLC., ligqala elikhubazekileyo kwinkonzo kunye ne-FAA kunye nesitishi sokulungisa i-EASA. Sibonelela ngoGcino / lokuLungisa / lokuLungisa izixhobo zasemkhosini kunye nezentengiso zamandla okubandakanya: Iijenali ze-APU, iiJenereyitha zokuQalisa ii-DC, iiJenereyitha eziPholileyo zoMoya / zeoyile, iiDrive eziQhelekileyo zeSantya, kunye neeJenereyitha eziDibeneyo zeDrive. Sineminyaka engaphezu kwe-150 yobuchule bobuchwephesha be-OEM kwiinkqubo zokuvelisa amandla. Iingcali zethu nganye ine-10-25 yeminyaka yoqeqesho kunye namava kwimbali yomsebenzi ongaphambili ovela eHamilton Sundstrand / UTAS. Ngelixa ikwabonelela ngokulungiswa kwempahla yenqwelomoya kunye nokulungiswa kwezinto, i-SAS ikwabonelela ngokutshintshiselana, ngenkxaso yamalungiselelo, ukuthengiswa kwempahla, amandla okugcina, kunye nezisombululo zolawulo. Sikwanoluhlu olubanzi lolwazi olunxulumene nezinye izixhobo zeenqwelomoya ukubandakanya i-pneumatic, hydraulic, iinkqubo zombane kunye nezinye izinto ezenziwe yiHamilton Sundstrand / UTAS. Isikhululo sokuLungisa i-FAA-Isixhobo esiDala aMandla eenqwelomoya-Iinkqubo zeNqwelo moya
Space Florida urhulumente Ukuhamba ngenqwelomoya kunye neAerospace I-Aerospace kunye noPhuhliso lweSpaceport Space Florida Yenzelwe ukomeleza isikhundla saseFlorida njengenkokeli yehlabathi kuphando lwe-aerospace, utyalo-mali, ukuhlola kunye nezorhwebo. Njengegunya lomoya waselwandle kunye nophuhliso lwezithuba, sizibophelele ekutsaleni nasekwandiseni isizukulwana esilandelayo samashishini oshishino lwendawo. Ngabasebenzi abaqeqeshwe kakhulu, iziseko ezingqiniweyo kunye nerekhodi engenakuthelekiswa nanto yempumelelo, iFlorida yeyona ndawo ilungileyo yamashishini e-aerospace ukuze achume- kwaye Space Florida liqabane elifanelekileyo ukubanceda baphumelele. www., wqwoma.gov Uphando ngeAerospace-uPhuhliso lweSpaceport -Isithuba-soPhuhliso lwezoQoqosho
Specialty Products of America kumvelisi Izixhobo zeMizi-mveliso kunye neeNkonzo Izongezo zeKhemikhali Umkhokeli wecandelo lemichiza ekhethekileyo kwi-15 iminyaka e-USA, Specialty Products of America Igxininisa ekwenziweni kweMichiza yoNyango lwaManzi kunye neMichiza yeShukela. Ishishini losapho lesizukulwane sesibini elaqala ngo-1978, iiMveliso eziZodwa zibeka ukugxila kwizisombululo ezitsha nezizinzileyo zamashishini eswekile kunye nemizi-mveliso enamanzi. Iikhemikhali zethu zinceda ukuphucula ukusebenza kakuhle kwenkqubo, isivuno kunye nomgangatho wemveliso. Sithengisa ii-Antiscalants, i-Scale Removers, i-Biocides, ukupholisa kunye neMveliso yeBoiler yoNyango lwaManzi, i-Ro Antiscalants, i-Corrosion Inhibitors kunye nokunye. Itekhnoloji ekhokelayo yentengiso ye-SP ibandakanya i-EVEREST ™, i-BIORID ™, i-BIOSPER ™, iTHERMAPRO ™, iTORPEDO ™, i-RO Pro ™, iSWEETOL ™ kunye neRAPISOL ™. Ngamava okufumana umsebenzi ngokufanelekileyo, sinokunceda ekufumaneni isisombululo esifanelekileyo kwiimfuno zakho. Iikhemikhali ezizodwa-iiKhemikhali zoCoca uMzi-zii-Specialty Surfactants - Amachiza oNyango lwaManzi
Iqela leSpecOps Inc. kumvelisi Umlilo kunye noKhuseleko Izixhobo Zokuhlangula Iqela leSpecops liqela elijolise kwisisombululo sehlabathi. Siphuhlisa, senza kwaye sithumele itekhnoloji esindisa ubomi kuMkhosi kunye nabaPhenduli bokuqala kwihlabathi liphela. Siligqala elikhubazekileyo elinenkampani kwaye sisebenza. Abasebenzi bethu baquka amagqala omkhosi, abaPhenduli bokuqala kunye neeNjineli. Lonke uphuhliso lwethu, ukuhlangana kunye nemveliso lwenziwa eFlorida ukuya kwibhodi yesekethe yokugqibela. Isiteyitimenti somnqophiso wethu kukuba "sikhusele abo basikhuselayo." Izixhobo zokuKhangela kunye noKuhlangula-Izixhobo zoPhononongo-Izixhobo zoNyanzeliso loMthetho-Isixhobo sokuSebenza soMkhosi
Stimpson kumvelisi Izixhobo zeMizi-mveliso kunye neeNkonzo Isixhobo seHardware / sokuQinisa Stimpson, Eyasekwa ngo-1852, ngumenzi ophambili wase-US kunye nomthengisi wee-grommets kunye neewasha, iiziso zamehlo, iiseti ze-snap, iiplagi zemingxunya, kunye nokufaka oomatshini. Njenge-ISO: 9001: 2015 inkampani eqinisekisiweyo, Stimpson ibonelela ngeenkonzo zobungcali kubathengi, ngezisombululo zokuqinisa ibanga elipheleleyo phantsi kophahla olunye. Ubunzulu nobubanzi boluhlu lwethu luvumela abathengi bethu ukuba benze-into enye kuzo zonke izinto zokubopha, begcina ixesha kunye nemali. Abathengi baxhomekeke kwinqanaba lethu lokusilela kufutshane-zero kunye nokukhokela kumzi-mveliso, ngexesha lokuhambisa ukugqitha kulindelo lwabathengi babo kunye nokuhlangabezana nemihla ebekiweyo. Izisombululo zokuzila ukutya: Iigrommets kunye neewashi zamehlo Ukucwangcisa iiHole plugs Ukufakela oomatshini Ndwendwela Stimpson Idokodo ukuze uthethe nengcali yokukhawulezisa kwaye uphonononge iindlela zokubopha zelaphu zakutshanje okanye undwendwele ivenkile yethu yewebhu ngoku-odola ngokulula nangokukhuselekileyo kwi-intanethi ngeodolo ebekwe nge-3: 00 ngokuthumela kwangolo suku. Fumanisa i Stimpson Umahluko. IiGrommets- Iwasha - iIyelet - iiSnap zokubeka - iiPlagi zeHole - Izinto zokubopha - oMatshini bokuqinisa
Stream2Sea kumvelisi Impahla zomthengi IMveliso yezeMpilo kunye nezoBuhle Stream2Sea yeyOKUQALA kunye nesiQinisekiso esipheleleyo solwandle samaminerali esihamba elunxwemeni esihamba ngentetho kwaye siqinisekisa ukuba zonke izithambiso zolusu kunye nolusu lwethu ziyavavanywa kwaye zingqineke zikhuselekile kwiintlanzi nakwimibungu yekorale. Indalo yethu, ukhathalelo lolusu lwe-hypoallergenic alunazo iikhemikhali eziyingozi ezinjenge-benzophenones, i-oxybenzone, i-avobenzone, i-parabens, i-DEAs / i-MEAs / i-TEAs, i-SLS okanye i-SLES kunye nezilondolozo. I-Eco-Friendly i-sunscreen-Isitshisi sokuhambisa izandla-Iimveliso zeenwele-Iimpahla ze-UPF
SurveyTelligence, Inc. Mnikezi nkonzo Iinkonzo zezeMali nezeNgcali Ukubonisana noLawulo noQeqesho Umsebenzi wehlabathi SurveyTelligence, Inc. Kukwakha imibutho eyomeleleyo, ebuthathaka ngakumbi, elungelelanisiweyo. Sisebenzisa uxilongo olunamandla loyilo, izixhobo kunye nobungcali, ukuphatha ishishini njengeziko, hayi isiqwenga esinye sephazili. Sigxininisa kuguquko lombutho sisebenzisa "ulungelelwaniso" njengesakhelo. Ukwazisa i-PULSES ngezibonelelo kunye nezisombululo. Itekhnoloji entsha enika uphicotho rhoqo malunga nokuba loluphi na olona shishino, ezona nkqubo zeshishini kunye nabantu zilungelelaniswe ukonwabisa umthengi. Izinto ezi-4 ze-DNA zeshishini kufuneka zilungelelaniswe kwaye zisebenze kwikhonsathi yokukhulisa nokwandisa ingeniso. Itekhnoloji ilula, idashboard ihlaziywa qho busuku, ngokwazisa ngemeko yokwenziwa kweshishini ukubonelela ngesakhono sokwenza izigqibo ezifanelekileyo. Akukho Mimangaliso kwakhona! Uphuhliso loPhononongo-uPhononongo lweSaveyi-uPhando lokuoneliseka kwabaThengi
Susa USA, LLC kumvelisi Izixhobo zeMizi-mveliso kunye neeNkonzo Izixhobo zokupakisha I-SUSA USA yinkampani ephethwe lusapho kwaye isebenza ngezizukulwana ezintlanu zamava. Sigxininisa kuyilo olupheleleyo lwezityalo ukubandakanya bonke ubunjineli, ukubekwa kwezixhobo, uyilo olupheleleyo lweCAD kunye nemizobo. Iingcali zethu zonke zineminyaka engaphezu kwe-10 yamava ekwenziweni kokulungiswa kokutya kunye nezixhobo zokupakisha, zijolise kwimizi-mveliso yobisi kunye nolwelo. Uyilo lwezityalo kunye nezoBunjineli -Iinkqubo eziQinisekayo zokuTya zokuTya-Izixhobo zoLungiso loKutya- Ukuzalisa oomatshini- Izixhobo zokwenza itshizi- Izixhobo zensimbi ezingenazintsimbi - Iipasta
Tactical Superiority, Inc kumvelisi Ukhuseleko noKhuselo Izixhobo zompu Tactical Superiority, Inc ngumvelisi we-OEM weenxalenye kunye nezinto zeArms ezincinci kwiShishini lezoKhuselo. Ngaphezulu kweminyaka eli-10, besibonelela ngoMzi mveliso nakwabanye abavelisi ngamacandelo abaluleke kakhulu ekufuneka bewakhile kwimveliso zabo. Iibhombu zoMipu -Ukuhlaselwa koMbhobho weRifle-Izixhobo zoMipu eziSandla
Techfit Digital Surgery Mnikezi nkonzo IiSayensi zoBomi kunye neTekhnoloji yoNyango Itekhnoloji yoPhando ngokutsha TECHFIT Digital Surgery ibonelela ngezixazululo ezibanzi ezilungiselelwe izifo zomguli ezifuna ukwakhiwa kwakhona okuntsonkothileyo, ukwandisa ukuchaneka kotyando, ukunciphisa ixesha lotyando, ukuphucula ubuhle kunye neziphumo zokusebenza, ezivumela abaguli kunye noogqirha ukuba bafikelele kwezona zicwangciso zotyando ziphambili kunye nezixhobo zokufakelwa kwesiko. Ukumodareyitha kwe3D kwezonyango- Utyando olwakha ngokutsha - Isisombululo seMaxillofacial-Isisombululo seCranial - Izinto ezityaliweyo zotyando
The Golf Car Connection kumvelisi Ezothutho kunye nezixhobo Izithuthi eziluncedo Ukudibana kweGalufa leMoto kuthumela kwelinye ilizwe iinqwelo zegalufa kunye neenqwelwana zegalufa ukusukela ngo-1981. Simi kuMazantsi eFlorida, siyinkulumbuso kumthengisi weenqwelo zegalufa kunye neenxalenye zazo zonke iimveliso zeenqwelo zegalufa. Njengomthengisi ogunyazisiweyo we-Yamaha, ukuDityaniswa kweMoto yeGalufa kugcina iinqwelo zegalufa kunye neenqwelo zegalufa zazo zonke iinqwelo zegalufa ze-Yamaha, kunye nezithuthi ze-Yamaha. Ukudityaniswa kweMoto yeGalufa kukwagcina uninzi lweenqwelo zegalufa zabanye abavelisi abanjengeClub Car, i-EZ-GO, njl. Njl. Sinokufumana iindawo zokuyeka ukusebenzisa izithuthi ezinje ngeCushman, Taylor Dunn, neMotrec. Iinqwelwana zeGalufa-ezothutho kwiihotele-iZothutho lweMarina- Izithuthi zaseMarina- Izithuthi eziSebenzayo-Iinkonzo zeNdwendwe zezoThutho
The South Florida District Export Council Umbutho ongekho phantsi kukarhulumente Iinkonzo zezeMali nezeNgcali Iingcebiso kwezorhwebo The South Florida District Export Council Ngumbutho oqulathe iinkokheli zeshishini ezivela kuluntu lwasekhaya, olunolwazi nobungcali kushishino lwamanye amazwe lubonelela ngomthombo wengcebiso yeengcali kwiinkampani zaseMonroe, Miami-Dade, Broward, Palm Beach Martin, St Lucie & Indian River. Amanyene ngokusondeleyo namaZiko oNcedo lwaMazwe angaphandle oNcedo lokuThumela kumazwe angaphandle kunye ne-US kunye neNkonzo yoRhwebo lwaNgaphandle, ngaphezulu kwe-60 DECs zikhona kwilizwe liphela ukuxhasa iinzame zikaRhulumente wase-US zokukhuthaza ukuthumela ngaphandle. Iinkonzo zorhwebo zamanye amazwe -Ukucebisa ngezoRhwebo-uPhuhliso lweShishini - Ukuthobela ukuThumela kwelinye ilizwe- Ukunxibelelana noRhwebo lwaMazwe ngaMazwe
The Teething Egg kumvelisi Impahla zomthengi Izixhobo zabantwana The Teething EggIimveliso eziwonga amabhaso kunye noyilo lobunikazi bubungakanani obugqibeleleyo, imilo kunye nobunzima bezandla ezincinci kunye nemilomo. Teethers zethu kunye nezinto zethu zenziwe apha e-USA ngezinto zebakala lokutya ze-FDA kunye nokhuseleko oluvavanyelwe umhlaba wonke kwiintsana. Zonke iimveliso zethu zixhaswa ziintsuku ezingama-90 zokubuyiselwa kwemali. Cwangcisa namhlanje, ngaphandle komngcipheko, kwaye wenze umntwana wakho ancume! Imisesane yoLuhlu-Izixhobo ezongezayo
Thomalex Mnikezi nkonzo Ezobuchwepheshe ngomnxeba Thomalex yinkampani yetekhnoloji ebekwe eMiami ebonelela ngezixhobo zokubhukisha kwi-intanethi kunye nequmrhu kunye neenkonzo kwiarhente ezincinci zokuhamba ezikwi-Intanethi, iiNkampani zoLawulo lokuHamba kunye neeNkampani. UmNxibelelanisi weSicelo seSoftware-iZicelo zeFowuni eSebenzayo-Isixhobo sokubhukisha iinqwelomoya kwi-Intanethi
Thompson Pump kumvelisi Izixhobo zeMizi-mveliso kunye neeNkonzo Iipompo Thompson Pump iyahlonitshwa kwihlabathi liphela ngemigca enzima yemisebenzi enzima yeempompo ezikumgangatho ophezulu, ezisusela kubukhulu ukusuka kwii-intshi ezi-2 ukuya kwezi-18. Thompson Pump Uthengisa yonke imigca yeempompo kwiindawo zoomasipala, ulwakhiwo, izindlu eziqeshisayo kunye nezemigodi. Izixhobo zoKwakha -Izixhobo zokumba umgodi- iiMpompo zoShishino- iiMpompo zaManzi- iimpompo zentsimbi
Total Translations Group Mnikezi nkonzo Iinkonzo zezeMali nezeNgcali translation Iyonke iinguqulelo Inc.yinkampani yokuguqulela nokutolika kwilizwe laseFlorida. Yasekwa ngo-1999, iinguqulelo zizonke yinkampani egunyazisiweyo ngu-A + yiZiko eliNgcono leShishini kunye nelungu elidibeneyo le-American Translator Association. Ngamava eminyaka yokunceda abathumeli ngaphandle kunye neenkampani kwiimarike zamanye amazwe, iinguqulelo zizonke ziyawaqonda amandla olwimi kunye netekhnoloji yokuqhuba ishishini kubathumeli ngaphandle kunye neenkampani zaseMelika. Sidibanisa ubuchwephesha obuphambili kunye nolwazi lwabantu ukwenza iinkonzo zamanye amazwe zenze amashishini athumela ngaphandle. Masikuncede kutoliko oluphezulu, ukuguqulela, ukuthengisa ngokwedijithali, kunye neenkonzo zemithombo yeendaba kwiimfuno zakho. Iinkonzo Zamazwe Angaphandle kunye Namashishini: Ukuguqulelwa kwamaxwebhu asemthethweni nawezemali kwiilwimi ezininzi. Ukutolikwa ngenkxaso yezobugcisa kwishishini. Ubukho beelwimi ezininzi kwi-Intanethi, ukuthengisa kwidijithali. Ukupakisha kunye nentengiso yemathiriyeli ngeelwimi ezininzi. Iividiyo ezisebenzayo kunye nemizobo. Uguqulelo loXwebhu-iTekhnoloji yoGuqulelo lweNcwadi- ukuguqulelwa kweFom yeShishini- iiNkonzo zoGuqulelo lweVidiyo
Triple Strand Global Solutions, LLC Mnikezi nkonzo Ukubonisana, ukucebisa, kunye noPhuhliso Ukuhamba ngenqwelomoya, iAerospace, uKhuseleko, ukunyanzeliswa komthetho, kunye noQeqesho Inkampani yokubonisana, yokucebisa kunye nophuhliso. Ukuhamba ngenqwelomoya-Ubukrelekrele- oNyango-uKhuselo noKhuseleko kweziNgcebiso
U.S. Commercial Service urhulumente Iinkonzo zezeMali nezeNgcali Ukubonisana noLawulo noQeqesho Iimakethi zeHlabathi zincedisa kwaye zixhase amashishini ase-US kwiimarike zamanye amazwe ukukhuthaza ukuchuma kwezoqoqosho e-US. Sisebenzisa inethiwekhi yethu yokukhuthaza urhwebo kunye neengcali zomgaqo-nkqubo ezibekwe ngaphezulu kwe-100 U.S. Commercial Service ii-ofisi kwilizwe liphela nakwii-ofisi ezingama-70 zamazwe ngamazwe, iiMarike zeHlabathi zikhuthaza ukuthunyelwa kwelinye ilizwe e-US, ngakumbi kumashishini amancinci naphakathi; ukuqhubela phambili nokukhusela umdla kurhwebo lwaseMelika phesheya kwezilwandle; kwaye kutsala utyalomali lwangaphakathi eMelika. Ukukhuthazwa kokuthumela ngaphandle-ukuThunyelwa kumazwe angaphandle-Ukucebisa kumazwe angaphandle-Imigaqo yokuThunyelwa kwelinye ilizwe lase-US
UltraVision Corporation kumvelisi IiSayensi zoBomi kunye neTekhnoloji yoNyango Izixhobo zonyango UltraVision Corporation ngumvelisi weenkqubo zonyango ze-ultrasound zonyango. Imveliso yethu yeflegi yi-UltraVision-XS eyindawo yoKhathalelo lweNkqubo ye-Ultrasound ethetha ukuba yenzelwe ukuba isiwe ebhedini yesigulana okanye ebaleni. I-UltraVision-XS yamkelwe yi-FDA, yenza zonke iindlela ze-ultrasound kubandakanya i-elastography, shear, kunye ne-photoacoustics. Inkampani iqhuba uphando kwaye inikezela ngeemveliso ezinjenge-UltraVision-XR eliliqonga lophando oluvumela uphando lwe-ultrasound ngabanye neeyunivesithi. Uphando olwenziweyo ukuza kuthi ga ngoku lukhokelele kwiindlela ezintsha ezibonisa ukubonwa kwemicrooccations yokufumanisa umhlaza wamabele. Iinguqulelo zeqonga lophando zinokuvelisa ukuya kwizakhelo ezingama-10,000 ngomzuzwana. I-UltraVision-LM siskena esisebenza ngesandla sebhetri esiqhagamshelwe kwi-Wi-Fi kwizicelo ezizodwa. Izikena ziyafumaneka njengezinto ezingadityaniswanga ezivumela iinkampani ukuba zongeze umxholo wasekhaya ukunciphisa iirhafu kunye nemisebenzi. I-Ultrasound Medical Diagnostics-Ukufunyanwa komhlaza- Isandi se-Ultras-Neurodiagnostics
University of Florida KwiYunivesithi Iziko leMfundo I-ELI kunye neSikolo esiPhumeleleyo UF English Language Institute kwaye iSikolo esiPhumeleleyo siya kubonelela ngolwazi malunga nesiNgesi esinzulu, kunye nezifundo zeMasters kunye nezobuGqirha ezifumanekayo kwi # 1 eyunivesithi yoluntu eFlorida. Siyakumema ukuba uthethe nommeli malunga nezifundo zesiNgesi ezenzelwe wena kumaqela abasebenzi bakho okanye ootitshala. I-ELI inezifundo zobuso ngobuso, kunye nezifundo zeXesha elifutshane lesiNgesi kwiKhompyutha zabaqeshwa bakho nakweyiphi na imboni. I-ELI kunye neSikolo seGraduate sinokubonelela ngesikhokelo sokwamkelwa, ukwamkelwa kwabafundi kwi-ELI enemiqathango, kunye namathuba okugqwesa kwizifundo kunye nokuzibandakanya kwabahlali eGainesville, eFlorida. Wamkelekile kwi-Sunshine State. Phila inkcubeko, funda ulwimi, thanda iiGators! IsiNgesi kunye noFundo lweziFundo
University of North Florida KwiYunivesithi Iziko leMfundo Inkqubo ye-ESL The University of North Florida e-Jacksonville, eFlorida kunye nokubhaliswa kwe-17,016, i-UNF yinto efanelekileyo yokubonelela abafundi ngamathuba ahlukeneyo emfundo kunye namava amakhulu e-campus. I-UNF ineenkqubo ezingaphezulu kwama-55 zesidanga sokuqala (isidanga se-bachelor's degree) ngaphezulu kwe-100 ezinokubakho. Ukongeza, i-UNF ine-30 + yokuthweswa isidanga (isidanga senkosi okanye isidanga sobugqirha) iinkqubo. Abafundi abavela kumazwe angaphezu kwama-70 babiza ikhaya le-UNF, besenza ikhampasi enombono wehlabathi. Sinamathuba awahlukeneyo okufunda afana neLatin American kunye neCaribbean Scholarship, kunye ne-International Student Scholarship enceda abafundi abaneemfuno zemali zekholeji. Kunye neenkqubo zesidanga, i-UNF ibonelela ngeNkqubo yesiNgesi. Inkqubo ye-ELP inamanqanaba amathandathu emfundo. Iiyure ezingama-22 zokufundisa ngeveki kunye nobukhulu beklasi babafundi abali-12-16. Amava enkcubeko abandakanya uhambo lwasendle, amathuba okuzithandela, kunye nabafundi be-UNF njengeqabane lencoko. Iinkqubo zoLwimi lwesiNgesi-iikhosi zeKholeji zokuzilungiselela
University of South Florida KwiYunivesithi Iziko leMfundo Izifundo ngokubanzi zeKholeji The University of South Florida yimpembelelo ephezulu eyunivesithi yophando eyunivesithi enikezelwe kwimpumelelo yomfundi. Kule minyaka ili-10 idlulileyo, akukho yunivesithi kawonke-wonke kweli lizwe ikhule ngokukhawuleza kwiiNdaba zase-US nakwi-World Report kwinqanaba leyunivesithi likazwelonke kune-USF. IYunivesithi ngoku ikwinqanaba le- # 46 phakathi kwiiyunivesithi zikarhulumente kwi-US News kunye neNgxelo yeHlabathi kwiZikhundla zeYunivesithi (2021) kunye nePrinceton Review idwelisa i-USF njengeKholeji yeXabiso eliBalaseleyo yokubonelela abafundi ngemfundo ekumgangatho ophezulu kunye nokulungela amakhondo ngeendleko ezifikelelekayo. Ubhaliso lwe-USF ngaphezulu kwabafundi be-50,000, kubandakanya abafundi be-3,450 bamanye amazwe abavela ngaphezulu kwamazwe e-140, kuzo zonke iikhampasi ezintathu eTampa, eSt. Petersburg, naseSarasota-Manatee. I-USF yonyulwe njengeDyunivesithi ePhambili yoPhando yiBhodi yeRhuluneli yaseFlorida, iyibeka kwelona candelo likwinqanaba eliphezulu phakathi kweeyunivesithi zikarhulumente ezili-12. Nxulumana neMigangatho yoBugqirha-IziFundo zaMazwe ngaManye amazwe-UkuFunda kwi-Intanethi
Unnique - The Premium Brand of Hair Treatments kumvelisi Impahla zomthengi IMveliso yezeMpilo kunye nezoBuhle Unnique - The Premium Brand of Hair Treatments... inkampani ekhethekileyo kwaye ijolise ekunikezeleni isindululo esahlukileyo kwiNtengiso yezoBuhle, ngokuqhubekekayo isebenza kulwakhiwo, uphando kunye nophuhliso lweemveliso ezingaguquguqukiyo ezihlangabezana neemfuno ezahlukeneyo zeenwele zabantu kunye neeNgcali zoBuhle. Eyona njongo yayo iphambili kukuhombisa iinwele, ngenxa yesi sizathu, ikhule ngokuhamba kwexesha, i-fusion ye-botanical fusion, edibanisa izinto ezisebenzayo ezivela kwimimandla eyahlukeneyo yomhlaba ukucebisa nganye yeefomula kwiphothifoliyo yemveliso esiyibonisayo. Iimveliso zokhathalelo lweenwele-Unyango lweKeratin-Ioyile yeArgon - Izinto zoBuhle-iiMveliso zeSalon yeenwele -Izixhobo zeBeautician
Venergy kumvelisi Ucoceko lweTekhnoloji I-LED kunye nezibane zeSolar Izibane (i-LED kunye ne-UV-C), Solar, PPE Gear Izibane (i-LED kunye ne-UV-C) -i-PPE Gear- uLawulo loKwakha-Ukulungela okungxamisekileyo -Ukubonisana ngamandla-Itekhnoloji yezaMandla eSolar
Vero Water kumvelisi Izixhobo zeMizi-mveliso kunye neeNkonzo Izixhobo zokucoca amanzi kunye neTekhnoloji Vero Water ngumboneleli okhokelayo we-eco-friendly Luxury nangoku kunye namanzi ahlwahlwazayo kumzi-mveliso wokubuka iindwendwe, wakhonza ngaphezulu kwabathengi abazizigidi ezingama-75 ngonyaka, e-US nakwamanye amazwe ali-12 kwihlabathi liphela. I-Vero ibonelela ngokungcamla okuhle kakhulu nangoku kunye namanzi ahlwahlwazayo ayenye indlela efikelelekayo emanzini asebhotileni, azinzileyo kwindalo esingqongileyo, kunye nophawu olunenzuzo ngakumbi kumzi-mveliso wokubuka iindwendwe xa kuthelekiswa namanzi ebhotile. Inkqubo yokuhlanjululwa kwelungelo likaVero yenza ukuba abathengi bacoce, bapholise, bazalise kwaye basebenze iVero nangoku kunye namanzi aqhwethayo kwimpompo nakwimfuno. Vero water Ikhonzwa ngokuzingca ngabapheki abaphumeleleyo, abaxhasi, iihotele, iindawo zokuhamba ngeenqanawa, kunye neeofisi kwihlabathi liphela. Isimbo sokutyikitya kukaVero sicocekile kwaye sihlwili - siphawulwe ngumlomo oqaqambileyo kunye nokukhanya okukhanyayo nokuhlaziyayo. Umgangatho obalaseleyo, odityaniswe nenqanaba lenkonzo elingenakuthelekiswa nanto elinikezelwa kubaxumi, liqhubekile Vero Water kwiindawo zokutyela ezininzi ezaziwayo kwihlabathi liphela. Izixhobo zokutya - Izixhobo zehotele - Izixhobo zasekhitshini - Amanzi acocekileyo acocekileyo naKhazimlayo - Amanzi eBhotile
WitZense UMboneleli weNkonzo / uMhambisi weNkonzo Itekhnoloji yoLwazi (iTelecom) I-RFID Inventory Tracking kunye neVidiyo yokuKhangelwa kweTekhnoloji yeVidiyo Ukulandela umkhondo kwempahla ye-IoT kunye nezisombululo zolawulo lomngcipheko, ezixhaswe siselfowuni ye-4G LTE, amaqonga asekwe kwilifu kunye nokufunda komatshini ukubonelela ngendawo, ividiyo kunye namanqanaba eempahla ezikhoyo. Ukulandelwa kweeasethi zeGPS-Ividiyo yeTelematics -Ukulandelela uLuhlu lweeRFID- iiSensors zeIoT zeMizi-mveliso
Women's Business Centers In Florida Umbutho ongekho phantsi kukarhulumente Umbutho Wophuhliso Loqoqosho Uphuhliso lwamashishini Iingcebiso kwezamashishini, uqeqesho, ukucebisa, kunye neeworkshops zabasetyhini abafuna ukuqala, ukukhula, ukuqhuba nokwandisa amashishini aphumeleleyo. Iingcebiso kwezamashishini-uQeqesho kwezeShishini-ukuCetyiswa kweShishini-ukuShishina
World Housing Solution kumvelisi Ukhuseleko noKhuselo Ulwakhiwo lwangaphambili World Housing Solution, Inc kuyilo lokwakha ukwenziwa okuye kwaphuhlisa ubuchule ekudalweni kwesiza esilandelayo sesisombululo kunye nolwakhiwo lwezisombululo. Ezi teknoloji ziyilelwe kwaye zenziwe e-USA zilula, zinemodyuli kwaye zisebenza ngokufanelekileyo. Iinguqu ezinokubakho zeendawo zokufihla ubushushu zibonelela ngokuhamba kwamandla ahlanganisiweyo, amanzi kunye nonxibelelwano, ezilungele ukuya naphina kwiphakheji yendlela esemthethweni njengeeKlinikhi ezikumaVili ™ nakwiiYunithi zeMpendulo eziShukumayo ™. Oku kunceda abo balwa imfazwe, abaphenduli beentlekele, iinkampu zabasebenzi kunye neengcali zonyango ukuba basebenze kwiindawo ezinamandla ezithintele amandla. Imbali yethu yeminyaka eli-10 inabaxhasi ababandakanya iSebe lezoKhuselo lase-US, i-US ARMY, i-US NAVY, i-US AIR FORCE, i-US Special Operations Command, i-US MARINE CORPS, iDepartamento DE SALUD, iZizwe eziManyeneyo, i-FEMA, uMkhosi woSindiso kunye namanqanaba amaninzi. Oomasipala kulo lonke elaseMelika. Ulwakhiwo oluQinisekisiweyo lolwakhiwo olusebenzayo ngokukhawuleza - Iiklinikhi zezoNyango ezinamavili - IiYunithi zeMpendulo eziSelfowni - Izindlu zokuPhendula ngeNtlekele - Izindlu zaseMkhosini - Iindawo zokufihla intloko ezingxamisekileyo
World Panel Products Inc. kumvelisi Iimveliso zaselwandle kunye neTekhnoloji Izixhobo zokwakha amaphenyane Iimveliso zePhaneli yeHlabathi yaqala ngo-1993 ukwenza inguqu kwindlela abakhi beePhenyane, abalungisi kunye nezigidi zabanini bamaphenyane abafumana iinkuni ezisemgangathweni kunye nezinto ezidityanisiweyo. Namhlanje, singabasasazi bephaneli yaselwandle e-USA enezixhobo ezi-2 ezomeleleyo, kwaye ezikhulayo. Iqela lethu lokuthengisa elinolwazi likulungele ukuphendula nayiphi na imibuzo onokuba nayo malunga neemveliso zethu kunye nokusetyenziswa kwazo. Sinomdla wokunceda abathengi bethu bafumane izisombululo kwiingxaki zabo ukuze babuyisele amaphenyane abo emanzini ngexesha elifanelekileyo. Abathengi bethu bahlala bethunyelwa kuthi ngabahlobo babo ngokusekwe kumava aqinisekileyo ababenawo ekusebenzeni nathi kunye nomgangatho wethu. Singabasombululi beengxaki: Ukusuka kwindawo eshelfini yokukubuyisela emanzini okanye kwiprojekthi yemveliso yexesha elide, sinendlela yokukhawulezisa iodolo yakho okanye ishedyuli yemveliso ukuqinisekisa ukuba ukuhanjiswa kwenziwa ngokukhuselekileyo nangeendleko ngokufanelekileyo. Ngaba unayo into ethile engqondweni? Ufuna amaplanga afanayo? Siziingcali zokhuni. Iplanga Lamanzi - Iipaneli Zomthi Zokwenziwa - Izinto Zokwakha Iphenyane
© 2021 Expo Exhibition yaseFlorida. Yenziwe simahla sisebenzisa iWindowsPress kunye Colibri